လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်မှု (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက် (2016)
Volume ကို 19ဇွန်လ 2016, စာမျက်နှာများ 1-18
Roberta အေ Schribera, ,
အမန်ဒါအီး Guyera, b,
•ကျနော်တို့လူမှုရေးအခြေအနေတွင်တစ်မူဘောင်, ဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်တင်ပြသည်။
•ဤမူဘောင်လူမှုရေး sensitivity ကိုအတွက်ဦးနှောက်-based တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအကြောင်းကို pivots ။
• Neuroimaging လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ပေါ်တွင်အလုပ်, အဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်နှင့်ရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
•ကျနော်တို့ဦးနှောက်အစီအမံအညွှန်းကိန်း neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖို့အသုံးပြုစေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းမှကြီးထွား sensitivity ကိုတစ်ဦးကာလအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးအခင်းအကျင်းကသူတို့ကိုထိခိုက်စေပုံကွဲပြားကြသည်။ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များ, endogenous အဆိုအရ, ဇီဝဗေဒအချက်များထက်ပိုသောဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်ပြီးအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီ၏အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်အဆိုးဆုံးအခွအေမထွက်ရ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာလွှမ်းမိုးမှုပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတူအခြားသူများဆွေမျိုးတချို့တစ်ဦးချင်းစီ, အပ်နှင်းနိမ့် vs. မြင့်မားသော, ဥပမာ (ကြုံတွေ့ မိဘ၏နွေးထွေးမှု) ။ မကြာသေးမီကသည်အထိဤသီအိုရီမူဘောင်များကပဲ့ထိန်းသုတေသနအညွှန်းကိန်းဤ sensitivity ကိုဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသို့မဟုတ် function ကိုတိုက်ရိုက်အစီအမံထည့်သွင်းမထားပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment နှင့် neuroimaging လူမှုရေးအခင်းအကျင်းတို့တွင်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်အပေါ်လေ့လာမှုများ, ဦးနှောက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များတစ်ကြီးထွားလာအရေအတွက်မော်ဒယ်များရေပန်းစားအပေါ်ဆွဲ, ငါတို့အဘယ်ကြောင့်နှင့်မည်သို့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ကွဲပြားနားလည်သဘောပေါက်ဘို့လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်များ၏စိတ်ကူးကိုပံ့ပိုးသောသုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုခချမ်းသာ။ သူတို့အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ် - - ထိုသို့သောမိဘများ / စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ရွယ်တူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှတဆင့်ဖန်တီးသောသူတို့သည်အဖြစ်ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးလူမှုရေးအခင်းအကျင်းမှ sensitivity ကိုအတွက်ဦးနှောက်-based တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအားဖြင့်ပုံဖော်ကြောင်းတင်ပြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်လူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများပုံမှန်ကြောင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ operationalize မှအနာဂတ်သုတေသနအတိုင်းအတာဦးနှောက် function ကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကြောင်းအကြံပြုပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ရှုပ်ထွေးသည့်ယုပ်ယွင်းမှု၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုယန္တရားများနှင့်လူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံများ၊ ကောင်းမကောင်းအားဖြင့်ယက်ခြင်းဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာသုတေသနပြုချက်များစွာကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ (ဥပမာ - သက်တူရွယ်တူများအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများ) ကိုပိုမိုသိမ်မွေ့သောလက္ခဏာများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြသောဖွံ့ဖြိုးမှုကာလတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသသော်လည်းမကြာသေးမီက neuroimaging-based အထောက်အထားများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဤလက္ခဏာကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသည် (Blakemore နှင့် Mills က, 2014, ဘားနက် et al ။ , 2011, Crone နှင့် Dahl, 2012, Nelson နှင့် Guyer, 2011, နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005, Pfeifer နှင့် Allen က, 2012 နှင့် Somerville, 2013) ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်လူကြီးမှဆွေမျိုး adolescence မှထူးခြားသောယင်းအပြုအမူအပြောင်းအလဲများအနက်ကွာမိဘများအနေ သာ. ကြီးမြတ် orientation ကို Self-ဝိညာဏ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရွယ်တူချင်းဆီသို့, လူမှုရေးလက်ခံမှုမှ sensitivity ကိုကြီးထွား, တိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ယူပြီးရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်အထူးသဖြင့်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပိုမိုပေါ်ပေါက်လာကြသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာဆီးတားကြောင်းပြဿနာများကို။ ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (ဘယ်လိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် codes တွေကိုအတွက်ရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲထင်ဟပ်နှင့်လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်မှတုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်ပေးစေခြင်းငှါNelson နှင့် Guyer, 2011 နှင့် Steinberg, 2008) ။ ထို့ကြောင့်, သိမြင်-လူမှုရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့အထောက်အပံ့ပေးတယ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှင့်အာရုံကြော circuitry ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဒဏ်ငွေ-tuning အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (တိုးလာမြီးကောင်ပေါက် '' ဆက်စပ်နှင့်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ sensitivity ကို differential စေခြင်းငှါDavey et al ။ , 2008 နှင့် Nelson နှင့် Guyer, 2011) ။ အမှန်စင်စစ်ဤကဲ့သို့သောဆန့်ကျင်ဘက်မိဘကလေး interaction ကဒါမှမဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွက် embedded ခံအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အလွန်အမင်းအဓိကနှင့် Impact လူမှုရေးအခင်းအကျင်း, သက်တူရွယ်တူပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ခံ, ဖွယ်ရှိနောက်ဆက်တွဲရလဒ်များပုံဖော်အတွက် neurobiologically-based တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်။
neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရည်သီအိုရီမူဘောင် (အဲလစ် et al ။ , 2011), အစအခြေအနေတွင်မှဇီဝ sensitivity ကို (အဖြစ်လူသိများBoyce နှင့်အဲလစ်, 2005ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ), differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက် (Belsky et al ။ , 2007 နှင့် Belsky နှင့် Pluess, 2009), နှင့်အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့ sensitivity ကို (Aron နှင့် Aron, 1997), ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ရဲ့ neurobiological sensitivity ကိုအဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်လူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအလယ်အလတ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောမော်ဒယ်ပေးပါ။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များတစ် ဦး ချင်းစီသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုထိခိုက်အတူအချို့သောပိုပြီးသူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုကွဲပြားခြားနားကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်၏သက်ရောက်မှုမှာဆိုးရွားသောလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်များကိုအထူးအထိခိုက်မခံသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်လူမှုရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်သောသူများဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် ဦး နှောက်ကိုအခြေခံသည့်လူမှုရေးထိခိုက်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အောင်မြင်သောလူကြီးဘဝသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စိတ်ပညာပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်လိုက်မာန်ပါလိုက်စားခြင်းများအထိအထိမြင့်တက်သောဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းများကိုမြှင့်တင်ရန်အကြံပြုသည်။ ကျနော်တို့လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မူဘောင်တစ်ခုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်စဉ်းစားကြောင်းအဆိုတင်သွင်း (သဖန်းသီး။ 1 နှင့် သဖန်းသီး။ 2), neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment ၏ extant မော်ဒယ်များမှဆင်းသက်လာ, ဇီဝဗေဒလွယ်ကူစွာထိခိုက်တဲ့ခဝါသည်စရိုက်လက္ခဏာတွေလိုက်လျောပါလိမ့်မယ်။ ဒီ sensitivity ကို၏အာရုံကြော instantiation ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ဦးနှောက် function ကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ parameters တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်အလုပ်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များဒါပေမယ့်လည်းထောက်ခံလူမှုရေးအခင်းအကျင်းထဲကနေအကြိုးအမြားဆုံးဖွယ်ရှိသူတို့အဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးစွန့်စားမှုအနည်းဆုံးသူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီသာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနိုင်ပါတယ်။
ဦး နှောက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) အရရည်ညွှန်းသည့်အတိုင်းလူမှုရေးအခြေအနေတွင်မူလူမှုရေးအခြေအနေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလဒ်များကိုပုံဖော်သည့်ပုံစံနှင့်အတိုင်းအတာကိုလူမှုရေးအခြေအနေမူဘောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုထားသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်မှုကိုသရုပ်ဖော်ထားသည်။ ပန်းရောင်မြှားများသည်လူမှုရေးအခြေအနေမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလဒ်များနှင့်အလယ်အလတ်ချိတ်ဆက်မှုကိုဖော်ပြသည်။ အပြာရောင်မြှားများသည်မော်ဒယ်၏အစိတ်အပိုင်းများအကြားအပိုထပ်ဆောင်းအချက်နှစ်ချက်ဆက်နွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသော်လည်းအဆိုပြုထားသည့်မူဘောင်၏အဓိကသော့ချက်မဟုတ်ပေ။ မိဂဒလ = AMYG; dorsal anterior cingulate cortex = dACC; dorsolateral prefrontal cortex = dlPFC; hippocampus = HIPP; မျိုးစိတ် anterior cingulate cortex = subACC; ventral prefrontal cortex = vPFC; ventral striatum = VS.
ဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်နှငျ့အညီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်၏အလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ graphical ကိုယ်စားပြုမှု။ (; ထောက်ခံမှု vs. သက်တူရွယ်တူသားကောင်ထောက်ခံမိဘအုပ်ထိန်း vs. ကြမ်းတမ်းဥပမာ) x-ဝင်ရိုးအနုတ်လက္ခဏာကနေအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မှလူမှုရေး Contextual အချက်များအတွက်အပြောင်းအလဲကိုယ်စားပြု; y ကိုဝင်ရိုး (အနိမ့်သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ vs. ဥပမာမြင့်သော) အနုတ်လက္ခဏာကနေအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မှဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များအတွက်အပြောင်းအလဲကိုယ်စားပြု; ထိုသူနှစ်ယောက်လိုင်းများအနိမ့် vs. မြင့်မားတဲ့ဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အပေါ်မတူညီသောအဖွဲ့များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းဖြင့် moderation လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များအကြားစပ်လျဉ်းလူမှု-Contextual သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှစ်ခုစလုံးကြီးစွန်းမှာသိသာကြောင်းအတွက်ပြသထားပါသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှကြီးထွား neurobiological sensitivity ကိုတစ်ဦးကာလသည်နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို၏ညွှန်းကိန်းများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများပုံမှန်နိုငျသောသောအတွေးအခေါ်များကိုထောက်ပံ့သော neuroimaging စာပေကနေသက်သေအထောက်အထားဆန်းစစ်။ တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားမှုအားဖြင့်ကျနော်တို့လူတွေကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည်လည်းမရှိရာအဘို့အဦးနှောက်-based ဝိသေသလက္ခဏာများသို့မဟုတ် Construction မှကိုးကားပါ။ လူမှုရေးအခင်းအကျင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကသူတို့အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာအင်္ဂါရပ်များအားဖြင့် quantified လူမှုရေးဆက်ဆံရေးသော့နှင့်မိဘများ / စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ရွယ်တူတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကိုရည်ညွှန်း။ အတော်ကြာပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများမိဘ-ကလေးနှင့်သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေး (ပုံသဏ္ဍာန်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးကိုသရုပ်ပြနေတဲ့နှစ်ရှည်လများပင်ကိုယ်မူလစာပေကိုမီးမောင်းထိုးပြပေမယ့်ဘရောင်းနှင့် Bakken, 2011, ဘရောင်းနှင့် Larson, 2009 နှင့် Steinberg နဲ့မောရစ်, 2001), သာမကြာသေးမီကအလုပ်ကဤအတွေ့အကြုံများအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာသုတေသန (မြီးကောင်ပေါက် '' လူမှုရေးဘဝတွေကိုဦးနှောက်သိသောအခါ, အပြောင်းအလဲနဲ့၏ sensitivity ကိုဆက်စပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ကာလအတွင်းတက်ဦးဆောင်နှင့်လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်တုံ့ပြန်နှစ်ဦးစလုံးကွောငျးဖျောပွသBlakemore နှင့် Mills က, 2014) ။ ထို့အပွငျ, ဒီ sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်, လူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများပုံမှန်ကြောင့်ဦးနှောက် function ကို / ဖွဲ့စည်းပုံမှာဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ဖမ်းမိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ (neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များဆွေးနွေးရန်အဲလစ် et al ။ , 2011) ။ အစဉ်အလာဟာဦးနှောက်ကိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်အပေါ်ဗဟိုပြုမဟုတ်နေစဉ်, သူတို့ဘယ်လို endogenous, ထိုကဲ့သို့သော genotype အဖြစ်ဇီဝအချက်များ, အခြားသူများအားဆွေမျိုးတချို့တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမှတုံ့ပြန်မှုနှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ထိခိုက်ဆပ်ပေါ်တွင်အလုပ်ပဲ့ထိန်းပါပြီ။ ဒုတိယအချက်အကြှနျုပျတို့သညျဤကာလအတွင်းလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အဆုံးအဖြတ်ပေးဘို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကတိပေးဖြစ်ကြောင်းတိကျသောအာရုံကြောဆားကစ်ဖြေရှင်းရန်ကြောင်းဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment ၏မော်ဒယ်များဆွေးနွေးပါ။ တတိယကျနော်တို့မိဘများ / စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် function ကို / ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတွေ့အကြုံများအကြားအသင်းအဖွဲ့များပြသသော neuroimaging လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ စတုတ္ထကျနော်တို့အလားတူရွယ်တူချင်းအတူဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် function ကို / ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတွေ့အကြုံများအကြားအသင်းအဖွဲ့များသရုပ်ပြရလဒ်များကိုဆွေးနွေးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြှနျုပျတို့သညျဤဧရိယာ၌သုတေသနအတွက်အယူအဆရေးရာနှင့်ပင်ကိုယ်မူလအနာဂတ်လမ်းညွန်ကိုဆက်ကပ်။ (ဂုဏ်သတ္တိများ (ဥပမာ, volume ကို Activation), နှင့်ယန္တရားများ; ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုမှ neuroscience ၏လယ်ပြင်ဦးနှောက်-based ဆားကစ် (သိမြင်-စည်းမျဉ်းဥပမာ, လူမှုရေး-ထိခိုက်စေ) ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပြုထားသောမူဘောင်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဦးနှောက်အပေါ်သုတေသနမှီအောင်လိုက်ကြောင်းအကြံပြု လူမှုရေးအခင်းအကျင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတထိခိုက်အပြန်အလှန်အရာတွေနဲ့ဥပမာများကိုတံစဉ်, ဆက်သွယ်မှု) ။ ဤအကြံပြုချက်များအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာ၏ရလဒ်များကိုမှပြောပြတယ်ဘယ်လို neurobiological အခြေခံသောအခြေအနေများနှင့်ယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအလျှော့ပေးလိုက်လျောနေဖြင့်လယ်ပြင်တိုးစေနိုင်သည်။
သူတို့ (က) ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလူမှုရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအချက်ပြမှုများမှတုံ့ပြန်မှုကို generate အဖြစ်နောက်ဆုံးတွင်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဂုဏ်သတ္တိများ (ခ) ကြောင့်အသက်အရွယ်နှင့်အပျိုဖော်ဝင်မှထပ်မံရငျ့ခံယူ, လြောကျလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု၏အရေးပါသောအဆုံးအဖြတ်ပေးစေခြင်းငှါ နှင့် (ဂ) ကိုပိုမို၏ရောင်ပြန်မှ reactive, ဤကာလအတွင်းအတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကပုံဖော်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာထိုဦးနှောက် (အပျိုဖော်ဝင်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေခံကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုသည်းခံGiedd et al ။ , 2006; Ladouceur et al ။ , 2012; Lenroot နှင့် Giedd, 2010လူတစ် ဦး ၏လူမှုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်ရန်အာရုံကြောပလပ်စတစ်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုယန္တရားများကိုတားဆီးရန်သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည့် neurobiological sensitivity အသစ်များကိုအလားအလာရှိစေနိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် synaptic တံစဉ်များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သော myelination၊ volumetric အပြောင်းအလဲများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်ကိုလူမှုရေးအရထိခိုက်လွယ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုသွင်းအားစုများပါ ၀ င်သည်။Monahan et al ။ , 2015က) "မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို" စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးသောအရာကိုတဆင့် (နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005) ။ အစောပိုင်းအပေါ်ထူထောင်အာရုံကြောစနစ်များ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့် function ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်သောကြောင့်, neurobiological စိတ်တွေ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အလှညျ့အပွောငျးမှာအစောပိုင်းလူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါAndersen က, 2003) ။ ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူဆက်စပ်အာရုံကြော plasticity သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကုစား (ဥပမာ၏ဤကာလကိုအကြံပြုသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်, Bredy et al ။ , 2004လက်ရှိအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတသမတ်တည်းနည်းလမ်းအစောပိုင်းကအသက်တာ၏သက်ရောက်မှုကုသနည်းများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ) နိုင်စွမ်း။ ထို့ကြောင့်သာနို့စို့အရွယ်တွင်တွေ့မြင်ကြောင်းမှဒုတိယလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာသိသိသာသာတိုးတက်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှု၏ဤကာလ, (နောက်ဆက်တွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောနှင့်တည်မြဲသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါAndersen က, 2003, Crone နှင့် Dahl, 2012, Giedd, 2008 နှင့် လှံ, 2000), လူငယ်မဟုတ်တဲ့လူ့တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီနေတဲ့မြင်ကွင်းကို (ဥပမာ, Delville et al ။ , 1998, ver Hoeve et al ။ , 2013 နှင့် Weintraub et al ။ , 2010).
2 ။ Neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များ
လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၏လေ့လာရေးကျယ်ပြန့်ပုံကို, တစ်ဦးချင်းစီရှိမရှိအတွက်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းဝန်ခံနှင့်မည်မျှသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ လက်တွေ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာမှာတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအကွာအဝေး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီ-ခြားနားချက် variable တွေကိုဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်သုတေသနတစ်ခုကြွယ်ဝသောသမိုင်း (ရှိCicchetti နှင့် Rogosch, 2002, Masten နှင့် Obradovic, 2006 နှင့် Rutter et al ။ , 2006) ။ ဤလုပ်ငန်းအများစုမှာမှအားနည်းချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်, psychopathological နှင့်အခြားပြဿနာရလဒ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ခြေရာခံ ဆန့်ကျင့်ဘက်ဖြစ်သော သက်ရောက်မှုများ အနုတ် အတွေ့အကြုံများသို့မဟုတ်ထိတွေ့မှု။ ဥပမာအားဖြင့်, အတွက် Caspi et al ။ ရဲ့ (2002) ကလေးတစ်ဦးအကြမ်းဖက်လိုတဲ့သဘောထားကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ပါသည်အဖြစ် maltreated ခံရယောက်ျားအတွက် antisocial အပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာရန်မျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏စုစုပေါင်းအလှူငွေအပေါ် seminal လေ့လာမှု။ သို့သော်ဤအကျိုးသက်ရောက်ရန်လိုသည့်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သော neurotransmitter-metabolizing အင်ဇိုင်း monoamine oxidase (MAOA) ၏အနိမ့် vs. မြင့်မားတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်မျိုးဗီဇ allele တင်ဆောင်လာသောတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Dual-အန္တရာယ်သို့မဟုတ် diathesis-စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်များ (Hankin နှင့် Abela, 2005; Zubin et al ။ , 1991) ဒီနှင့်အလားတူအလုပ်ကနေပေါ်ထွက်လာကြောင်းမျိုးရိုးဗီဇ, ဟော်မုန်း, ဇီဝကမ္မနှင့်အခြားဇီဝအားနည်းချက်များသို့မဟုတ်ဓာတ် (diatheses) maladaptive ဘယ်နေရာတွေမှာလဲမြှင့်တင်ရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစပျိုးခြင်း (စိတ်ဖိစီးမှု) နဲ့ဆက်ဆံကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။
သို့သော်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းအကြာတွင် diathesis-စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်များမှာဖော်ထုတ်အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီအစားမခွဲခြားဘဲမိမိတို့၏ valence ၏, အထိခိုက်မခံကြီးထွားပလပ်စတစ်နှင့်ပျော့ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်ရှုမြင်ခံရအံ့သောငှါ။ ညွှန်ပြ ဤသည်အခြားရှုထောင့် (စကားစပ်မော်ဒယ်မှဇီဝ sensitivity ကိုမှဦးဆောင်Boyce နှင့်အဲလစ်, 2005) နှင့် differential ကို-လွယ်ကူစွာထိခိုက်အယူအဆ (Belsky နှင့် Pluess, 2009), ရာနှစ်ဦးစလုံးအာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့ sensitivity ကို၏အယူအဆနှင့်အတူအင်္ဂါရပ်တွေကိုမျှဝေ (Aron နှင့် Aron, 1997) ကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစာပေမှသည်။ ဤရွေ့ကားလွတ်လပ်စွာဖွံ့ဖြိုးပြီးပေမယ့်ဖြည့်စွတ်ခြင်းနှင့်သြဇာမော်ဒယ်များထီးအသုံးအနှုန်းအောက်တွင်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက် ( အဲလစ် et al ။ , 2011; ကိုလညျးရှု စာနယ်ဇင်းများတွင် Moore နဲ့ Depue,, (စာနယ်ဇင်းအတွက်) Pluessနှင့် တံဆိပ်ခေါင်းများ (2015) ဒီယေဘုယျအယူအဆ၏မြင့်မားသက်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) သည်။ ဤအမော်ဒယ်များ၏ဗဟိုသဘောတရားတစ်ဦးချင်းစီပင်နှင့် / သို့မဟုတ်အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်အပ်နှင်းဖြစ်ကြောင်းဇီဝအချက်များတစ် function ကိုအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခင်းအကျင်း၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလွန်အမင်းအထိခိုက်မခံတစ်ဦးချင်းစီဆိုးရွားသောအခင်းအကျင်းပိုမိုအားနည်းချက်နှင့် salubrious အခင်းအကျင်းပိုမိုတုံ့ပြန်မှုနှစ်ဦးစလုံးဖွစျလိမျ့မညျသော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကို sensitivity ကိုအတွက်အနိမ့်တစ်ဦးချင်းစီ, ရှိသမျှပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြတ်ပြီးအလားတူအခွအေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, High-လှုပ်ရှားမှု MAOA genotype ဆန့်ကျင်အဖြစ်နည်းပါးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခမြင့်မားလွန်ကဲ antisocial အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ပြီသာ (Caspi et al ။ , 2002) ဒါပေမယ့်ဒုက္ခနိမ့်အဆင့်ဆင့်အနိမ့်သို့မဟုတ်ပင်ပျက်ကွက် antisocial အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ (Foley et al ။ , 2004).
ဒီနှင့်အလားတူတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဇီဝ-အမြစ်တွယ် sensitivity ကိုသို့မဟုတ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အမျိုးမျိုးအချက်များကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျိုးဗီဇ (ဥပမာ MAOA ပါဝင်သည်ကြောင်းဖော်ထုတ်ပြီ serotonin-Transporter-နှင့်ဆက်စပ် polymorphic ဒေသ, 5-HTTLPR; dopamine D4 receptor မျိုးရိုးဗီဇ, DRD4; dopamine D2 အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇ, DRD2); မြင့်မားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု adrenocortical ၏ပုံစံအတွက် reactivity ကို, ကိုယ်ခံအား, ဒါမှမဟုတ်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု (ဥပမာပိုမိုမြင့်မား cortisol reactivity ကို; vagal ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကှေ့ပုံမမှန်ခြင်း reactivity ကိုပိုမိုမြင့်မား; အနိမ့် vagal သေံ); နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (ဥပမာ neuroticism; အာရုံခံ-အပြောင်းအလဲနဲ့ sensitivity ကို); ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထား (ခက်ခဲစိတ်ထားဥပမာအပြုအမူတားစီး) အဖြစ်နှင့်ဇီဝ-based အပြုအမူ phenotypes ။ ဤရွေ့ကားအချက်များ, တစ်ဦးချင်းစီရိပ်မိသောလမ်းပုံဖော်တက်ရောက်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်, မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတွင်းပြုမူဖို့ထင်နှင့်ထွန်းသစ်စအရည်အသွေးနှင့် psychopathologies အပေါ်နောက်ဆုံးမှာအလယ်အလတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (မှနေကြတယ်Boyce နှင့်အဲလစ်, 2005) ။ တစ်ဦးချင်းစီ '' နောက်ခံဇီဝစနစ်များ differential က၎င်း၏တောင်းဆိုချက်များကိုကိုက်ညီဖို့ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ moderation မျှော်လင့်ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမူအကျင့်တားစီးအဖြစ်လူသိများနို့စို့အရွယ်အတွက်အသစ်အဆန်းမှ hyperreactivity ဆီသို့ဇီဝ-based သဘောထားကို, ရွယ်တူ (နှင့်အတူအပြန်အလှန်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့လှုံ့ဆျောမှုရှိနေသော်လည်းကလေးဘဝအတွက်လူမှုရေးနှုတ်ဆိတ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းငှါCoplan et al ။ , 1994 နှင့် Rubin က et al ။ , 2009) ။ သူတို့တနည်းဖြစ်စေလှုံ့ဆျောမှုပုတ်တွေကိုစစ်ဆေးအဖြစ် High-ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောချဉ်းကပ်မှုတွန်းအားများအကြားပဋိပက္ခ (အရှင်ဖြစ်စေအတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်အားဖြည့်ခြင်း, လူမှုရေး milieu ဖို့အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်လူတစ်ဦးချင်းစီဦးတည်သွားစေခြင်းငှါCaouette နှင့် Guyer, 2014) ။ အချိန်ကျော်, ထောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့သူကိုမြင့်မားစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီစွန့်စားမှုနှင့်ဒုက္ခထိတွေ့သူတွေကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အန္တရာယ်များပိုမိုများအတွက်နိုးနိုးကြားကြားနဲ့တုံ့ပြန်ဖြစ်နိုင်သည်စဉ်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၏အပြုသဘော, ထောက်ခံ features တွေ၏အားသာချက်ယူတတ်ရန်သင်ယူစေနိုင်သည်။ အလားတူအကောင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်စပ်ခံရဖို့လေ့နှင့်သတိထားလေ့လာမှတဆင့်သင်ယူအပေါ်ဆုံသောအခြားလွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များများအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နိုင် - သရုပ်ဆောင်ထက်ပထမဦးဆုံးသရုပ်ဆောင်မတိုင်မီခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်။ အာရုံကြောစနစ်အပျေါမှာအတှေ့အကွုံလူအများက, အစွမ်းထက်မှတ်ပုံတင်ရေးကိုပိုမိုကိုအလွန် (ရှင်သန်မှု-related ပရိယာယ်ကိုခြေရာခံဖို့အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များကို enable စေခြင်းငှါBelsky, 2005, Suomi, 1997 နှင့် ဝံပုလွေ et al ။ , 2008).
အရာတစ်ဦးချင်းစီပတ်ဝန်းကျင်ရန် "ညှိ" context-sensitive နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှ reactive ဖြစ်ကြောင်းအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောဝိသေသလက္ခဏာများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်လူမှုရေးဒိုမိန်းအတွင်း, ကျနော်တို့အဆိုပြုအဖြစ်, စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို, မျိုးဗီဇအသုံးအနှုန်းတွေမှတဆင့်ချိန်ညှိခြင်း, မည်အကြောင်း, ရန်ဒီဂရီ (Meaney, 2001, Nelson နှင့် Guyer, 2011 နှင့် နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005) ။ ဤသည်လူမှုရေး sensitivity ကိုပု neurobiological အဆင့်မှာလွယ်ကူစွာထိခိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အရေးပါသောနှင့်မော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလ adolescence စေသည်ကြီးထွား။ သို့သော်ဇီဝဗေဒလွယ်ကူစွာထိခိုက်တဲ့ "ရှုပ်ထွေးပြီးဘက်ပေါင်းစုံနှင့်အလွန်အမင်းရှေးရိုးစွဲ repertoire ပါဝင်သည်သောအဆိုပြုချက်ကိုရှိနေသော်လည်း ဗဟိုအာရုံကြော နှင့်အရံ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု "( Boyce နှင့်အဲလစ်, 2005, p ။ 271; အလေးပေးထည့်သွင်း), ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုတိုက်ရိုက်အစီအမံ sensitivity ကိုအချက်များအဖြစ်အများအားဖြင့် unexamined ခဲ့ (သို့သော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြ Yap et al ။ , 2008 နှင့် Whittle et al ။ , 2011, ခြွင်းချက်အဘို့) ။ ဇီဝဗေဒနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားအပြန်အလှန်တစ်ခါတစ်ရံအဓိကသက်ရောက်မှု (သို့ပွုထက်ရလဒ်များပိုမိုကှဲလှဲရှင်းပြအဖြစ်Beauchaine et al ။ , 2008တချို့ဆယ်ကျော်သက်အာရုံကြောလွယ်ကူစွာထိခိုက်နှင့်လူမှုရေး-ဆက်စပ်ထိတွေ့မှု၏သူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ပေးထားကောင်းမကောင်းရလဒ်များပိုမို Prime ဖြစ်နိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်) ဤအာရုံကြောအချက်အဘို့အစာရင်းကိုင်ရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။
တဖကျတှငျကဦးနှောက်ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်တဲ့အရင်းအမြစ်အဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရသေးကြောင်း unsurprising ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းသုတေသနတစ်ဦး valenced အတိုင်းအတာ (သို့မဟုတ်အတိုက်အခံ valenced အတိုင်းအတာအပေါ်အဖြစ်မြင့်မားသော) အပေါ်အနိမ့် vs. မြင့်မားတဲ့အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာခွဲခြား, လွယ်ကူစွာထိခိုက်အမှတ်အသားများအားဖြင့်အုပ်စုတစ်စုတစ်ဦးချင်းစီမှလေ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်ကိုအပေါ်သူတို့၏တုံ့ပြန်မှုသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်။ ထို့နောက် (ထိုက Moderator များနှင့်ရလဒ်အကြားအသင်းအဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင် variable ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကြီးစွန်းမှာသိသိသာသာဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရစေခြင်းငှါ,Roisman et al ။ , 2012) ။ ဥပမာအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်စိတ်ထားဖြစ်သည့်အခါလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အဖွဲ့ ၀ င်များ၏တိကျသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောညွှန်းကိန်းများကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် neuroimaging သုတေသီများသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဂုဏ်သတ္တိများ၏မြင့်မားသော / နိမ့်ကျသောအနေအထားနှင့်အညီသူတို့၏နမူနာများ၌တစ် ဦး ချင်းစီကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် (သို့မဟုတ်) ဦး နှောက်နှင့်လူမှုရေး၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းဆိုသည်) ကိုပုံမှန်အားဖြင့်မလုပ်ပါ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုရလဒ်များအပေါ်နောက်ခံအချက်များ (သဖန်းသီး။ 2) ။ ဒုတိယအချက်မှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုမှ neuroscience အလုပ်အတွက်လေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging အတွက်အသုံးပြုတဲ့စာရင်းအင်းချဉ်းကပ်အုပ်စုတစ်စု-based ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး။ fMRI မှာတော့လေ့လာဆန်းစစ်တစ်ဦးချင်းစီ၏တူညီသောအုပ်စုတစ်စုအတွင်းသို့မဟုတ် (Non-စိတ်ဓာတ် vs. ဥပမာစိတ်ဓာတ်ကျ) (Non-မတရားသဖွငျ့ vs. ဥပမာမတရားသဖွငျ့) လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ကွာခြားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုများသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်ကိုအကြားတာဝန်ဖြစ်ရပ်များပုံမှန်အားအကဲဖြတ်နေကြပါတယ်အကြားခြားနား အစား intragroup အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့လိုအပျသောအရာ, သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ အလားတူပင်သုတေသီများခဲလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှအညွှန်းကိန်းတစ်ဦးချင်းစီ '' လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖို့အမှတ်အသားများအဖြစ်သူတို့ကိုအသုံးပြုအသစ်လုပ်လမ်းပြအုပ်စုတစ်စု-based ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေတွေ့ရှိချက်အပေါ်ဆွဲသောဦးနှောက်၏ quantified ဂုဏ်သတ္တိများကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအခြေလှမ်းများယူနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်, ဒီလွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အမှတ်အသားများအဖြစ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ / function ကိုညွှန်းကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ချို့တဲ့အများကြီး extant neuroimaging သုတေသနပြန်ဆို။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ neuroimaging ဒေတာစုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့စျေးကြီးနှင့်အချိန်-စားသုံးကြသည်။ ဤရွေ့ကား attribute တွေဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များကိုခြေရာခံဖို့လိုအပ်တဲ့ longitudinal သုတေသနဒီဇိုင်းများအတွင်း၎င်းတို့၏ပေါင်းစည်းမှုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်လွယ်၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေကြောင်းအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ တ ဦး တည်းအဘို့, ဦး နှောက်အပြုအမူ၏အဓိကဆုံးဖြတ်။ အပြုအမူအပြောင်းအလဲများကို ဦး နှောက်နှင့်လူမှုရေးအရဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသည့်အချက်များကြောင့် ဦး နှောက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်နောက်ခံဖြစ်စေသောအချက်များကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းအပြုအမူကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန် ဦး နှောက်ပတ်လမ်းများမှတစ်ဆင့်လည်ပတ်ရမည်။ neurosensitivity ယူဆချက်အရ (Pluess နှင့် Belsky, 2013), ပူးတွဲမျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ၏တိုက်ရိုက်နှင့်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၏ sensitivity ကို, လွယ်ကူစွာထိခိုက်အခြေခံမူလတန်းယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ, လူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကိုသူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထုတ်လွှင့်ဖို့အလယ်ပိုင်းကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရ, ဖြစ်ဖို့ရှိသည်, သတိနှင့်သတိလစ်စိတ် [တစ်] ll စစ်ဆင်ရေး, (နှင့်အတွေ့အကြုံများကို၏အမြင်နှင့်စိတ်ကူးတို့ပါဝင်သည်) "ကြောင်းလျစ်လျူရှုမရနိုငျ "ဦးနှောက်၏အလုပ်လုပ်အပေါ်အခြေခံပြီး (Rutter, 2012, p ။ 17149) ။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလဒ်များဖော်ထုတ်ရာ၌၎င်း၏အခန်းကဏ္consideringကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အပြုအမူအပေါ် ဦး နှောက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်အဓိကကျသော်လည်း ဦး နှောက်ညွှန်းကိန်းများသည်ကွဲပြားမှုများကိုဖမ်းယူရာတွင်အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ Pluess (2015) အသုံးအနှုန်းများ sensitivity ကို, အရာ input ကိုပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုကနေလာမယ့်ဖို့အတိုင်းအတာထုတ်လုပ်ပြီးရိပ်မိနှင့်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ sensitivity လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ပထမ, လိုအပ်တဲ့ခြေထောက်ကိုယ်စားပြုပြီးသေချာပေါက် Response နှင့်အတူတစ်-to-တဦးတည်းစာပေးစာယူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်သောအတိုင်းအတာဖမ်းယူသောအမူအကျင့်ကို output မရှိပါ။ ဦးနှောက်ကိုအကဲဖြတ် sensitivity ကို (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အောက်ပါအတိုင်းသော Response) ထို may ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာ (ဥပမာ, ကိုထိခိုက် reactivity ကို, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့, ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေး) နဲ့ဆက်စပ်ဒြပ်စင်သို့သရုပျခှဲခံရဖို့ခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဆုံး, အမူအကျင့်များအာရုံကြောအစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံစိုက်အကျိုးရှိ Self-အစီရင်ခံသို့မဟုတ်လေ့လာအပြုအမူမှတဆင့်ထင်ရှားမဖြစ်။ လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အကြောင်းကိုယူဆချက်စမ်းသပ်အခြားထူထောင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များအပေါ်ဦးနှောက်ညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဆက်စပ်အားသာချက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းကနေဖြစ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးမှုများကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ကိုလည်းပင်ကိုစရိုက်နှင့်အပြန်အလှန်ပြီးသားမျက်မြင်လက်တွေ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တငျပွသရုပ်ပြ phenotypic စနစ်များကိုမှ genotype နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်သကဲ့သို့လြောကျ differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်အခြေခံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပါမည်။ အဆိုပါ anterior cingulate cortex (ACC) ၏ activation ဥပမာ, DRD2 အတွက် genotype မူကွဲနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Pecina et al ။ , 2013) နှင့် MAOA (Eisenberger et al ။ , 2007), မြင့်သောအသားအရေ conduction reactivity ကို (နာဂအိ et al ။ , 2010), နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု / neuroticism (Haas et al ။ , 2007) ။ ဤအရာအားလုံးသည်လူမှုရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့၏အခင်းအကျင်းအတွက်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အမှတ်အသားများဖြစ်ကြသည်။ အပြုအမူ၏အဓိကပစ်မှတ်အဖြစ်ဦးနှောက်နှင့်အတူကြောင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုး domains များအတွက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏စစ်ဆင်ရေးကိုသရုပ်ပြနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနှင့် / သို့မဟုတ်အကွိမျမြားစှာနည်းလမ်းပေါင်းစပ်ရသောကြောင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အကြား arbitrates နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ဆိုလိုတာပါ။ ဆန်းစစ် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ၏အကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့နောက်ဆုံးမှာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအားထုတ်မှုများ၏အကျိုးအတွက်ရန်, မြီးကောင်ပေါက်ထွက်ပေါ်လာသည့်တွေ့ကြုံခံစားဖို့များပါတယ်ရာနှငျ့ ပတျသကျ. ပြည့်စုံ, ဘက်စုံ profile များကို deriving များအတွက်အသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်။
တောင်မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပေးထားသောအဆငျ့အတှငျးထူထောင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များလွယ်ကူစွာထိခိုက်အပြုအမူ impact မှတငျပွထားတဲ့မှတဆင့် neurobiological လမ်းကြောင်း (အမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိလာတဲ့, ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံ neurobiological ဆားကစ်အပေါ်ပြုမူစေခြင်းငှါHariri, 2009 နှင့် စာနယ်ဇင်းများတွင် Moore နဲ့ Depue,) ။ ဥပမာ, DRD2 နှင့် DRD4 ဗီဇကြွယ်ဝစွာအဆိုပါ striatum နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီအာရုံစိုက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဆုလာဘ်-sensitivity ကို (ဤဒေသများနှင့်တွဲဖက်ဖြစ်ကြောင်း dopamine receptors အမျိုးအစားများဝှက်Padmanabhan နှင့် Luna, 2014; ပညာရှိ 2004) နှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (Horvitz, 2000) မှတုံ့ပြန်မှု။ နောက်ဥပမာအတိုင်း, COMT ဗီဇ၏ 158Met allele (အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များနှင့်ထိရောက်သော prefrontal သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့တိုးမြှင့်ဆက်စပ်နေသည်Tan က et al ။ , 2007) ။ မြောက်မြားစွာရှုပ်ထွေးသော, အပြန်အလှန်လမ်းကြောင်းအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အထောက်အကူပြုနှင့်ဦးနှောက်မှတဆင့်အပြုအမူဖို့, ဦးနှောက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောအကျဉ်းချုပ်အစီအမံများကိုဖြစ်နိုင်သည်။ သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇအဖြစ် ပို. ပို. အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်တွေနဲ့, ဒီအမှန်စင်စစ်ရလဒ်ကိုမှဦးနှောက်မှ genotype ကနေချိတ်ဆက် quantifying ကခြေလှမ်းထပ်မံသိမ်းယူနိုင်, မဆိုပေးထား reactivity ကိုပုံစံ "အမြားတိကျတဲ့ဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင်-ရလဒ်ကိုလမ်းကြောင်းပတ်ဝိုင်းဖြစ်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်ဒိုမိန်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရ ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များအဘို့ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာဘယ်မှာ) "(စာနယ်ဇင်းများတွင် Moore နဲ့ Depue,, p ။ 2) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ညွှန်းကိန်း (ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းနှင့်ဖြတ်ပြီးလုံလုံလောက်လောက်တည်ငြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်Caceres et al ။ , 2009, Forbes မဂ္ဂဇင်း et al ။ , 2009, Hariri, 2009, ဂျွန်စ et al ။ , 2005, Manuck et al ။ , 2007, Miller က et al ။ , 2002, Miller က et al ။ , 2009, ဝူ et al ။ , 2014 နှင့် Zuo et al ။ , 2010) လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သည့်အချက်များအဖြစ်ကုသမှုကိုခိုင်လုံစေရန်။ fMRI အစီအမံများ၏စမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်ကြာရှည်သောဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သောပြောင်းလဲမှုများကိုခွဲခြားနိုင်ရန်အတွက်တည်ဆောက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမျက်နှာများအား amygdala တုန့်ပြန်မှု၏မြင့်မားသောစမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (ဥပမာ intraclass ဆက်စပ်မှုကိန်း (ICCs)> .70) ကိုရက်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးများတွင်တွေ့ရသည် (Gee et al ။ , 2015) နှင့်လ (ဂျွန်စ et al ။ , 2005), အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအချို့အမျိုးအစားများအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုလူကြီးများအတွက်တည်ငြိမ်များမှာ (သို့သော်မြင်သောအကြံပြုခြင်း Sauder et al ။ , 2013, လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားကြောင့်ထိခိုက်ကြောင်း amygdala reactivity ကိုအတွက်ဆင်းရဲတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရ၏ဥပမာတစ်ခုအဘို့။ ) ကျွန်ုပ်တို့၏မူဘောင်အတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဆယ်ကျော်သက်နမူနာများတွင် fMRI အစီအမံများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခြောက်လအတွင်းတိုင်းတာမှုသုံးကြိမ်ကျော်မှတုန်လှုပ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများကို amygdala ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နမူနာတွင် (ICC <.40) နိမ့်ကျသည်။N = 22; အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်အကြား) (အယ်လ် et အစုလိုက်ဗန်တွင်း။ , 2013) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Koolschijn et al ။ (2011) , ထိုကလေးများမတူဘဲ (လေ့လာတွေ့ရှိN = 10), မြီးကောင်ပေါက် (N = ၁၂) နှင့်လူကြီးများN ဦး နှောက်ဒေသအမျိုးမျိုး (ဥပမာ - precuneus, ACC, insula, inferior and သာလွန်သော parietal cortices, angular) = 10) ဦး နှောက်၏ဒေသများရှိ activation များအတွက်မျှတ (ICCs = .41 – .59) ကောင်းမွန်သော (ICCs = .60 - .74) ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပြသခဲ့သည်။ yr3.5 နှစ်အားဖြင့်ကွဲကွာတဲ့စည်းမျဉ်း - switch ကိုအလုပ်ကာလအတွင်း gyrus) ။ ဤတန်ဖိုးများသည်အခြားလွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်သောအချက်များ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ Cohen ကိုနှင့် Hamrick, 2003 နှင့် Cohen ကို et al ။ , 2000), ဦးနှောက်ညွှန်းကိန်းထူထောင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အမှတ်အသားများ၏စုဆောင်းမှုကို join ဖို့လုံလောက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း။
3 ။ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ Neurobiological မော်ဒယ်များ
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လက်ရှိမော်ဒယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများပုံမှန်စေခြင်းငှါကိုယ်စားလှယ်လောင်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်ဦးနှောက်ဆားကစ်ဖော်ထုတ်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဆားကစ်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှစွန့်စားမှု, ခံနိုင်ရည်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်တစ်ခုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အမှတ်အသားဦးနှောက်-based လွယ်ကူစွာထိခိုက်အောင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိလူမှု sensitivity ကိုအတူတင်းကျပ်စွာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ရေပန်းစားနေသောသီအိုရီ (ကာဇီ et al ။ , 2008, Crone နှင့် Dahl, 2012, Nelson နှင့် Guyer, 2011, နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005, Pfeifer နှင့် Allen က, 2012 နှင့် Steinberg နဲ့မောရစ်, 2001) (ကလေးသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်ကနေဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ခွဲခြားကြောင်းအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်ဆွဲကာဇီ et al ။ , 2008, Giedd, 2008, Gogtay နှင့် Thompson က, 2010 နှင့် Guyer et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကွဲပြားသေးအပြန်အလှန်အာရုံကြောဆားကစ်ဆီက input ၏တွက်ဆ differential ကြောင့်ကြီးထွား Social Responsibility, အမည်ရ, အကျိုးသက်ရောက်စေ-လူမှုရေးနှင့်သိမြင်မှု-စည်းမျဉ်းစနစ်များကာလကြောင်းဘုံစိတ်ကူးထဲမှာရှိသည်။ ဤရွေ့ကားတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လျော့နည်းသွားသို့မဟုတ်ရငျ့နှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူဟန်ချက်သို့ရောက်နေကြသည်။ နောက်ထပ် Commons ကဤမော်ဒယ်များထိုကဲ့သို့သောသူတို့သည်ဆင်းရဲသားဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, အန္တရာယ်များအပြုအမူများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်စံတန်ဖိုးတိုးအဖြစ်, ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုး၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" အတွက်အကောင့်မှအဓိကအားထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ (သို့သော်ကြည့်ရှု Crone နှင့် Dahl, 2012နှင့် Pfeifer နှင့် Allen က, 2012) အခွင့်အလမ်းနေတဲ့အချိန်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ neurodevelopmental အကောင့်သည်။ ကျနော်တို့လက်ထက်ကဤမော်ဒယ်များလည်းအဆင်သင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်အပြုသဘောလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အာရုံကြောမော်ဒရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်အခန်းကိုစွန့်ခွာကြောင်းတင်ပြသည်။ ကျနော်တို့ခေတ္တဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment လေးထင်ရှားတဲ့မော်ဒယ်များကိုဖော်ပြရန်အောက်တွင်။
dual-စနစ်များမော်ဒယ်များ (ကာဇီ et al ။ , 2008 နှင့် Steinberg, 2008က) လူမှုရေး-ထိခိုက်စေစနစ်၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကြားရှိယာယီ disjoint အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုများကိုများအတွက်အကောင့် - ထိုကဲ့သို့သော amygdala အဖြစ် limbic နှင့် paralimbic ဒေသများဖွဲ့စည်း, ventral striatum (VS), orbitofrontal cortex (OFC), medial prefrontal cortex (mPFC), နှင့်သာလွန်ယာယီ sulcus (STS) - တစ်ဦးနှေးကွေးအရှိန်အဟုန်မှာရင့်ကျက်နှင့် anterior cingulate cortex (ACC) နှင့်အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် ventral prefrontal နှင့် parietal cortical နှင့်၎င်းတို့၏အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများပါဝင်သည်ထားတဲ့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များကိုမှဆွေမျိုး။ ဒီယာယီကွာဟမှု၏ရလဒ်ပိုမိုဒါကလေးဘဝထက်, ထိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်တစ် affective မှမြင့် sensitivity ကိုနှင့်အဓိကလူမှုရေးလွန်တုံ့ပြန်၏ညှနျကွားအတွက်အခင်းအကျင်းကြောင့်အစွန်အဖျားအပြုအမူ, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်မဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်ထက် Impulse အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုစရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် ထိန်းချုပ်မှု။ ပေးသော circuitry အစောပိုင်းကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအားဖြင့်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လောက်ဆိုရှယ်-ထိခိုက်စေ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လူမှုရေး sensitivity ကိုတက်လုပ်မယ်လို့လည်းလက်ရှိ Contextual လွှမ်းမိုးမှုမှတုံ့ပြန်မှု၌ထငျရှားဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွာဟချက်ပိုကြီးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပိုရှည်ကရှိကွောငျး, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာလွှမ်းမိုးမှုမှအားနည်းချက်သို့မဟုတ် plasticity ၏ သာ. ကွီးမွတျကာလ။
Dual-စနစ်များမော်ဒယ်များမှမသိမသာကွဲပြားပေါင်းထည့်ခြင်း, အ Triadic မော်ဒယ် (Ernst နှင့် Fudge, 2009 နှင့် Ernst et al ။ , 2006) ၏ညှိနှိုင်းထံမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရလဒ်များကိုအတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူအဆိုပြုထား နှစ် သိမြင်မှု circuitry ကနေတဆင့်လူမှုရေး-ထိခိုက်စေအာရုံကြောဆားကစ်။ လူမှု-ကိုထိခိုက်ဆားကစ်ပု VS ကကမကထပြုခဲ့တစ်ခုချဉ်းကပ်မှုစနစ်နှင့် amygdala ကကမကထပြုခဲ့အနေနဲ့ရှောင်ရှားခြင်းစနစ်အပါဝင်သည်။ ထိုအချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းစနစ်များအကြားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် PFC အားဖြင့်အကွက်ချလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်တစ်ဦးသိမြင်မှုစည်းမျဉ်းစနစ် ascribed ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Triadic မော်ဒယ်လည်း valence-related ဘက်လိုက်မှုအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ coding ထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန့်ကျင်ပေါ်ထွက်လာအဖြစ်လြောကျလူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ bivalent သက်ရောက်မှုမှပြော၏။ အမှန်မှာထို VS အပြုသဘော valenced အခင်းအကျင်းဒါပေမယ့်လည်းအပျက်သဘောသူမြား (ဥပမာ, သက်တူရွယ်တူလက်ခံမှုနှင့်ငြင်းပယ်ခံရဖို့မသာဓာတ်ပြုပြီး; Gunther Moore et al ။ , 2010; Guyer et al ။ , 2015, Guyer et al ။ , 2012a နှင့် Guyer et al ။ , 2012b), နှင့် amygdala အဆိုး valenced အခင်းအကျင်းဒါပေမယ့်လည်းအပြုသဘောဆောင်သူမြား (ဥပမာ, ကြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မျက်နှာများမသာမှဓာတ်ပြုပြီး; Canli et al ။ , 2002, ဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာ / ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်အပြုသဘော / စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်; Hamann et al ။ , 2002 နှင့် ဝါတော် et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့် VS နှင့် amygdala sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု positive အဆိုးမြင်စိတ်တွေဘက်လိုက်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလူမှု Re-အရှေ့တိုင်းဆန်မူဘောင် (နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005) လူမှုရေးအပြုအမူ node များတဲ့လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ကွန်ရက် (SIPN) ကိုဖြတ်ပြီးအသိုက်ဦးနှောက်ဒေသများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အမြစ်တွယ်နေသည်ဘယ်လိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံစိုက်။ ပြီးသားအစောပိုင်းအသက်တာ၌ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သောထောက်လှမ်း node ကို, ထိုကဲ့သို့သောသာလွန်ယာယီ sulcus (STS), intraparietal sulcus, fusiform မျက်နှာဧရိယာနှင့်ယုတ်ညံ့ယာယီနှင့် occipital အဖြစ်ဆက်ဆံဒေသများအားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အခြေခံလူမှုရေးဂုဏ်သတ္တိများ၏အမြင်နှင့်အမျိုးအစားကို support cortical ဒေသများ။ ဘေးဒဏ်သင့် node ကိုပု VS, amygdala, hypothalamus, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယကို၎င်း, OFC ပါဝငျခွငျးအားဖွငျ့ salience ဒဏျခတျ / အပြုသဘော / ကြိုးသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အတူက imbuing နေဖြင့်လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက် process လုပ်တယ်။ နှင့်ဒေသများတွင်; နောက်ဆုံးတွင်သိမြင်-စည်းမျဉ်း node ကိုပု medial နှင့် dorsal PFC (dPFC mPFC) ဆီက input မှတဆင့် (အခြားသူများက '' စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူထုတ်လုပ်, prepotent တုံ့ပြန်မှုဟန့်တားသိ, ဥပမာ) လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှု၏ရှုပ်ထွေးသောသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင် ventral PFC (vPFC) ။ အတန်ငယ်အစောပိုင်းအသက်တာ၌ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ပေမယ့်ဘေးဒဏ်သင့် node ကို,, (အပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းမှာ gonadal steroids ၏ရောက်လာအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း reactivity ကိုနှင့် sensitivity ကိုတစ်ခုမျာထည်းထည်းရှုမြင်Halpern et al ။ , 1997, Halpern et al ။ , 1998, McEwen, 2001 နှင့် Romeo et al ။ , 2002), အသိမြင်-စည်းမျဉ်း node ကိုအစောပိုင်းလူကြီး (သို့တစ်ဦးထက်ပိုအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းအောက်ပါအတိုင်းသော်လည်းကာဇီ et al ။ , 2000), အဓိကလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုဖို့ ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးပြီးထိန်းချုပ်ထားတုံ့ပြန်မှု supporting ။
အဆိုပါသိမြင်-စည်းမျဉ်း node ကိုအပေါ်ရှင်းပြရာတွင်, နယ်လ်ဆင်နှင့် Guyer's (2011) အဆိုပါ SIPN မော်ဒယ်၏ extension ကိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးပေမယ့်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုသာများ၏တဖြည်းဖြည်းဆည်းအာရုံစိုက်။ လူမှုရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သုံးခုရှုထောင့်ဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် vPFC အတွင်းဒေသများကထောက်ခံသည်။ စည်းမျဉ်းမျိုးဆက် / သင်ယူမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုစလုံး Orbital gyrus နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus ပိုမိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒေသများအားဖြင့် subserved နေစဉ်စိတ်ခံစားမှုတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ခြင်း, OFC ၏ medial တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ထောက်ခံသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လူမှုရေးအပြုအမူနိုင်အခြားသူများနှင့်အပြန်အလှန်နှင့်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းလိုက်လျောညီထွေဘို့အရေးကြီးသည်သကဲ့သို့, vlPFC ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း, အထူးသဖြင့်, (ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် psychopathology ဆက်စပ်Guyer et al ။ , 2008, ဘုန်းတော်ကြီး et al ။ , 2006 နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး et al ။ , 2008) ။ ပြောင်းပြန်, လူမှုရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရရှိ psychopathology ဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေတချို့ဆယ်ကျော်သက်ကာကွယ်ပေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏သုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပင်ကိုထောကျပံ့ဥပမာကိုကြည့်ပါ (ပံ့ပိုးပေးခြင်းမရှိသောသို့မဟုတ်ထောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့ပေါ် မူတည်. အဆိုပါစဉ်ဆက်၏တစ်ခုခုကိုအစွန်းရောက်မှာရလဒ်များကိုပြမှ posited သူအလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်၏အမှု၌အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းစေခြင်းငှါ Belsky နှင့် Beaver အဘိဓါန်, 2011 မျိုးရိုးဗီဇ-defined neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်း၏အရည်အသွေးတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို Self-စည်းမျဉ်းများတွင်ကွဲပြားမှု) နှင့်စပ်လျဉ်း။
ဤ neurodevelopmental မော်ဒယ်များတစ်လျှောက်တွင် PFC ၏ရင့်ကျက်မှုနှင့် subcortical ဒေသများနှင့်၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုများသည်လူမှုပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်ရင်ဆိုင်နေရသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောစိတ်ခံစားမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစွမ်းရည်များရရှိရန်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်လူမှုရေးအခြေအနေအသစ်များ (ဥပမာ - ရွယ်တူချင်းလက်ခံမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များရှာဖွေခြင်း၊ မိဘများထံမှတစ် ဦး ချင်းစီ) ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူသည်ဤအခြေအနေများမှတုံ့ပြန်သော key ကို ဦး နှောက်ဒေသများမှ input ကိုအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းသည်။ လူမှုအဆင့်အတန်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပူပြင်းသည့်၊ လူမှုရေးအရထိခိုက်လွယ်သောဒေသများမှတဆင့်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခိုင်အမာမှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌လူမှုရေးအခြေအနေပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်သောမြီးကောင်ပေါက်များအတွက်လူမှုရေးအရသက်ရောက်မှုရှိသည့်တိုက်နယ်အားလူမှုရေးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများ (သို့) အရိပ်လက္ခဏာများဖြစ်လာစေရန်လမ်းပြပေးလိမ့်မည်။ နှင့် / သို့မဟုတ်လူမှုရေး vs. အပြုသဘောအားပေးမှုနှင့် / သို့မဟုတ် prosocial ။ လူမှုရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (ဥပမာ၊ Todd et al ။ , 2012), အတိအလင်းရှိပြီးသား neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမဖြစ်စဉ်ကို။ ထို့ပြင်အောက်ပါအသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, prefrontal neurocircuitry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှတဆင့်စည်းမျဉ်းစွမ်းရည်လှုံ့တစ်ထောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးအကောင်းဆုံးရလဒ်များ secure တစ်ဦးချုပ်ရာထူးနေရာအရပ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်ကကူညီနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောမြီးကောင်ပေါက်, သပ္ပါယ်ကြီးစွန်းဆီသို့ကြောင်း sensitivity ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်မူတည်ပြီးမှပိုကောင်းနိုင်ကြလူမှုရေး-ထိခိုက်စေ neurocircuitry မှတဆင့်သာအပြုသဘောလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်ပေမယ့်လည်း, သိမြင်-စည်းမျဉ်း neurocircuitry မှတဆင့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွန်အမင်းအခြေအနေတွင်အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအပြုသဘောပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက်အပြုသဘောရည်မှန်းချက်လိုက်စားအတွက်ဇွဲရှိရှိနှင့်မော်ဒယ်မှ, အတူအပြန်အလှန်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူစာနာသိမ်မွေ့လူမှုရေးတွေကိုသုံးပြီးအတွက်သာလွန်စာကျွမ်းကျင်မှုရရှိစေနိုင်သည်။ သူတို့ကအစပိုကောင်း (ဒုက္ခဆင်းရဲ downregulate နှင့်ဆိုးရွားသောရလဒ်များကနေဝေးလွှဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူစေခြင်းငှါ,သဖန်းသီး။ 1).
ပေါင်းလဒ်မှာတော့ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment ၏မော်ဒယ်များ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များအားဖြင့်အဆိုပြုထားသောများအတွက် - ပိုကောင်းနှင့်အဘို့အ - ပိုဆိုးဖက်ရှင်အတွက်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အာရုံကြော Moderator ရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ကြောင်းအဆိုပြုထား။ ပထမအချက်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ (ဥပမာ - မက်လုံးများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ) ကိုအထိခိုက်မခံသောတုံ့ပြန်မှုရှိသောကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များ (ဥပမာ - ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း) ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်လူမှုရေးအရသက်ရောက်သောဆားကစ်များသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏လူမှုရေးအခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အမှန်မှာအနုတ်လက္ခဏာလူမှုရေးအခင်းအကျင်းများအားအဓိကတုံ့ပြန်သောလူမှုရေးအရသက်ရောက်မှုရှိသည့်တိုက်နယ်သည်အပြုသဘောဆောင်သူများအားတုန့်ပြန်မှုကိုလည်းပြသသည်။ ဒုတိယအချက်အနေနှင့် neurodevelopmental model သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ပိုမိုကြီးထွားလာနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်လွတ်လပ်သောအပြုအမူများသို့ကူးပြောင်းရာတွင်အထိခိုက်မခံသောသင်္ဘောကို ဦး ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည် - သိသာလွယ်ကူမှုနှင့်သိသိသာသာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအတွက်ဖြေရှင်းသည်။ အတွင်းနှင့်ပြင်ပအခြေအနေများပြောင်းလဲမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်လူတစ် ဦး ၏အတွေးများ၊ စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းသည်ရှင်သန်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ဤဒြေ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုသည်အလွန်အမင်းအခြေအနေတွင်ထိခိုက်လွယ်သော၊ အထောက်အကူပြုသောပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်ထိတွေ့မိသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသောရလဒ်များကိုပြသသောဆိုးရွားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြုသဘောဆောင်သောဖွံ့ဖြိုးမှုရလဒ်များကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးပေးနိုင်မည်ကိုရှင်းပြရန်အတွက်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုကြှနျုပျတို့ရလဒ်များ impact မှမူလတန်းလူမှုရေးအခင်းအကျင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုများအတွက်အလားအလာသရုပျဖျောသော neuroimaging စာပေကနေ key ကိုပင်ကိုယ်မူလတွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လှည့်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့မိသားစု / စောင့်ရှောက်သူများအခြေအနေတွင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြန်လည်သုံးသပ်။ ထိုအခါကျနော်တို့ရွယ်တူပတ်ဝန်းကျင်၏သွားရောက်လည်ပတ်မည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုနေတဲ့ကိုစိစစ်တစ်ဦးချင်းစီ-ခြားနားချက်အချက်အဖြစ်အာရုံကြော sensitivity ကိုတွက်ချက်ရန်လည်းမဟုတ်သလိုအချိန်ကျော်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment ၏အသစ်တစ်ခုမော်ဒယ်များ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အခွင့်ဦးနှောက်နှင့်နောက်ထပ်လေ့လာမှုထိုက်ကြောင်းလူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်သဲလွန်စပေးထားသည်။
4 ။ လူမှုရေးအခင်းအကျင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်
4.1 ။ မိသားစု / စောင့်ရှောက်သူများအခင်းအကျင်း
မိဘ၏ပုံစံ၊ မိဘနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုအရည်အသွေး၊ မိသားစုအခြေအနေနှင့်မိသားစုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းစသည့်လူတစ် ဦး ၏ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအတွေ့အကြုံများမှတစ်ဆင့်ဖန်တီးခဲ့သောလူမှုရေးအခြေအနေသည်ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်ဟုသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုမှုများကဖော်ပြသည်။Collins et al ။ , 2000 နှင့် Darling နှင့် Steinberg, 1993Steinberg နဲ့မောရစ်, 2001) ။ ဤရွေ့ကားဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အများဆုံးစေ့စ့စပ်စပ်ကိုထင်ရှားစွာပြသင့်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်မိဘအုပ်ထိန်းလွှမ်းမိုးမှုထိုကဲ့သို့သောမျိုးရိုးဗီဇ phenotype အဖြစ်ဇီဝ sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, (နေဖြင့်တည်းဖြတ်ခံရဖို့သရုပ်ပြခဲ့ကြBakermans-Kranenburg နှင့်ဗန် Ijzendoorn, 2011 နှင့် Knafo et al ။ , 2011) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို (အလျင်အမြန် et al ။ , 2014) ။ ဘဝသင်တန်းကိုဖြတ်ပြီးလူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက် (ဤဇီဝအချက်များစောစော-ဘဝအတွေ့အကြုံများ, သူတို့၏အပြန်အလှန်၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့Boyce နှင့်အဲလစ်, 2005), ဒါကြောင့်ဒီကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောထူးခြားတဲ့သင်ယူမှုပေးထားနောက်ပိုင်းမှာရလဒ်တွေများအတွက်အထူးအရေးပါမှုရှိစေခြင်းငှါမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ဤလွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အမူအကျင့်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်မိဘအုပ်ထိန်း / စောင့်ရှောက်သူများအတွေ့အကြုံများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများပုံမှန်စေခြင်းငှါဦးနှောက်ဝိသေသလက္ခဏာများဥပမာကမ်းလှမ်းကြောင်းသုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်။ ငါတို့သည်လည်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံမှပြောပြတယ်ဘယ်လိုပေါ်အခြေခံပြီး bivalent ရလဒ်များနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းကြိုးကိုင်မိဘအုပ်ထိန်း / စောင့်ရှောက်သူများအတွေ့အကြုံများလှုံ့ဘယ်လိုအကြံပြုကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးပါ။
မိဘ / စောင့်ရှောက်သူများသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကနေအများဆုံးအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအာရုံကြောလွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ။ ဦးနှောက် function ကိုမှဆွေမျိုး, ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအားကြီးသောဗီဇအခြေခံရှိပြီးထို့ကြောင့် (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတိုးပွားလာ heritability ဖေါ်ပြခြင်းသည် PFC တူသောပိုပြီး evolutionarily ဝတ္ထုဒေသများနှင့်အတူပိုမိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြောင်းဦးချင်းကွဲပြားမှု, သရုပ်ပြစေခြင်းငှါJansen et al ။ , 2015 နှင့် Lenroot et al ။ , 2009) ။ ဤသည် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက် (စောင့်ရှောက်သူများတုံ့ပြန်ကြောင်း neurobiological ဆားကစ်ပေါ်မှာမျိုးရိုးဗီဇမျိုးကွဲများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Bakermans-Kranenburg နှင့်ဗန် Ijzendoorn, 2011, Belsky နှင့် Beaver အဘိဓါန်, 2011, Belsky နှင့် Pluess, 2009 နှင့် Pluess နှင့် Belsky, 2013) ။ ဦး နှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မတူဘဲ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကွဲပြားခြားနားမှုများကိုချက်ချင်းခြေရာခံရန်၊ တုံ့ပြန်ရန်နှင့်ထင်ဟပ်စေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုအသင့်တော်ဆုံးအညွှန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆက်စပ်အခြေအနေများတွင်အာရုံကြောဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်အတူ (1) ပြင်းထန်သောအာရုံကြောဓာတ်ပြုခြင်းပမာဏနှင့် (၂) ပြင်းအားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားတို့၏ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။စာနယ်ဇင်းများတွင် Moore နဲ့ Depue,) ။ တည်ငြိမ်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုညှိနှိုင်းအတွေး၏ပုံစံများ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခွအေနကိုဆွဲထုတ်၏မျက်နှာကိုအတွက်အပြုအမူ (ရောင်ပြန်ဟပ်သောကြောင့်Fleeson, 2001) ဤသဘောထားတွေကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမတူညီတဲ့လူမှုရေးအခင်းအကျင်းအတွက်သင်ယူမှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကနေတဆင့် "ညှိ" ခဲ့ကြပြီသက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်စနစ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပုံမှန်ကနေပျေါပေါကျဖို့ posited နေကြသည်။ interrelate နှင့်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ (တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းကြားရသောထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အ function ကို,Hao က et al ။ , 2013, ပျားရည် et al ။ , 2010, pause, 2013, ပါဝါစ et al ။ , 2010 နှင့် Zielinski et al ။ , 2010), နှစ်ဦးစလုံးလွယ်ကူစွာထိခိုက်ယန္တရားများအဖြစ်အစေခံစေနိုင်သည်။
4.1.1 ။ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံသက်သေအထောက်အထား
differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုက်ရိုက်ဦးနှောက်-based ညွှန်းကိန်းလက်ရှိတွင်စာပေချို့တဲ့ရသောအမှုသည်အနေကြသော်လည်း, လေ့လာမှုများလက်တဆုပ်စာဆိုရှယ်အခြေအနေတွင်မှဆယ်ကျော်သက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အာရုံကြောညွှန်းကိန်းအဖြစ်ဆန်းစစ်ဖို့အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအစုတခုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤလုပ်ငန်းကိုရန်လိုမုန်းတီးမှု vs. မိဘနွေးထွေးမှု၏အဆငျ့ကဲ့သို့သောရှုထောင့်များကိုတွက်ချက်ကြောင်းမိဘ-ဆယ်ကျော်သက် interaction က၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအစီအမံများအကြားအသင်းအဖွဲ့များမှတ်တမ်းတင်တော်မူပြီ ကျူးကျော်သို့မဟုတ် dysphoria vs. ဆယ်ကျော်သက် positive; နှင့်မိဘများ 'နှင့်မြီးကောင်ပေါက်' 'တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွင်ဤအပြုအမူမှတုံ့ပြန်မှု။ မိသားစုဒိုင်းနမစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ပုံရှိနေဆဲသောကြောင့်, မိဘ-ဆယ်ကျော်သက် interaction က၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အစီအမံကိုဆက်သွယ်ထားသောအကြာတွင်ရလဒ်များအပေါ်သူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်းစားအတွက်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှ neurobiological sensitivity ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးများအတွက်ဂေဟဗေဒ-တရားဝင်ချဉ်းကပ်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာရေးအစီအမံနာတာရှည်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုကြုံတွေ့နှင့်ဆက်နွယ်နေခဲ့ကြဖွယ်ရှိမိသားစုဖြစ်စဉ်များသို့လျှပ်တစ်ပြက်သို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်အဖြစ်ကုသနေကြသည်။ တစ်ပြိုင်တည်း၏အကဲဖြတ်ထက်ကဤလေ့လာမှုအချို့အတွက် longitudinal ဆက်ဆံရေးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ sequence ကိုနှင့် ပတ်သက်. အခြကန့်သတ်, ဤသုတေသနမိသားစုအတွင်းအသိုက်ခံရသူငယ်၏အလားအလာ confounding မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်မထားဘူးသော်လည်း, တွေ့ရှိချက် neurobiological လူမှုရေးအမျိုးမျိုးစစ်ဆင်ရေးအကြံပြုပေမယ့် sensitivity ကို။
ပထမဦးစွာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစိတ်ခံစားမှုအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်ထမ်းသောနည်းလမ်းများအတွက်မိဘများနှင့်အတူအပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုဖို့တုံ့ပြန်မှု affective နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်ပါပြီ။ Whittle et al ။ (2008) , မြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 11-13) နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများအကြားစိန်ခေါ်မှုပဋိပက္ခဖြေရှင်းလေ့ကျင့်ခန်းများ၏အခြေအနေတွင်ပိုမိုကြီးမား amygdala volumes ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ရှည်ကြာချိန်ဘို့မိမိတို့မိခင်များဆီသို့ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်အမျိုးသားများအတွက်ဘယ်ပြ ACC ထုထည်ကြီးမားသော asymmetry လျော့နည်းသွားလည်းမိခင်များဆီသို့ကျူးကျော်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ဘယ်ပြ OFC ထုထည်ကြီးမားသော asymmetry reciprocating မိခင်များ '' dysphoric အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များ၏ဤ set ကိုညီမျှခြင်း၏အန္တရာယ်-တိုးပွားလာဘက်မှာတစ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်သက်ရောက်မှုအကြံပြုနိုင်ကြောင်း, အ amygdala ၏ (1) အသံအတိုးအကျယ်ပေးထားဆိုလိုသည်မှာ diathesis စိတ်ဖိစီးမှု, အစဉ်အလာ, ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုမှတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေထုတ်လုပ်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒေသရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ ကြီးမြတ်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏သမိုင်း, နှင့် (2) ညာဘက် PFC မျက်နှာသာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ asymmetries လည်း (အကျိုးသက်ရောက်စေတိုးမြှင့်အနုတ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြCanli, 2004; Davidson နှင့် Fox, 1989 နှင့် Fox က et al ။ , 2001) နှင့်လျော့နည်းသွားစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း (မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ , 2003).
အခွားသောအလုပျ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များအားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့ပိုကောင်း-နှင့်အဘို့အ-ပိုဆိုးထုံးစံ၌ပိုပြီးတိုက်ရိုက်သရုပ်ပြမိသားစုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ neurobiological တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီခြားနားချက်များသည်။ သွားရမည်အကြောင်း Whittle et al ။ (2008) , ပိုကြီးတဲ့ amygdala volumes ကိုနည်းဘယ်ပြ ACC asymmetry ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်မိခင်ကျူးကျော်ဖို့ပို maladaptive တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိ Yap et al ။ (2008) ဤအတူညီအတိအကျအချက်များအနိမ့်ကျူးကျော်မိခင်များနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး (အသက်အရွယ်မရွေး 11-13) ကြားတွင်စိတ်ကျရောဂါ၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Yap et al ။ ထို့အပြင်မိခင်များကျူးကျော်မြင့်မားခဲ့ကြသည့်အခါသေးငယ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်မိခင်များကျူးကျော်အတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြသည့်အခါဆယ်ကျော်သက်အတွက်လျော့နည်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူဒါပေမယ့်ပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်မထွက်ရအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ယန္တရားဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများကတည်းဖြတ်အဖြစ်အတူတကွခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက်များအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့ဒုက္ခအခင်းအကျင်းအတွက် bivalent ရလဒ်များသရုပျဖျော။
အထက်ပါလေ့လာမှုများ, ဦးနှောက် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေရလဒ်များနှစ်ခုစလုံးအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး Whittle et al ။ (2011) Prospect နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် (အသက်အရွယ်မရွေး 11-13) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စောစော (အသက်အရွယ်မရွေး 13-15) မှစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်အပြောင်းအလဲအပေါ်မိခင်ကျူးကျော်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတစ်ဦးက Moderator အဖြစ် hippocampal အသံအတိုးအကျယ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကမိန်းကလေးတွေအဘို့, ပိုကြီးတဲ့ hippocampus မိဘတစ်ဦးကလေးပဋိပက္ခဖြေရှင်းလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာအသီးသီးမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်မိခင်ကျူးကျော်များ၏အခြေအနေတွင် သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အငယျဆုံးသောနောက်ဆက်တွဲစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အနည်းဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများအတွက်, သာ. ကြီးမြတ် hippocampal အသံအတိုးအကျယ်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုလွယ်ကူစွာထိခိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ် inhibited ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစိစစ်ခြင်းဖြင့်မိသားစုအခင်းအကျင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာ hippocampal အသံအတိုးအကျယ်ကိုလည်းအလယ်အလတ်ရှိမရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ထောက်ခံမိသားစုဝိသေသလက္ခဏာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစဉ်းစားရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောမီးခိုးရောင်ကိစ္စအဆိုပါ hippocampus အတွက်သိပ်သည်းဆ (အဖြစ် orbitofrontal gyrus ၌) အဘယ်သူ၏မိခင် သာ. ကြီးမြတ်ယေဘုယျလူ့ဆက်နွယ်မှု (ရှိခဲ့ပါတယ်မြီးကောင်ပေါက်၌တွေ့Schneider et al ။ , 2012), တစ်ဦးကလိထိုးဖြစ်ခြင်းစဉ်) သာယာသောအတွေ့အကြုံ (ဥပမာအစာစားချင်စိတ်အသံယင်းသည်အပြုအမူတွေ (hippocampal ဆဲလ်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ရှင်သန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ဖေါ်ပြခြင်းတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီရှာတွေ့Wöhr et al ။ , 2009 နှင့် Yamamuro et al ။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ထောက်ခံမိဘအုပ်ထိန်းပါဝင်သည်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်အခင်းအကျင်းဖို့ hippocampus ၏ sensitivity ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ amygdala နှင့် hippocampus neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ loci ဖြစ်မည်အကြောင်းသဘာဝကျပါတယ်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် hippocampus နှစ်ဦးစလုံး (စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်ယူမှုရှုထောင့်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လူသိများကြသည်Baxter နှင့် Murray, 2002 နှင့် Calder et al ။ , 2001; Phelps, 2004; Phelps နှင့် LeDoux, 2005) ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ထပ်ကိုထိခိုက် circuitry (၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်သူတို့လွတ်လပ်စွာ valence ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့ superordinate function ကိုရှိသည်သောဖွယ်ရှိသည်Ernst နှင့် Fudge, 2009) ။ ပိုများသောအလုပ်အဖြစ်အခြေအနေတွင်မှလွယ်ကူစွာထိခိုက်တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ် amygdala ပမာဏ၏ဖြစ်နိုင်သောကျားသက်ရောက်မှုလေ့လာစူးစမ်းဖို့လိုအပ် Whittle et al ။ (2008) နှင့် Yap et al ။ (2008) စုပေါင်းယောက်ျားလေးများအတွက်ကြီးမားသော amygdala ပမာဏနှင့်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်ပိုကြီးတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ် volumes ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ သို့သော် amygdala ၏ bivalent ရလဒ်များအပေါ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်တစ် ဦး ချင်း၏လိုအပ်ချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့်တန်ဖိုးများကိုပြုပြင်ရာတွင်၎င်း၏ယေဘုယျအခန်းကဏ္ with နှင့်ကိုက်ညီသည် (Cunningham နှင့် Brosch, 2012) နှင့်၎င်း၏ဆွဲထုတ်ခြင်းအပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းအတွက်ရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေများအတွက်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူအကျိုးသက်ရောက်စေ (Bechara et al ။ , 1999) ။ ထို့ပြင်လူမှုရေးဦးနှောက်အယူအဆ (Dunbar မှာ 2009) သာ. ကြီးမြတ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူလူမှုရေး-ထိခိုက်စေ circuitry အတွင်းဒေသများယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးလူမှုရေး sensitivity ကိုထက်အထူးသခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ သာ. ကြီးမြတ် amygdala ပမာဏ၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတသမတ်တည်း သာ. ကြီးမြတ်အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်ရှိသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြီးမားတဲ့ amygdala အသံအတိုးအကျယ်အပြုသဘော (ခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့သာဆက်စပ်မှုရှိပါသည်Redlich et al ။ , 2015) ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အခြနှင့်အတူ (ဆန် et al ။ , 2014) နှင့်လူမှုကွန်ယက်အရွယ်အစားနှင့်ရှုပ်ထွေး (Bickart et al ။ , 2011 နှင့် Kanai et al ။ , 2012), ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အပါအဝင် (von der စစျ et al ။ , 2014) ။ ၎င်း၏ဆက်စပ် sensitivity ကိုလူသိများအလားတူ, hippocampus, (Fanselow, 2010; Hirsh, 1974, ကရူ, 2009 နှင့် Fanselow, 2010), motivationally သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းအန်ကုက်လုပ် Episode နှင့်စိတ်ခံစားမှုသတင်းအချက်အလက်ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါ hippocampus မကြာခဏလွတ်လပ်စွာ valence ၏ဤ function ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်စဉ်းစားလျက်ရှိ၏ အကြောင်း, ဒါကြောင့် (နောက်ဆုံးတွင်ထိုအကိုယ်စားပြုနှင့်အညီအပြုအမူလမ်းညွှန်, အချိန်ကိုဖြတ်ပြီးကိုယ်စားပြုသို့မြင်ကွင်းများ, ဖြစ်ရပ်များ, နှင့်အခင်းအကျင်း၏ဒြပ်စင် binding ထောက်ခံပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်Schacter နှင့် Addis, 2007) ။ နောက်ဆုံးတွင် amygdala နှင့် hippocampus နှစ်ဦးစလုံးအဘို့, ဒေသတစ်ခု connectome အတွင်းဒေသများအဖြစ်၎င်းတို့၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအလွန်အရေးကြီးသည်။
4.1.2 ။ ဦးနှောက် function ကိုမှတဆင့်ထိခိုက်စေ "tuning"
ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် - - ဦးနှောက်ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင်းကနဦးသက်သေအထောက်အထားပေးထား neurobiologically ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်အထိမ်းအမှတ်မယ်, ငါတို့ယခု bivalent စောင့်ရှောက်သူများအခင်းအကျင်းထိတွေ့နေသောအထိခိုက်မခံမြီးကောင်ပေါက်မတူကွဲပြားရလဒ်များရောက်ရှိသောလမ်းခရီးသို့မဟုတ်ယန္တရားများစဉ်းစားပါ။ အနုတ်လက္ခဏာစောင့်ရှောက်သူများအခင်းအကျင်းနှိုင်းယှဉ် positive သူတို့ရဲ့ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဦးနှောက်၏လူမှုရေး-ထိခိုက်စေ circuitry sensitize လိမ့်မည်။ လူမှုရေး-ထိခိုက်စေသတင်းအချက်အလက်မှတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကြောင့်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့သည့်ရှုထောင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစောင့်ရှောက်သူများအခင်းအကျင်းများကရာထူးတိုးရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီနည်းလမ်း instantiated ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးစပိုင်းတွင်ကြားနေလူမှုရေး sensitivity ကို (အချိုးအစားမမျှမက register လုပ်သွားမယ့်ဘက်လိုက် sensitivity ကိုသို့ဖြစ်စဉ်များဖွံ့ဖြိုး, နှင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ဆိုးရွားသော vs. ထောက်ခံ features တွေတုံ့ပြန်မှုစေခြင်းငှါPluess, 2015) ။ ဤ (သောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီ "အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျမှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရပါမည်ခဲ့ရာမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရာကိုတဦးတည်းထင်တဲ့အန္တရာယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျမှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရပါမည်ဖြစ်ပါသည်" ဖြစ်ပါတယ်Cunningham နှင့် Brosch, 2012, p ။ 56) ။ ဦးနှောက် function ကို၏ဤ tuning ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းအတွက်သင်ယူမှုနှင့်အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ဘယ်လိုသက်တမ်းတစ်လျှောက်အပါအဝင်စောင့်ရှောက်သူများအခင်းအကျင်းများနှင့်အမူအကျင့်ရလဒ်များအကြား link ကိုဦးနှောက် function ကို၏စိစစ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်သုတေသနများကထင်ရှားစေခြင်းငှါ။ အမှန်မှာက neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မတိုင်မီလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်အဘယျအဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးမှဖမ်းယူနားဆင်ခဲ့တင်ရန်အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အရှင်ဖွယ်ရှိအသစ်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းအတွက်အတွေ့အကြုံများမှအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်တိုးမြှင့်လူမှုရေး sensitivity ကို၏ဤကာလအတွင်းသိသာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးသက်ရောက်စေ tuning ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူတသမတ်တည်း, လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ကျော်လွန်ဦးနှောက် function ကိုစောစော-ဘဝစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့မိသားစုဒုက္ခ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ခြိမ်းခြောက်သတင်းအချက်အလက် processing တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်နို့စို့အရွယ်အတွက်စောင့်ရှောက်သူများဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျစ်လျူရှုကြုံတွေ့သူကိုမြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 9-18) (amygdala နှင့် hippocampus hyperactivation ပြသMaheu et al ။ , 2010) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (လည်းစိုးရိမ်ပူပန်လက္ခဏာတွေခန့်မှန်းကြောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသက်သေအထောက်အထားအစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်ကျွေးမွေးပြုစုမိဘမဲ့ဂေဟာပိုပြီးနှစ်အကြာတွင်ပိုကြီး amygdala အသံအတိုးအကျယ်ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့သရုပ်ပြနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်စပါး et al ။ , 2010) ။ မထောက်ခံကြောင်းစောင့်ရှောက်သူများအခင်းအကျင်းများနှင့်ဦးနှောက်အကြားအသင်းအဖွဲ့များလည်းမြီးကောင်ပေါက် '' ဆုလာဘ် circuitry အတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 9-17) ၏နမူနာများအနက်အဆိုပါ lentiform နျူကလိယအတွက်မိခင်ဝေဖန်မှုများမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထောက် ( ပို. အဆိုးဝေဖန်မှုသိနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်Lee က et al ။ , 2014). Casement et al ။ (2014) အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက်အရွယ်မရွေး 11-12) တွင်အနိမ့်မိဘနွေးထွေးမှုဟာ amygdala, VS နှင့် mPFC အတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်တွေကိုမှတိုးချဲ့ာင်းနှင့်အတူနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက် 16) တွင်ဆက်စပ်ခဲ့မိန်းကလေးငယ်တစ်နမူနာတှငျတှေ့; ဒီ VS နှင့် mPFC တုံ့ပြန်မှုအနိမ့်မိဘနွေးထွေးမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကြား link ကိုကမကထပြုခဲ့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဤဒေသ သာ. ကြီးမြတ် activation, ယေဘုယျအားဖြင့်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများ (အကြောင်းကိုလူမှုရေးသတင်းအချက်အလက် coding-အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်သောအရာခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်Amodio နှင့် Frith, 2006; Gallagher နှင့် Frith, 2003), မလျော်ကန်သောတန်ဖိုးနှင့်မျှော်လင့်မထားသောအတိတ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီးစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်မျှော်လင့်ချက်များရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်မှုသည် ဦး နှောက်၏သင်္ကေတများကိုတဖြည်းဖြည်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးနှင့်အကဲဖြတ်မှုအတွေ့အကြုံများကိုတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖော်ပြလာနိုင်သည်။ အတူတူယူ, ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုလူမှုရေး - ထိခိုက်သောတိုက်နယ်အတွင်းရှိဒေသများဆိုးရွားသောစောင့်ရှောက်သူများအတွေ့အကြုံများမှလုပ်ဆောင်နေအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းနှင့်အလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့အာရုံကြောအမှတ်အသားဆိုလိုနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထောက်ခံမိဘအုပ်ထိန်း၏အတွေ့အကြုံများကိုလည်းဦးနှောက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ, ဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အ bivalent အတွေ့အကြုံများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ် hinged မူဘောင်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းသက်သေအထောက်အထားနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ ဥပမာ, မော်ဂန် et al ။ , (2014) အစောပိုင်းကလေးဘဝ (18 နှင့် 24 လအတွင်း) တွင်ယောက်ျားလေးများအားဖြင့်ကြုံတွေ့ကြောင်း သာ. ကြီးမြတ်မိခင်နွေးထွေးမှုကိုတွေ့နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / အစောပိုင်းလူကြီး (အသက် 20) တွင်ငွေကြေးဆုလာဘ်များမျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဆုံးရှုံးမှုလျော့ကျ mPFC activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ချစ်ခင်ခြင်းနှင့်နွေးထွေးမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမိဘအုပ်ထိန်းမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအကြောင်းကိုအပါအဝင်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်နှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပ်များမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုလျော့စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မိခင်နွေးထွေးမှု၏ဤအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုစောစောကလေးဘဝအတွက်မိခင်စိတ်ကျရောဂါထိတွေ့မဟုတ် vs. ထိတွေ့ယောက်ျားလေးများများအတွက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အနုတ်လက္ခဏာ reactivity ကိုတစ်ဦးအစောပိုင်း-ပေါ်ထွန်းအခြေခံကနေရပ်တလေ့နှင့် bivalent ဖို့ mPFC တစ် neurobiological attunement အကြံပြုသောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီအားကောင်းခဲ့သည် မိဘအုပ်ထိန်းအခင်းအကျင်း။ ဤရလဒ်သည်ဆုလာဘ်သင်ယူမှု (ဥပမာ, အ striatum နှင့် mPFC) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများတွင်မိခင်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်း။ ညွှန်ပြ အကြောင်း, အဘယ်သူ၏မိခင် '' စိတ်သဘောထားဖော်ရွေများနှင့်မေတ္တာရှင်အပြုအမူသို့မျက်နှာအနိမ့်တန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်အရေးပါမှုအဖြစ်လက်ခံရရှိ vs. ဆုလာဘ်ဆုံးရှုံးမှုငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကအစပျိုးတဲ့သင်ယူမှုသမိုင်းကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဦးနှောက် function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အပြုအမူအပေါ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုနောက်ဆုံးမှာလူမှုရေး sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောဒေသများတွင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအချို့သော elicitors မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏ပုံသဏ္ဍာန်မှတဆင့်အပ်နှင်းနိုင်ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက် '' မိသားစုအခင်းအကျင်းဒါပေမယ့်လည်းလှုံ့ဆော်မှုကိုထိပုတ်ပါမြီးကောင်ပေါက်ကြောင်း '' မသာခြေရာခံလူမှုရေး sensitivity ကိုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကျိုးဆက်တွေကိုတချို့ဦးနှောက်ဒေသ sensitivity ကိုအခြေအနေတွင်ပေါ် မူတည်. သပ္ပါယ်သို့မဟုတ် maladaptive ဘယ်လောက်အလင်းကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အတူ။ ဆုလာဘ်တွေကို process လုပ်တယ်သော VS, ဒေသတစ်ခုထိုကဲ့သို့သောအစုဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောသုတေသန (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ reactivity ကို VS သာ. ကြီးမြတ်ပြောပြတယ်ပေမယ့်Bjork et al ။ , 2010 နှင့် Bjork နှင့် Pardini, 2015; ချိန် et al ။ , 2011; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007, Gatzke-Kopp et al ။ , 2009 နှင့် Somerville et al ။ , 2011), VS တုံ့ပြန်မှုလူမှုရေးအပြုအမူတွေနဲ့လျှော့ချအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ adaptive ရန်၎င်း၏ချိတ်ဆက်အတွက်မိသားစုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများလူမှုရေးမှအထိခိုက်မခံဖြစ်နိုင်သည်။ သာ. ကြီးမြတ်မိသားစုတာဝန်တန်ဖိုးများကိုသတင်းပို့သူကိုလက်တင်မြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 14-16) (ငွေကြေးမက်လုံးပေးတွေကိုတုံ့ပြန် VS လျော့နည်းအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့တုန့်ပြန်တုံးပြသTelzer et al ။ , 2013a) ။ အခွားသောအလုပျမြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 15-17) ယခင်ကနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းသတင်းပေးပို့သူကိုနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုမှအကုန်အကျအလှူငွေအောင်သည့်အခါမိမိတို့အဘို့ငွေကြေးဆုလာဘ်ရရှိမှုဆန့်ကျင်အဖြစ်သူတို့မိသားစုကူညီခြင်းကနေပွညျ့စုံ (VS အတွက်တုန့်ပြန်ကြီးထွားခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိTelzer et al ။ , 2010) ။ ဤအ prosocial ပြုမူတုံ့ပြန် VS တိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရ Related အလုပ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ယူပြီးတစ်နှစ်အကြာ (ထဲမှာလျှောက်လျော့နည်းဟောကိန်းထုတ်Telzer et al ။ , 2013b) ။ ထို့ကြောင့် "ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေဘို့အားနည်းချက်အပ်နှင်းတော်မူကြောင်းကိုအလွန်တူညီအာရုံကြောဒေသကိုလည်းအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်သည်" (Telzer et al ။ , 2013b, p ။ 45) ။ ထို့အပွငျ Telzer et al ။ , 2014a hedonic vs. VS reactivity ကို (ဥပမာအဓိပ္ပာယ်ကို / ရည်ရွယ်ချက်, prosocial) eudaimonic မှတွေ့ရှိခဲ့ (ဥပမာစွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ, Self-ဝမျးသာစရာ) ဆုလာဘ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်အသီးသီး longitudinal ကျဆင်းမှုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်လိုစိတျ။ တွေ့ရှိချက်များ၏ဤ set ကိုဆုလာဘ်မှအာရုံကြော sensitivity ကိုသောအရာ sensitivity ကိုမိသားစု / စောင့်ရှောက်သူများလူမှုဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံများတဲ့ function ကိုအဖြစ် oriented ဖြစ်ဖို့ (ဥပမာ, hedonic ငွေကြေး, လူမှုရေး, eudaimonic) ဆုလာဘ်၏အတန်းပေါ် မူတည်. ရလဒ်များ adaptive သို့မဟုတ် maladaptive မှပြောပြတယ်သောဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက် နှင့်သင်ယူခြင်း။
4.1.3 ။ Bivalent စောင့်ရှောက်သူများအတွေ့အကြုံများနှင့် PFC ရငျ့
ယခုအချိန်အထိဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းအပြုသဘောဆောင်အခင်းအကျင်းအနုတ်လက္ခဏာအခင်းအကျင်းခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေး-အလျှော့အန္တရာယ်များအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်သော်လည်းလူမှုရေးအရတန်ဖိုးထားအခွင့်အလမ်းများဆီသို့လှုံ့ဆော်ကြောင်းအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်သောကွောငျ့, bivalent ရလဒ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်အဘို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သပ္ပါယ်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းကိုအသုံးပြုရန်နိုင်စွမ်းအပြုသဘော, အပျက်သဘောဘဲ, အခင်းအကျင်းအတွက်အားဖြည့်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောဘယ်နေရာတွေမှာလည်းအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် subcortical circuitry နှိုင်းယှဉ် cortical ၏ differential ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတရလဒ်များ divergent ဖို့အထောက်အကူပြုကွဲပြားခြားနားသောမိသားစုအခင်းအကျင်းထိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အမူအကျင့်သုတေသနတစ်ဦးချင်းစီအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် Self-စည်းမျဉ်းစွမ်းရည် (အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တည်ငြိမ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီးစနစ်တကျနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးကွောငျးဖျောပွသDeater-Deckard နှင့်ဝမ်, 2012) ။ Cross-Section နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်သည်ဤမဟာဌာန (ဥပမာခိုင်ခံ့စေဘို့ caregiving / နွေးအထိခိုက်မခံနှင့်တုံ့ပြန်မှုမိဘအုပ်ထိန်း၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြ, Bernier et al ။ , 2012, Hammond ဟာ et al ။ , 2012 နှင့် Hughes က 2011) ။ ရှုပ်ထွေးသောဇီဝဗေဒ-ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှုတွေ, စည်းမျဉ်းစွမ်းရည် (သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ချို့ယွင်း) မှတဆင့်ငြမ်းများအတွက်အစွမ်းထက်အတွေ့အကြုံအခင်းအကျင်းများကိုမိဘ / စောင့်ရှောက်သူများ-လူငယ်ဆက်ဆံရေးမှတဆင့်လွှဲပြောင်းသူတို့ကို (သို့မဟုတ်မဟုတ်) ကျင့်သုံးနေကြသည် (Deater-Deckard, 2014).
Neuroimaging လေ့လာမှုများကဒီရုပ်ပုံထောက်ခံပါတယ်။ အနုတ်လက္ခဏာအခင်းအကျင်း dysregulating သက်ရောက်မှုကိုပြ။ cortical ထူများတွင်ကျယ်ပြန့်ချို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမွေးမြူထံမှအစောပိုင်းဘဝစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲချို့တဲ့ခံစားခဲ့ရသူကိုသားသမီးများ, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် Impulse နှင့်အတူပြဿနာများကမကထပြုခဲ့ကြောင်းချို့တဲ့ (အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြMcLaughlin et al ။ , 2014) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက်အရွယ်မရွေး 9-17) ခုနှစ်တွင်မိခင်ဝေဖန်မှုများထိတွေ့လူမှုရေး-ထိခိုက်စေ circuitry အတွက်တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ, lentiform နျူကလိယ, posterior insula) နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ (ဥပမာ dlPFC, ACC) နှင့်လူမှုရေးသိမြင်မှု (ဥပမာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား , TPJ, posterior cingulate cortex / precuneus) circuitry (Lee က et al ။ , 2014) ။ အလားတူပင်ကြမ်းတမ်းမိဘအုပ်ထိန်းနှင့်အတူကြီးပြင်းလာခံနှင့်အခြားမိသားစုဖိအား vlPFC တစ်ခု inhibitory အခန်းကဏ္ဍအားထုတ်မခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြု, လူကြီး (အသက်အရွယ်မရွေး 18-36) တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်၌တရား vlPFC နှင့်အတူ amygdala ၏လျော့နည်းထူးခြား function ကို, ယင်းသည်, အပြုသဘောဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် (amygdala တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တေလာ et al ။ , 2006) ။ ကြောင်းအစောပိုင်းဒုက္ခ (အသက် 1) ပိုပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်မြင်ကြမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အနုတ်လက္ခဏာ amygdala-mPFC နားချင်းဆက်မှီ၏အရှိန်မြှဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်ဆက်စပ်သည်အထောက်အထား (လည်းရှိပါတယ်Gee et al ။ , 2013a နှင့် Gee et al ။ , 2013b) ။ Accelerated cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုး (ကျက်တဲ့ခြင်းကိုကာလအရွယ်ရောက်ပြီးသူထိရောက်မှုရောက်ရှိဖို့ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိကိုယ်ကိုထိန်းညှိဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းရသဏ္ဍာန်ဖြစ်ကောင်းသောကွောငျ့, နောက်ပိုင်းမှာဒီထက်အကောင်းဆုံးအပြုအမူရလဒ်များနှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါlu et al ။ , 2009 နှင့် Nelson နှင့် Guyer, 2011) ။ တစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွား, အနုတ်လက္ခဏာအခင်းအကျင်းဟာအာရုံကြောအဆင့်မှာသိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ dysregulation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒီအခင်းအကျင်းထဲမှာမွေးအားလုံးမြီးကောင်ပေါက်အားနည်းချက်ရင်ဆိုင်ရစဉ်ပိုမို neurobiologically ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိချို့တဲ့ဖြစ်ကြကြောင်းတင်ပြသည်။
ပြောင်းပြန်အပြုသဘောပတ်ဝန်းကျင်မှာမြီးကောင်ပေါက်အပြုသဘောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များမှီကူညီသင့်ကြောင်းသိမြင်မှုစည်းမျဉ်း circuitry ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်။ Non-ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကလေးများ vs. ဗီဇ-defined ဖြစ်ပေါ်နိုင် differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်တစ်တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်, (အသက်အရွယ် 8) တွင်သူတို့အတော်လေးအပြုသဘော enviroments မှာမွေးခဲ့ကြသည့်အခါပိုမိုကောင်းမွန်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့သည့်အမြင့်ဆုံး PFC အသံအတိုးအကျယ်, ရှိခဲ့ပါတယ်; အနုတ်လက္ခဏာပတ်ဝန်းကျင်မှာ (ထဲမှာမွေးလာသောအခါအဓိပ်ပာယျ၏လမ်းကြောင်းသစ်အဆင့်, သူတို့ကနိမ့်ဆုံး PFC အသံအတိုးအကျယ်ခဲ့Brett et al ။ , 2014) ။ "vantage sensitivity ကို" နဲ့တကယ်တော့, တသမတ်တည်း (Pluess နှင့် Belsky, 2013), အရာထောက်ခံဖြစ်ကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်အပေါ်အလေးပေး, သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခင်းအကျင်းအတွက်တီထွင်သောသူသည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Belsky နှင့် Beaver အဘိဓါန် (2011) အသီးသီးရခဲ့သောပိုပြီး plasticity alleles, သူတို့ကထောက်ခံနှင့်မထောက်ခံကြောင်းမိဘအုပ်ထိန်းအခြေအနေများအတွက်ပြသပိုနည်း Self-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအပြုအမူ, (ကိုလည်းမြင်သောဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး (သို့သော်မရအမျိုးသမီး) (အသက်အရွယ်မရွေး 16-17) တွင်တွေ့ရှိရ Laucht et al ။ , 2007) ။ ကျနော်တို့ PFC circuitry ၏တိုးမြှင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ salubrious ရည်မှန်းချက်များအစေခံရန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်မည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ Telzer et al ။ (2011) မိသားစုတန်ဖိုး သာ. ကြီးမြတ်လူမှုဆက်ဆံရေးမြီးကောင်ပေါက်၎င်းတို့၏မိသားစုမှပေးကမ်းခြင်း၏ prosocial အခြေအနေတွင်ထိတွေ့သောအခါ function VS နှင့်အတူချိတ်ဆက်ခဲ့သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေသစုဆောင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပေါင်းလဒ်များတွင်တွေ့ရှိချက် hypoactive သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင် function ကိုအတွက်စိတ်မချရသော, ဖွဲ့စည်းပုံ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတပုဒ်ကိုထိတွေ့သော်လည်းဆက်သွယ်မှု, အနုတ်လက္ခဏာပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်၌ထင်ရှားနေသည်ကြောင်း PFC circuitry (ကိုလညျးရှုအပြုသဘောရလာဒ်လုံခြုံရေးနှင့်ဆက်စပ် PFC ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြသကြောင်းအကြံပြု စာနယ်ဇင်းများတွင် Moore နဲ့ Depue,တစ်ဦးအတန်ငယ်ဆက်စပ်အယူအဆ၏ဆွေးနွေးမှုသည်, အာရုံကြောသတ်သောကြောင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖို့ပြောပြတယ်ကဲ့သို့) ။
4.2 ။ ရွယ်တူချင်းအခင်းအကျင်း
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အများဆုံးဒီကဗျာအပြောင်းအလဲများအနက် peer-oriented မှ (မိသားစုဖြစ်ခြင်းကနေလူမှုရေးဆက်နွယ်မှုအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီဖြစ်ပါသည်Rubin က et al ။ , 1998 နှင့် Steinberg နဲ့မောရစ်, 2001) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဝင်ရောက်ပေါ်၌လူငယ်အချို့ (ရွယ်တူတွေနဲ့ပိုပြီးအချိန်ပေးCsikszentmihalyi နှင့် Larson, 1984), ကိုတိုး (ထွက်ရှာရွယ်တူ '' ထင်မြင်ချက်များကိုတန်ဖိုးထားဘရောင်း, 1990) နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရွယ်တူလက်ခံမှုပိုမိုအာရုံမစိုများမှာ (Parkhurst နှင့် Hopmeyer, 1998), အထူးသဖြင့်ဒီကာလအတွင်းမှာသက်တူရွယ်တူငြင်းပယ်ခံရတိုးများအတွက်အန္တရာယ်အဖြစ် (Coie et al ။ , 1990) ။ ဤအလူမှုရေးအပြောင်းအလဲများကိုမြီးကောင်ပေါက် '' စိတ်ခံစားမှုသုခချမ်းသာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်နေကြသော်လည်း, အနည်းငယ်သည်သက်တူရွယ်တူ milieu မှ neurobiological sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဆယ်ကျော်သက်ရလဒ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘယ်နေရာတွေမှာလဲချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုလူသိများသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သုတေသနမြီးကောင်ပေါက်ကဒီ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားပုံကိုနှငျ့ ပတျသကျ. အပါအဝင်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တူရှိနေခြင်း၏အခင်းအကျင်းမှ sensitivity ကို, ရွယ်တူအကဲဖြတ်များနှင့်လူမှုရေးဖယ်များ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပေါ်မှာအလင်းကိုသွန်းမှစတင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ထွန်းသစ်စ psychopathology သို့မဟုတ်အရည်အချင်းကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီရွယ်တူပါဝင်သောအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု-ကိုဆွဲထုတ်အခြေအနေများစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် function ကိုအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်အထက်၏အသင်းအဖွဲ့များအာရုံစိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရန်, အထက်ပါကိုးကားအဖြစ်လက်ရှိသက်တူရွယ်တူအခင်းအကျင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ (ပေမယ့်, အတူဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ညွှန်းကိန်းသက်ဆိုင်သောတွေ့ရှိချက်အဲဒီမှာသုတေသနကြသည်မဟုတ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် amygdala အသံအတိုးအကျယ်နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်ကိုရှုပ်ထွေးအကြားတစ်ဦးနှင့်စပ်လျဉ်း၏သက်သေအထောက်အထားရှိ၏ von der စစျ et al ။ , 2014).
4.2.1 ။ ရွယ်တူချင်းအထံ
မြီးကောင်ပေါက် '' တိုးမြှင့်အာရုံကြောလူမှုရေး sensitivity ကိုပုတ်တစ်ခုမှာအရေးကြီးသောသက်တူရွယ်တူအခြေအနေတွင်ရွယ်တူကိုယ်ထိလက်ရောက်ပစ္စုပ္ပန်သို့မဟုတ်မရှိမရှိရိုးရိုးပါပဲ။ ဤသည်စမ်းသပ်မှုတွေအကြိုးကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး simulated မောင်းနှင်မှုဂိမ်းကစားသောအခါဥပမာ, ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် (အသက်အရွယ်မရွေး 14-18) ကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးတည်း, မြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 18-22) vs. စောင့်ကြည့်ရွယ်တူချင်းအတူ Stoplight, သာ. ကြီးမြတ် risk- နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ VS နှင့် OFC အတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြသ ယူအပြုအမူ (ချိန် et al ။ , 2011) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်နမူနာအတွင်းမှာပဲ ချိန် et al ။ (2011) ဒီအန္တရာယ်-ယူပြီးအခြေအနေတွင်ရှိနေခြင်းစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန် VS တုံ့ပြန်မှုအဆိုးဤဒေသ၏ activation လွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်အထောက်အပံ့အကြံပြုခြင်း, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန် Self-အစီရင်ခံခုခံဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆက်စပ် electroencephalography အလုပ်များတွင်ရွယ်တူရှိနေခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကောင်းသည်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သက်တူရွယ်တူ salience ၏တိုးမြှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရို surgency အတွက်မြင့်မားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး (အသက်အရွယ်မရွေး 15-16) (တစ်ဦးအမူအကျင့်ချဉ်းကပ်မှု၏စုပေါငျး, အာရုံခံစားမှု-ရှာနှင့်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ) တွင်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် Self-စောင့်ကြည့်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (ထိန်းညှိကြောင်းဒေသများ (ဥပမာ mPFC) ၏အာရုံကြော activation ကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်Segalowitz et al ။ , 2012) ။ ထို့ကြောင့်သက်တူရွယ်တူရှိနေခြင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ရွယ်တူချင်းမှမြင့် neurobiological sensitivity ကိုအတူသူတွေထဲမှာအန္တရာယ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်၏အနုတ်လက္ခဏာသွင်ပြင်လက္ခဏာမှအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့ကျစေနိုင်တယ်။
4.2.2 ။ ရွယ်တူချင်းအကဲဖြတ်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့လူမှုရေးအရအကဲဖြတ်အခြေအနေများမြင့်မားတဲ့ salience, arousal နှင့် Self-ဆက်စပ်မှုတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ပိုမိုအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမြီးကောင်ပေါက်သူတို့အခြားသူများအကဲဖြတ်ခံရသည်ဟုယုံကြည်ရသောအခြေအနေများပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့လာမည့်အွန်လိုင်း "Chatroom" မိတ်ဖက်အဖြစ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်စေခြင်းငှါရွယ်တူချင်းအနေဖြင့်အကဲဖြတ်ထားချက်အရသည့်အခါ Guyer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအလုပ်၏တစ်ဦးကခန္ဓာကိုယ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အာရုံကြော activation ပုံစံများဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 9-17) အသီးသီး drive ကိုဆုချဆက်စပ်ပေးသောရွယ်တူသူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဟောကိန်းများ, လူမှုရေး-ထိခိုက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှု, ဥပမာနျူကလိယ accumbens, hypothalamus, hippocampus နှင့် insula, လုပ်နေစဉ် အကျိုးသက်ရောက်စေထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, memory နဲ့စုစည်းပြီးနှင့် visceral ပြည်နယ်များ, ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များ (သို့သော်မရယောက်ျားလေးတွေ) တွင်ကြီးထွားခဲ့ပါတယ်, အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးမိန်းကလေးငယ် (Guyer et al ။ , 2009) ။ ဒါကဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏အဘို့အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါးကြောင်းရွယ်တူ '' ထင်မြင်ချက်များပိုမို salience အကြံပြုသောအာရုံကြော sensitivity ကိုလူမှုရေး-အကဲဖြတ်အခြေအနေတွင်ဤအမျိုးအစားမှသူတို့ကို psychopathology ၏ internalizing ပုံစံများကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်ပေမယ့်လည်း Affiliate ၏ prosocial နှင့်အခြားအမျိုးအစားများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိဆပ်မယ် လူမှုရေးအသိပညာအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းအပြုအမူ။
အခွားသောအလုပျရွယ်တူချင်းတိုးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အပြုအမူယိမ်းသောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီအကဲဖြတ်, စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန် striatal sensitivity ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြီးကောင်ပေါက် (အသက် 18) (, အပြုအမူဘယျလိုမှအဖြစ်နို့စို့အရွယ်နဲ့ကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီးခွဲခြားလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏လက်တွေ့အဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်တိုးပွါးကြောင်းကဒေါသရိုနှင့်တစ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပြီးAron et al ။ , 2012ထားချက်အရအကျိုးစီးပွားတစ်ဦးရွယ်တူများကအကဲဖြတ်ခံရသည့်အခါ), (ပင် psychopathology တငျပွ၏မရှိခြင်းအတွက် striatal activation ၏မြင့်အဆင့်ဆင့်ပြသGuyer et al ။ , 2014) ။ လူမှုရေးအကဲဖြတ်ဖို့ Striatal sensitivity ကိုအရှင်အပြုအမူတားစီးကနေတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်အထိခိုက်မခံဘဝကိုစတင်ခဲ့သူကိုမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူပင် အင်အားကြီး et al ။ (2013) အနုတ်လက္ခဏာလူမှုရေးတုံ့ပြန်ချက်နှိုင်းယှဉ်အပြုသဘောထားချက်အရအခါပြသအနည်းဆုံးအစောပိုင်းလူကြီး (အသက်အရွယ်မရွေး 18-24), ငြင်းပယ်ခံရ sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, လူမှုရေးအကဲဖြတ်အကြောင်းကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားဆောက်လုပ်ရေးအသုံးပြုပုံ VS နှင့် dmPFC ပိုမို activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒါက striatal sensitivity ကိုအားကောငျးမကောငျးရလဒ်များဖို့ "ညှိ" ကအလုပ်ကထောက်ခံနေသည်စခွေငျးငှါ Gunther Moore et al ။ (2010) အဆိုပါ striatum ၏ activation ဖေါ်ပြခြင်း, အထူးသဖြင့်, ထို putamen နှင့် vmPFC linearly သက်တူရွယ်တူလက်ခံမှုထားချက်အရနှင့်သက်တူရွယ်တူငြင်းပယ်ခံရလက်ခံရရှိနှစ်ဦးစလုံးမှအသက်အရွယ်မရွေး 10-21 ဖြတ်ပြီးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုတိုးမြှင်၏ salience နှင့်လူမှုရေးအရအကဲဖြတ်အခင်းအကျင်းအတွင်းတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိနိုင်စွမ်းအကြံပြုထားသည်။ တဖကျတှငျမူပုံကြီးချဲ့ striatal activation သူတို့အရည်အချင်းလူမှုရေးအပြုအမူများအတွက် tools များလွှဲပြောင်းမပေးရာတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလျှင်တုံ့ပြန်လွယ်ပြင်လွယ်မရှိတဲ့၏ပုံစံများသို့မြီးကောင်ပေါက်သော့ခတ်, လူမှုရေးအကဲဖြတ်အလွန်အမင်းအရေးကြီးသောဆပ်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထောက်ခံ enviroments မှာ, ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေး sensitivity ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိမ်မွေ့လှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ခြင်း, တစ်ဝတ္ထုအခြေအနေမှာ '' စစျဆေးဖို့ခေတ္တနား '' ကိုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် [ကြောင်း] တစ်ဦးသပ္ပါယ်နှင့် "ပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုမဟာဗျူဟာအတွက် culminate စေခြင်းငှါ, နှင့် ", ပိုမိုအားကောင်းစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်အားလုံးသည့်ထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုစီစဉ်နောက်ပိုင်းတွင်သိမြင်မြေပုံများအားထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်များအတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရှုပ်ထွေးအပြောင်းအလဲနဲ့မဟာဗျူဟာများ, အလုပ်သမားအပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာ (Aron et al ။ , 2012, p ။ 263) ။
အဆိုပါ amygdala သက်တူရွယ်တူတုံ့ပြန်ချက်နှင့်လက်ခံမှုပေါ်တွင်အလုပ်ကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှဆယ်ကျော်သက် neurobiological sensitivity ကိုနောက်ထပ်အလားအလာရှိသောအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ သက်တူရွယ်တူအကဲဖြတ်ထားချက်အရသည့်အခါ Non-စိုးရိမ်မြီးကောင်ပေါက်မှဆွေမျိုး, ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားသူများကိုသူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်အတွက်စိတ်မဝင်စားပါလိမ့်မည်ကြောင်းယုံကြည်သူလူမှုရေးအရစိုးရိမ်မြီးကောင်ပေါက်, (မြင့် amygdala activation သရုပ်ပြGuyer et al ။ , 2008; Lau et al ။ , 2012) စဉ်ဆက်မပြတ် amygdala တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ရွယ်တူများကပယ်ချခံရပြီးနောက် (Lau et al ။ , 2012) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသို့သော်သည်, amygdala negatively- ဒါပေမယ့်လည်းအပြုသဘော-valenced လှုံ့ဆော်မှုမသာမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ဥပမာ, ကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာများဒါပေမယ့်လည်းပျော်ရွှင်သူမြားကို (မသာမှ reactive ဖြစ်ပါသည်Canli et al ။ , 2002, Guyer et al ။ , 2008 နှင့် Perez-Edgar et al ။ , 2007) ။ အမှန်မှာထို amygdala (အသီးသီးခြုံငုံလူမှုရေးအမြင်, လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုများနှင့်လူမှုရေးခြင်းကိုမနှစ်သက်ထောက်ပံ့သောကွဲပြားကွန်ရက်များ anchors ကြောင်းလူမှုရေး-ထိခိုက်စေ circuitry တစ်အချက်အချာဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီBickart et al ။ , 2014) ။ ထို့ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များတစ်အကွာအဝေးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများတုံ့ပြန်၌ဤဖွဲ့စည်းပုံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန့်ကျင်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။ အနာဂတ်အလုပ်ဆနျးစစျဖို့အတှကျ amygdala အတွက်မူကွဲ, vlPFC, dmPFC နှင့် striatal reactivity ကိုလူမှုရေးအခင်းအကျင်းနှင့် psychopathology သို့မဟုတ်လူမှုရေးအရည်အသွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကြားအကဲဖြတ်အလယ်အလတ်အသင်းအဖွဲ့များစေ့စေ့ကြည့်ရှုလျှင်နောက်ဆုံးတွင်ကြောင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။
4.2.3 ။ လူမှုဖယ်
အခြားအ neuroimaging သုတေသနလူမှုရေးဖယ်ဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကြိုးကိုင်အဖြစ်ဓာတ်ခွဲခန်းပြင်ပမှာတိုင်းတာခဲ့ပြီးသောဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းလူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု၏နေရာအနှံ့နှင့်အထူးသဖြင့်စိတ်ပျက်စရာပုံစံပေါ်တွင်ပိုပြီးတိတိကျကျအာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ (ထို simulated ဘောလုံးကို-ဆမ်းဂိမ်း Cyberball အသုံးပြုခြင်းဝီလျံနှင့် Jarvis, 2006), Masten et al ။ (2009) ဂိမ်းထဲကနေဖယ်ထုတ်ထားခံရဖို့ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့နေရအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, ဒီလူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှ sensitivity ကိုတစ်ဦးအညွှန်းကိန်း, အပြုသဘော, လူမှုရေး-ထိခိုက်စေဒေသများ (ဥပမာ subgenual ACC, ဒါမှမဟုတ် subACC ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့မြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 12-14) တွင်တွေ့ရှိရ နှင့် insula) နှင့်အဆိုးစည်းမျဉ်း (ဥပမာ vlPFC, dmPFC နှင့် VS) ကိုထောက်ပံ့သောဒေသများ activation နှင့်အတူ; တိုင်းဒေသကြီးများဤအစုံအချင်းချင်းအနုတ်လက္ခဏာဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲအလုပ်လူမှုရေးဖယ်ဖို့ subACC activation Prospect (early- ကနေနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက် longitudinal တိုးခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရMasten et al ။ , 2011).
အဆိုပါ subACC အပြုသဘောအဖြစ်အပျက်သဘောသက်တူရွယ်တူအခင်းအကျင်းမှတုံ့ပြန်ပေါ်တွင်အလုပ်အတွက်ခြေရာခံရန်အရေးကြီးပါသည်အခြားဦးနှောက်ဒေသဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ subACC အဓိကအားအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အတွေ့အကြုံနှင့်စည်းမျဉ်းပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပုံရသည်ပေမယ့်, အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များ valenced ရန်၎င်း၏ activation လည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ Laxton et al ။ (2013) စိတ်ခံစားမှုပုံရိပ်မှတုန့်ပြန်ကြောင်း subACC အတွက်အာရုံခံ၏, သုံးပုံနှစ်ပုံဝမ်းနည်းသို့မဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေအကြောင်းအရာတုံ့ပြန်ပေမယ့်သုံးပုံတစ်ပုံ, ကြားနေပျော်ရွှင်, ဒါမှမဟုတ်ပါးအကြောင်းအရာတုံ့ပြန်သောစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Pre-pubertal ကလေးများ (8-10 နှစ်) စောစောမြီးကောင်ပေါက် (12-14 နှစ်), အဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက် (16-17 နှစ်), နှင့်လူငယ်လူကြီးများ (19-25 နှစ်) နှင့်အတူ cross-section လေ့လာမှု၌, Gunther Moore et al ။ (2010) အရွယ်ရောက်သူများအနေဖြင့် subACC သည်သက်တူရွယ်တူများ၏လက်ခံမှုကိုမျှော်လင့်သောအခါလက်ခံခြင်းခံရရန်နှင့်သက်တူရွယ်တူများငြင်းပယ်ခြင်းကိုမျှော်လင့်သည့်အခါငြင်းပယ်ခြင်းခံရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပိုမိုနာတာရှည်မျှော်မှန်းထားသောဘက်လိုက်မှုများကို subACC ၏တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ ပီးလ်ဘာ့ဂ် et al ။ (2015) အကဲဖြတ်စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန် subACC activation အသီးသီးရွေးချယ်ထားသည့်အနေဖြင့်တုံ့ပြန်ချက်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရွယ်တူပယ်ချခဲ့တဲ့သူကျန်းကျန်းမာမာနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မြီးကောင်ပေါက်အဘို့အသက်အရွယ် 8-17 တစ်လွှားတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတူတူယူရလဒ်များ subACC ထိခိုက်စေ tuning ပေါ်မှာငါတို့အတွေးအခေါ်များနှင့်အညီ, ခြေရာခံအဘယ်အရာအတွက် valence ကိုက်ညီမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်တစ်ဦး neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရှုထောငျ့နှငျ့ကိုကျညီ, Masten et al ။ (2009) အဆိုပါ dorsal ACC (dACC) ၏ သာ. ကြီးမြတ်တက်ကြွစွာ subACC လည်းဆက်စပ်ခဲ့သည့်နှင့်တသားတပွဲတစ်ပွဲ maladaptive အချက်, ငြင်းပယ်ခံရ sensitivity ကိုနှင့်တဦးတည်းတည်ပြီးသတ်တယ်သပ္ပါယ်အချက်, လူ့အရည်အချင်းကို, နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်များ၏ဤ set ကိုပိုကောင်း-နှင့်အဘို့အ-ပိုဆိုးလိုလားသောဆက်ဆံရေးဆက်စပ်ကြောင်းတတ်နိုင်သမျှအာရုံကြော sensitivity ကိုတိုင်းဒေသကြီးများအဖြစ် dACC နှင့် subACC မီးမောင်းထိုးပြ။ အဆိုပါ dACC ထိုကဲ့သို့သောပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေး, မျှော်မှန်းချိုးဖောက်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအမှားအယွင်းများ (အဖြစ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးCarter ကများနှင့်ဗန် Veen, 2007 နှင့် Somerville et al ။ , 2006) ။ ငြင်းပယ်ခံနိုင်မှုနှင့်ကွဲပြားသောအရည်အချင်းများနှင့်ကွဲပြားသောထင်ရသောစရိုက်များနှင့်ဆက်နွယ်နေသော dACC activation ပုံစံများကိုခွဲခြားခြင်းမှာအရည်အချင်းသည်စည်းမျဉ်းဒေသများ (ဥပမာ - vlPFC, dmPFC, VS) ကိုခေါ်ယူခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ငြင်းပယ်ခံရမှုအပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့်သက်တူရွယ်တူများမှအဖြစ်အပျက်များအတွက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်မှု၏ bivalent သက်ရောက်မှုများအားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သောလူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်မြင့်မားသော sensitivity ကြောင့်ရရှိနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များရရှိသောသူများအတွက်မူ၎င်းသည်အရေးကြီးသောလူမှုရေးစံသတ်မှတ်ချက်များအရအပြုအမူအားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြင့်ထိန်းညှိပေးခြင်းအားဖြင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသည့်အဆုံးဆီသို့ထိရောက်သောလမ်းကြောင်းကိုပေးနိုင်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းလုပ်ဆောင်မှုသည်လူမှုရေးအချက်ပြစနစ်မှတစ်ဆင့်၎င်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်သင်ကြားရေးနှင့်အပြုအမူများကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး ကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အပြုသဘောသာမကဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။Eisenberger နှင့် Lieberman, 2004 နှင့် Macdonald နှင့် Leary, 2005).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Integrated အလုပ်လူမှုရေးဖယ်လွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တဲ့ function ကိုအဖြစ်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ပြောပြတယ်ဘယ်လိုများ၏အာရုံကြောအခြေခံလေ့လာခဲ့သည်။ Peak et al ။ (2013) Cyberball မှဖယ်ထုတ်လိုက်ခံရပိုပြီးအန္တရာယ်-ယူပြီး Stoplight အပေါ်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခုခံတွန်းလှန်ရန်လျော့နည်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်သူကိုမြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 14-17) တွင်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပါမယ်အဆိုပါငြင်းပယ်ရွယ်တူများကစောင့်ကြည့်ခံနေရစဉ်မြီးကောင်ပေါက်အန္တရာယ်များမောင်းနှင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်အတိုင်းဤအကျိုးသက်ရောက်မှု rostral TPJ (rTPJ) ၏တိုးမြှင့် activation ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ၏အကျိုးဆက်များကိုတွေ့ကြုံရသောအခါမြီးကောင်ပေါက်လည်း dlPFC ၏လျော့နည်း activation ပြသ "သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု" အန္တရာယ်များကိုကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေရလဒ်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်မြီးကောင်ပေါက် '' အားနည်းချက်အာရုံစူးစိုက်မှုကကမကထပြုခဲ့နှင့် / သို့မဟုတ် differential စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် rTPJ ၏အခန်းကဏ္ဍကို (ပေးသောရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ sensitized ဖြစ်ကြောင်းအာရုံကြောယန္တရားများ mentalizing စေခြင်းငှါGweon et al ။ , 2012 နှင့် ဗန်တွင်း Bos et al ။ , 2011) နှင့် Self-စည်းမျဉ်းများနှင့်အာရုံကိုထိန်းချုပ် dlPFC (Aron et al ။ , 2004 နှင့် Cohen ကို et al ။ , 2012) ။ အလားတူပင် 16-17, သက်တူရွယ်တူအခြေအနေတွင် (မရှိခြင်း vs. သက်တူရွယ်တူရှိနေခြင်း) နှင့်လူမှုရေး-ထိခိုက်စေကွန်ရက်များအတွက်လူမှုရေးဖယ်ဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအသက်အထီးအကြား (ဥပမာ, လူမှုရေးနာကျင်မှု: AI အ, dACC, subACC နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ: dmPFC, TPJ, ကျုံ့သွားစေပါတယ်) (နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူတခုတခုအပေါ်မှာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့Falk et al ။ , 2014) ။ ဤသည်လူမှုရေးအရဖယ်ထုတ်ထားခံရဖို့အာရုံကြော sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုသက်တူရွယ်တူအခြေအနေတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ, သက်တူရွယ်တူရှိနေခြင်း) ပေါ် မူတည်. ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေကိုဟောကိန်းထုတ်လြောကျတစ်ဦး "အယူအဆ၏သက်သေ" အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြားလေ့လာမှုဖြစ်သကဲ့သို့။
4.3 ။ အချိန်ကိုက်များနှင့်မိဘ / စောင့်ရှောက်သူများနှင့်သက်တူရွယ်တူလွှမ်းမိုးမှု၏ convergence
အတူတူမိဘအုပ်ထိန်း / စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ရွယ်တူ၏နှစ်ခုအခင်းအကျင်းချပြီးနှင့်ကျောက်ဆူးအချက်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အတူကြောင့်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှ differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်စေခြင်းငှါထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်တစ် sensitivity ကိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမိဘများ / စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများတဲ့ hierarchical ထုံးစံ၌ unravels, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ပုံအစောပိုင်းပေါ်နှင့်နေဆဲသြဇာအတွက်အမြစ်ယူသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် amplified ရကြောင်းအာရုံကြော Sensitivity အားစင်မြင့်ထားကြ၏။ ဒါကအစောပိုင်းကမိသားစုအခင်းအကျင်းမှတက်ရောက်ရန်တို့အားအဘယ်သို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဦးနှောက် "သွန်သင်" တုံ့ပြန်နှင့်တန်ဖိုးကိုကူညီစေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့၏အဓိကသက်တူရွယ်တူပတ်ဝန်းကျင်မှာဖို့ ပို. ပို. orient မြီးကောင်ပေါက်အဖြစ်, ရွယ်တူချင်းအတူအတွေ့အကြုံများမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်ရလဒ်များလမ်းညွှန်အဘယ်အရာကိုပိုမိုအလေးခြိနျကိုထည့်သွင်းဖို့စတင်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်, ဒီအထိခိုက်မခံကာလအတွင်းနှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းမိုးမှု၏မြစ်ဆုံအစောပိုင်းလူကြီးနှင့်ကျော်လွန်ပြီးသို့ကြာရှည်စေနိုင်သည်။
တချို့က neuroimaging သုတေသနမိဘများ / စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများမြီးကောင်ပေါက်ရွယ်တူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဘယ်လောက်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအာရုံကြော, စိတ်တွေအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တင်. ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီကိုထောက်ခံ, Tan က et al ။ (2014) , anterior insula, subACC ကျန်ရစ်သည် amygdala အတွက်သက်တူရွယ်တူလက်ခံမှုများ၏အပြုသဘောဆောင်အခြေအနေတွင်မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုမှေးမှိန်နေသည်ပာု (အသက်အရွယ်မရွေး 11-17) 'ကြာကြာမိခင် Support ကိုခေါ်မယ့်စိန်ခေါ်မှုမိခင်-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းမိခင်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်တည်တံ့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ နှင့်နျူကလိယ accumbens (NACC), လူမှုရေး-ထိခိုက်စေ circuitry အတွင်းအားလုံးဒေသများထားခဲ့တယ်။ မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းနှင့်ရွယ်တူချင်းမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးထက်ပိုအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းသိမြင်-စည်းမျဉ်းဆားကစ်အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်တားစီးထားတဲ့အစောပိုင်းကလေးဘဝစိတ်ထားမပါဘဲနှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူလူငယ်မှာတော့အလယ်တန်းကလေးဘဝ (အသက် 7) တွင်တွေ့ကြုံကြမ်းတမ်းမိဘအုပ်ထိန်း၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းဒီထက်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အကြံပြုခြင်းနှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက်အရွယ်မရွေး 17-18) တွင်ငြင်းပယ်ခံရစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်လျော့နည်းသွား vlPFC တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် အပြုအမူဘယျလိုမှအုပ်စုတွင်ဆိုးရွားသောမိဘအုပ်ထိန်းတစ်ဦး function ကိုအဖြစ်ငြင်းပယ်ခံရစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်တုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, (Guyer et al ။ , 2015) ။ ဤရလဒ်သည်အလယ်တန်းကလေးဘဝအတွက်နွေးမိဘအုပ်ထိန်း၏မြင့်မားတွေ့ကြုံသောသူလူငယ်အချို့ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ငြင်းပယ်ခံရစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်လျော့နည်းသွား caudate တုံ့ပြန်မှုပြသသောတွေ့ရှိချက်များကပြည့်စုံခဲ့သည်Guyer et al ။ , 2015) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီရလဒ်တွေကိုမိဘအုပ်ထိန်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအားဖြင့်မိဘအုပ်ထိန်းလွှမ်းမိုးမှု၏ (1) valence-တိကျတဲ့နှင့်ပြပွဲတစ်ခုခု (2) ဖြည့်ညှင်းသို့မဟုတ် (3) မိဘအုပ်ထိန်းဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ရွယ်တူချင်းမှဆယ်ကျော်သက်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြု မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လုပ်ကိုင်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားမှု။
ရလဒ်များနှစ်ဦးစလုံးလူမှုရေးအခင်းအကျင်းမှဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းမှရပ်တဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစဉ်းစားခုနှစ်တွင်ကြောင့်မိဘအတွေ့အကြုံများပထမနှင့်အချို့သောရလဒ်များအဘို့မှာသက်တူရွယ်တူအတွေ့အကြုံများထက်ပိုသြဇာညောင်းနေကြသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ Casement et al ။ (2014) သက်တူရွယ်တူသားကောင်နှင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အနိမ့်မိဘနွေးထွေးမှု (အသက်အရွယ်မရွေး 11-12) နှစ်ဦးစလုံးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက် 16) တွင်တွေကိုဆုချဖို့ထစ်အငေါ့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ပေမယ့်အနိမ့်မိဘနွေးထွေးမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်သာအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုစိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ ။ သို့တိုင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသက်တူရွယ်တူအတွေ့အကြုံတွေကိုဒီလူမှုရေး sensitivity ကိုရွယ်တူချင်းမှ re-oriented ကြောင့်လူမှုရေး sensitivity ကိုလြောကျမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးပွါးခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်မိဘအတွေ့အကြုံများထက်ပိုသြဇာညောင်းနေပေမည်။ Masten et al ။ (2012) တသမတ်တည်း (ဒီအခြေအနေတွင်ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့နေရနှင့်ဆက်စပ်, လူမှုရေးအရနှစ်ခုဒေသများသည် anterior insula နှင့် dACC အတွက်အစောပိုင်းလူကြီး (အသက် 18) တွင်ဖယ်ထုတ်ထားခံရဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုမှေးမှိန်နေသည်ပာုနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်သုံးစွဲသောအခြိနျကာလကို (အသက် 20) ဟောကိန်းထုတ်တွေ့ရှိခဲ့Eisenberger et al ။ , 2003; Masten et al ။ , 2009) ။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အတိတ်သက်တူရွယ်တူအခင်းအကျင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူရလဒ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲကနေ neurobiologically-based တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကဤသက်ရောက်မှု၏ခွန်အားအလတ်စားစေခြင်းငှါကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်မိသားစုမှာအတှေ့အကွုံပုသက်တူရွယ်တူ milieu ထံမှခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ဆုလာဘ်တွေကိုမှ neurobiological attunement အချိန်အဆညှိစေခြင်းငှါ,, နောက်ပိုင်းတွင်, ပတ်ဝန်းကျင်စေ့စေ့ကြည့်ရှုဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းလူကြီးသို့နှင့်ကျော်လွန်ပြီးတည်တံ့လွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
အနာဂတ်အလုပ်ထိုကဲ့သို့သောပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအထိခိုက်မခံကာလကိုကိုယ်စားပြုသောအရာကိုအတိုင်းအတာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအဖြစ်အချိန်ကိုက်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်ဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏မေးခွန်းများကိုအာရုံစိုက်ဖို့အရေးကွီးဖွစျလိမျ့မညျ; ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများဖုံးကွယ်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်နှင့်ရငျ့ဤနှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း, (နှောင်းပိုင်းတွင်အစောပိုင်းအကျူးများတွင်ရွယ်တူအခင်းအကျင်း vs. ဥပမာမိဘ / စောင့်ရှောက်သူများ, mid-, နဲ့ post-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်) ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုရေး-ဆက်စပ်ထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, ဤလူမှုရေး-ဆက်စပ်ထိတွေ့မှု (ဆိုလိုသည်မှာ၏ hierarchical ဆိုးကျိုးများ အစောပိုင်းကအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းသို့မဟုတ်အားသာချက်များကို) နောက်ဆက်တွဲဖှံ့ဖွိုးတိုးကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ။
5 ။ အနာဂတ်လမ်းညွန်များနှင့်ကောက်ချက်
ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment နှင့်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းတို့တွင်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်အပေါ်တစ်ဦးကြီးထွားလာ neuroimaging စာပေ, ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ၏မော်ဒယ်များရေပန်းစားကနေဆွဲ, ကျနော်တို့ (လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ဖို့စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဆယ်ကျော်သက် neurobiological sensitivity ကိုတစ်မူဘောင်ကနေအဆိုပြုထားကြပါပြီသဖန်းသီး။ 1 နှင့် သဖန်းသီး။ 2) ။ Neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များ (အဲလစ် et al ။ , 2011) ကိုမည်သို့ endogenous အပေါ်အာရုံစိုက်, ဇီဝဗေဒအချက်များသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတူအခြားသူများဆွေမျိုးတချို့တစ်ဦးချင်းစီ, အပ်နှင်း။ သို့သော်ဤသီအိုရီမူဘောင်များကပဲ့ထိန်းပင်ကိုယ်မူလအလုပ်၏ကျယ်ပြန့်အများစု neurobiological စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းအချက်များတစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဦးနှောက်ကိုတိုက်ရိုက်အစီအမံထည့်သွင်းမထားပါဘူး။ မရရှိနိုင်ပါ neuroimaging စာပေရလဒ်များအပေါ်လူမှုရေး-Contextual လွှမ်းမိုးမှု၏အဆုံးအဖြတ်ပေးအဖြစ်ဦးနှောက် function ကို / ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြန်ဆိုဘို့ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မူဘောင်ကိုသုံးပါ (သို့သော်ကြည့်ဖို့တော်မှာထားပြီး Yap et al ။ , 2008နှင့် Whittle et al ။ , 2011, ခြွင်းချက်အဘို့) ။
ကျနော်တို့ကပိုကောင်း-အတွက်သို့မဟုတ်အဘို့အ-ပိုဆိုးဖက်ရှင်အတွက်မိသားစုသို့မဟုတ်ရွယ်တူလွှမ်းမိုးမှုတည်းဖြတ်ကြောင်းအာရုံကြောဝိသေသလက္ခဏာများ၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အချို့ဖြစ်နိုင်သောသရုပ်ဖော်ပုံများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအဘို့, ဤ (သက်ရောက်မှုများ directionality အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှကျား, မကွဲပြားမှုနှင့်အတူ amygdala ၏အသံအတိုးအကျယ်မပါဝင်Whittle et al ။ , 2008 နှင့် Yap et al ။ , 2008), (ယောက်ျားအတွက်ဘယ်ပြအချိုးမညီ ACC အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားWhittle et al ။ , 2008 နှင့် Yap et al ။ , 2008), နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ပိုမိုကြီးမား hippocampi (Whittle et al ။ , 2011) ။ ဦးနှောက် function ကိုအဘို့, subACC နှင့် dACC (Masten et al ။ , 2009), VS (Guyer et al ။ , 2006a နှင့် Guyer et al ။ , 2006b; Guyer et al ။ , 2012a နှင့် Guyer et al ။ , 2012b; Guyer et al ။ , 2015; Telzer et al ။ , 2013a နှင့် Telzer et al ။ , 2013b; Telzer et al ။ , 2014b), TPJ (Falk et al ။ , 2014; Peak et al ။ , 2013), နှင့် vlPFC (Guyer et al ။ , 2015) စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန် sensitivity ကိုပြသခဲ့သည်သို့မဟုတ်မိဘအုပ်ထိန်းတွေကိုနှင့်အခင်းအကျင်းနှင့် / သို့မဟုတ် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့် bivalent ရလဒ်များနှင့်အတူ aligned အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အားနည်းချက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤအဒေသများအားလုံးသည်အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment ၏မော်ဒယ်များကွပ်ထားတယ်ဘေးဒဏ်သင့်-လူမှုရေးနှင့်သိမြင်မှု-စည်းမျဉ်းစနစ်များအောက်ရှိကျလိမ့်မည်။
ဤဒေသများအထီးကျန်မှုတွေအတွက်လည်ပတ်ကြဘူး, နှင့် functional နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုနှင့်ကွန်ယက်ပုံစံများ characterizing neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်နားလည်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီ characterizing များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့သောဥာဏ်နှင့်တကွအကျိုးစီးပွားတွေ့ရှိချက်များ၏အထက်ပါဒေသမြေဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ, neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များအားဖြင့်ခန့်မှန်း neurobiological လူမှုရေး sensitivity ကို၏အစွန်းရောက် bivalent ဆိုးကျိုးများအားလုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်မြင့်မားတဲ့လူမှုရေး sensitivity ကိုအားဖြင့်ဒါပေမယ့်လည်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး circuitry ထံမှပံ့ပိုးမှုများကိုအားဖြင့်သာအပ်နှင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာကအထိခိုက်မခံမြီးကောင်ပေါက်အားလုံးမြီးကောင်ပေါက်တို့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်များတွေ့ကြုံခံစားရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းခံရအံ့သောငှါအမြင့်ဆုံးလူမှုရေး sensitivity ကိုနှင့်အတူတွဲဖက်အတွက်သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အထက်ဖော်ပြထားတဲ့စာပေနှင့်အတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံပြီးအောက်ပါအပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့အနာဂတ်အလုပ်အတွက်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုထားမူဘောင်လျှောက်ထားမှုအတွက်ရှစ်အကြံပြုချက်များပါစေ။
5.1 ။ အနာဂတ်လမ်းညွန်
ပထမဦးစွာ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်မော်ဒယ်များမှတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများ၏အဓိကဗဟိုပေးထားကျနော်တို့အနာဂတ် neuroimaging အလုပ်ကဤခြားနားချက်ကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်မူတည်ပြီးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်, လူငယ်အချို့လူမှုရေးတွေကိုမှသို့မဟုတ်ကြွင်းသောအရာမှာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ဧရိယာ (ဆိုလိုသည်မှာခေါက်) သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ reactivity ကိုသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့သော parameters တွေကိုတလျှောက် quantified ဦးနှောက်ညွှန်းကိန်းအပေါ်မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်ဖြစ်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုငျသညျ။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤဖြစ်နိုင်သောအာရုံကြော phenotypes လူမှုရေးအခင်းအကျင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြားအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်ဦးနှောက်၏စိစစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဘို့စမ်းသပ်ဖို့ရလဒ်များ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်ကုသနိုင်ပါတယ် (သဖန်းသီး။ 2) ။ ထိုသို့သောအရေအတွက်စရိုက်လက္ခဏာတွေသှေးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်အတိတ်သုတေသနမှာပြပြီ။ ဥပမာ, Gee et al ။ (2014) ကလေးများ (အသက်အရွယ်မရွေး 4-10) နှင့်ရိုးရိုးတုံ့ပြန်မှုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာ amygdala-mPFC ဆက်သွယ်မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှအပြုသဘော၏စည်းကမ်းချက်များ၌မြီးကောင်ပေါက် (အသက်အရွယ်မရွေး 11-17) လူစိမ်းလှုံ့ဆော်မှု vs. maternal မှအုပ်စုဖွဲ့, ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်သူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရ η2 = .21 ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်စပျစ်သီးပြွတ်နည်းစနစ်များနှင့်အခြားလူကိုဗဟိုပြုသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ဆယ်ကျော်သက်များသည်၎င်းတို့၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ လူမှုရေးအခြေအနေနှင့်မသက်ဆိုင်သောအဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာအားဖြင့်၊ အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အတန်းများပြသထားသည့်ဆယ်ကျော်သက်များ) ကိုအုပ်စုဖွဲ့နိုင်သည်။ အသီးသီး) ထောက်ခံထောက်ခံ vs. ထောက်ခံမှုလူမှုရေးအခင်းအကျင်း။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်နှင့်ပိုမိုဆိုးရွားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်နှင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေသူများအားအမျိုးအစားတစ်ခုတွင်ထားနိုင်ပြီးဒုတိယတစ်ခုတွင်ထိခိုက်မှုနည်းပါးသောသူများနှင့်စက်နှစ်ခုစလုံးကိုခွဲခြားခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သော ဦး နှောက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ၊ Dosenbach et al ။ , 2010) ။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မူဘောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်ကြားဝင်၏စက်ချုပ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီခန့်မှန်းရန်၎င်း၏နောက်ဆုံး application ဖြစ်ပါတယ်။ univariate သရုပ်ခွဲနည်းစနစ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်ခွဲခြားကြောင်း circuitry မူမမှန်များ၏နားလည်မှုတိုးတက်စေရန်သုံးနိုငျနေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောစက်သင်ယူမှုအဖြစ် multivariate နည်းစနစ်တစ်ခု၏အခြေအနေတွင်မြီးကောင်ပေါက်နေရာရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီ-Level မှာ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေအဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ယခင်နမူနာကနေဆင်းသက်လာ algorithms, ဒါမှမဟုတ် Classified အပေါ်သူတို့ရဲ့မှီခိုပေးထား extant နမူနာ (ထိုချဉ်းကပ်အထက်တွင်ဖော်ပြထား) ။ ဤအမှုနည်းလမ်းများမဟုတ်ရင်အုပ်စုတစ်စု-Level ကွဲပြားခြားနားမှု (အာရုံစိုက်ကြောင်းစံ univariate နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. detect လုပ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဦးနှောက်ထဲမှာမသိမသာ, Spatial ဖြန့်ဝေသက်ရောက်မှုမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြအဖြစ်ထို့အပြင်စက်သင်ယူမှု, လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များပိုမိုတိကျတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကူညီနိုင်Orrù et al ။ , 2012).
ဒုတိယအချက်မှာဆယ်ကျော်သက်အာရုံကြောလွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းညွှန်းကိန်း related သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော genotype (ဥပမာအနိမ့်လှုပ်ရှားမှု MAOA genotype), ဇီဝကမ္မ reactivity ကို (ဥပမာအနိမ့်နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ), နှင့်စိတ်ထား (ဥပမာ, အမူအကျင့်တားစီး) အဖြစ်ထူထောင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည် Integrated ချဉ်းကပ်အာရုံကြောအစီအမံတစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကိုလက္ခဏာအဘယ်အရာကိုပိုပြီးတိကျစွာ elucidate နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏တစ်ဦးထက်ပိုစုစည်းနားလည်မှုပေးလိမ့်မည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ, အမူအကျင့်ဇီဝကမ္မနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များမှ sensitivity ကို၏မျိုးဗီဇအမှတ်အသားများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတူညီသောဖြစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသို့မဟုတ်အကွိမျမြားစှာသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါလွယ်ကူစွာထိခိုက်အမျိုးမျိုးသို့မဟုတ် profile များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည် (သဖန်းသီး။ 3) ။ ဥပမာအားဖြင့်, လူမှုရေးဖယ်ဖို့ dACC တုံ့ပြန်မှုမြင့်မားအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကိုလည်းလူမှုရေးအရစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများကိုအတွက်ဇီဝကမ္မ reactivity ကိုနှင့် neuroticism ၏မြင့်မားကိုပြသလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရနိုင်သနည်း Multi-level ကို, လူတစ်ဦးဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှု၏ဤအမျိုးအစားကျွန်တော်တို့ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဇီဝစနစ်များသည်အခြားအဆင့်ဆင့်မှာစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးညွှန်းကိန်းကနေဦးနှောက်-based sensitivity ကိုညွှန်းကိန်းခွဲခြားသောအရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပွငျကနောက်ဆုံးမှာစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးပေါင်းစည်းကြောင်း neurobiologically-oriented sensitivity ကို၏ profile များကိုဖန်တီးရန်အလားအလာပေးပါသည်။
ပြီးသား neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များအတိုင်းစာပေ၌တည်ခဲ့ကြကြောင်းဇီဝအချက်များနှင့်အတူဦးနှောက် Pictorial ကိုယ်စားပြုမှု။ ကျနော်တို့ကဤသည်အခြားအချက်များဆုံနှင့်အရာကနေသူတို့ရရှိထားတဲ့အပေါ်ဦးနှောက်, ဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အပါအဝင် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီး neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ၏အကဲဖြတ်မှုများပူးတွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားဖန်တီးခြင်းနှင့် honing မြီးကောင်ပေါက်ထွက်ပေါ်လာသောအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့များပါတယ်ရာနှငျ့ ပတျသကျ. ပြည့်စုံ, ဘက်စုံ profile များကို, ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှန်ကန်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမှာအားထုတ်မှုခိုင်ခံ့စေဘို့အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်နှင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။
တတိယအချက်ကဦးနှောက်၏အဆင့်မှာလွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များဖော်ထုတ်ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇအဖြစ် endophenotypic ချဉ်းကပ်မှု, ( အသုံးပြု. facilitated နိုင်ပါသည်Hyde et al ။ , 2011, Meyer-Lindenberg နှင့် Weinberger, 2006 နှင့် Scharinger et al ။ , 2010) နှင့်ပုံရိပ်ဗီဇက x ပတ်ဝန်းကျင်မူဘောင် (Bogdan et al ။ , 2013 နှင့် Hyde et al ။ , 2011) ထိုတိကျသောမျိုးရိုးဗီဇမျိုးကွဲနှင့်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းဖြစ်နိုင်သည် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အတူတသမတ်တည်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာစိတ်ခံစားမှုများနှင့်အမူအကျင့်ရလဒ်များပုံဖော်သောနောက်ခံ neurobiological ယန္တရားများစူးစမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများထူထောင်မျိုးရိုးဗီဇလွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အမှတ်အသားများ, function ကိုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုနှင့်အကြိုးသကျရောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (ဥပမာ, စိတ်ခံစားမှု reactivity ကို, ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်များ, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု), ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များမှသူတို့ကိုလင့်ထားသည် (ဥပမာ, neuroticism), နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ (ဥပမာ psychopathology, အရည်အသွေး) ။ အမှန်စင်စစ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်တဦးတည်း (ဥပမာရှိပါတယ်မည်မျှ plasticity alleles, အပေါ်အခြေခံပြီးဆင်းသက်လာခံရဖို့တတ်နိုင် plasticity ၏စုပေါင်းညွှန်းကိန်းနှင့်အတူတစ်ဦးစဉ်ဆက်ပေါ်အိပ်ရစေခြင်းငှါ Belsky နှင့် Beaver အဘိဓါန်, 2011) ။ တစ်ဦးချင်းစီ plasticity alleles သူတို့ရဲ့အရေအတွက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားဤ alleles ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောဒေသများ / ဆားကစ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေနှင့်အတူ, ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇနဲ့တူနည်းလမ်းများမြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးအခင်းအကျင်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သို့မဟုတ်မရှိမရှိမသာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်, သူမြား၏, ဟုတ်မဟုတ်နိုင် သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာအထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, (စိတ်ခံစားမှု sensitivity ကိုသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး vs. ဆုလာဘ် drive ကိုမှတဆင့်ဥပမာ) ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေပါ။
မှာပြထားတဲ့အတိုင်းစတုတ္ထ သဖန်းသီး။ 1 နှင့် သဖန်းသီး။ 2အနာဂတ်အလုပ်သည်သက်ဆိုင်သည့်လူမှုရေးအခြေအနေများကိုတိုင်းတာသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းပြင်ပရှိလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာ - မိခင်စောင့်ရှောက်မှု၊ မိသားစု ၀ င်ငွေ၊ အစောပိုင်းအခက်အခဲများ) ။ လက်ခံမှုနှင့်ငြင်းဆိုမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအများအပြား (ဥပမာ - မိသားစု၊ ရွယ်တူချင်း၊ ရင်ခုန်စရာ) တွင်ဖြစ်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဦး နှောက်သည်အဘယ်တုန့်ပြန်မှုအရှိဆုံးနှင့်မည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ဦး နှောက်သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့် ကျော်လွန်၍ ရလာဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလယ်အလတ်ဆုံးဖြစ်မည့်လူမှုရေးအခြေအနေ၏တိကျသောအတိုင်းအတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ လူမှုရေးအခြေအနေ၏အတိုင်းအတာတွင်အပြုသဘောဆောင်ခြင်း (သို့) အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောတန်ဖိုးရှိခြင်း၊ ထိုအခြေအနေတွင်ကိုယ်စားပြုသောလူမှုဆက်ဆံရေးအမျိုးအစားနှင့်ထိုအခြေအနေအတွင်းရှိဆယ်ကျော်သက်များ၏အတွေ့အကြုံပမာဏတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အမှန်မှာသက်တူရွယ်တူများ၏လွှမ်းမိုးမှုများသည်အမြဲတမ်းအပျက်သဘောမဟုတ်ပါ။ ထောက်ခံအားပေးမှုသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သောရွယ်တူချင်းများကသတ်မှတ်ထားသောလူမှုရေးအခြေအနေသည်လူထုစိတ်သို့မဟုတ် prosocial သူငယ်ချင်းများရှိခြင်းကဲ့သို့သောပညာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှု / အောင်မြင်မှုစသည့်ရလဒ်များကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီးမြင့်မားသော neurobiological sensitivity ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသူများအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျမှုအတွက်အန္တရာယ်လျော့ပါးစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လူမှုရေးအခြေအနေနှင့်ထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိ neurobiological ထိခိုက်လွယ်မှုကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်မိဘများနှင့်သူတို့၏ကလေးများအကြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများထက်လူမှုရေးအခြေအနေနှင့်မတူခြားနားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ပဉ္စမ, အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging အလုပ်အဘို့, သုတေသီများလူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှဦးနှောက်-based neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းများအတွက်ပါဝင်သည်ဖို့အကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်တွေကို delineate ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဆုချမှ hypersensitivity နေဖြင့်သတ်မှတ်ခံရနိုင်ပေမယ့်ဥပမာ, ဆုလာဘ်အမျိုးအစားသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းကိုနားလည်ဘို့အရေးပါပါတယ်။ ကွောငျးသတိရပါ Telzer et al ။ (2010) မိသားစုကိုအကုန်အကျများသောအလှူငွေများလှူဒါန်းခြင်း၏ prosocial လုပ်ရပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ် striatal တုံ့ပြန်မှုကနောက်ပိုင်းတွင်စွန့်စားရမှုလျော့နည်းမည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်းပြသခဲ့သည် ထို့အပြင်ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုပုံစံနှင့်ဘာသာရပ်အလိုက်ကွဲပြားသောပုံစံများကိုဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပုံစံများသည်ပျမ်းမျှနှင့်တူကြောင်းထုတ်ဖော်လိမ့်မည် ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများ၊ အခြားသူများအားအနှုတ်လက္ခဏာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အခြားသူများကဆန့်ကျင်ဘက်တုန့်ပြန်ခြင်းများထက်အပြုသဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တုန့်ပြန်ခြင်းများထက်အဆိုးမြင်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုတုန့်ပြန်ခြင်းပုံစံကိုပြသနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များသည်လူမှုရေးအခြေအနေအပေါ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုခွဲခြားရန်နှင့်ဤတုံ့ပြန်မှုမှရလဒ်များကိုမည်သို့လမ်းညွှန်သည်ကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဆဋ္ဌမ, ကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုနားလည်ရန်, ရလဒ်အချက်အလက်များ၏အနည်းဆုံးနှစ်ခုအချိန်မှတ်ရရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာကိုလွှမ်းမိုးမှု၏အချိန်ကိုက်ဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းတာ၏အချိန်ကိုက်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ယူဆချက်အောင်မသာအရေးပါပုံကိုအလေးပေးသည်။ ဒေတာများအတွင်းပေမယ့်စိတ်ဝင်စားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလထက် ကျော်လွန်. မသာကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်, လူမှုရေးဆက်စပ်ထိတွေ့မှုမှ differential အထိခိုက်မခံဖြစ်သူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ, သော neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပေးသနားတျောမူကွောငျးကိုအစောပိုင်းကလေးဘဝစဉ်အတွင်း genetically- နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-shaped ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်နိုင်သည်pause, 2013) ။ ယေဘုယျအားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချိန်ကိုက်နှင့်လိပ်စာအတွင်း-လူတစ်ဦးဖှံ့ဖွိုးတိုး၏မေးခွန်းကိုမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်း longitudinal neuroimaging လေ့လာမှုများများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိသေး၏။ ဒီအဆုံး, ဖွံ့ဖြိုးရေးအနှံ့ကိုပြောင်းလဲကြောင်းဦးနှောက်-အပြုအမူဆက်ဆံရေးကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့အားကောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်မှုဓာတ်ခွဲခန်း-based သို့မဟုတ်နေ့စဉ်အပြုအမူအတွက်ကြီးထွားကမကထပြုခဲ့ကွဲပြားမှုနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ functional ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှု-based အတိုင်းအတာထဲမှာဆိုင်းကိုခြေရာခံပုဂ္ဂိုလ်ဗဟိုပြုနည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့် (ထင်ရှားအဖြစ်အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ neuroimaging သုတေသနကနေတဆင့်ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောနားလည်မှုသုံးပြီး၏စိတ်ကူးနှင့်အတူ alignsBerkman နှင့် Falk, 2013) ။ ထိုမှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့အလယ်အလတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ကြောင်းဖြန်ဖြေ, သူတို့ရဲ့ sequence ကိုနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။
သတ္တမအနာဂတ်အလုပ်လူ့နမူနာအသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ (အာရုံစိုက်တဲ့သူသုတေသီများအကြားတိုးပွားလာ Cross-ဟောပြောပွဲကနေဖွယ်ရှိအကျိုးရှိမည်ဟုStevens နှင့် Vaccarino, 2015) ။ နားလညျ, လူ့-based သုတေသနအတွက်ကြောင့်အဆိုပြုထားမူဘောင် (ဆိုလိုသည်မှာအတွက်ဟောကိန်းထုတ်လွှမ်းမိုးမှုစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်အားလုံးရှုထောင့်ထည့်သွင်းရန်ခက်ခဲဖြစ်စေခြင်းငှါ, longitudinal ဒီဇိုင်းများလျှောက်ထား, လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရွေးချယ်ခြင်းတစ်ဦးအကြောင်းခံအချက်များ, valence ဖြတ်ပြီးလူမှုရေးအခင်းအကျင်း၏လွှမ်းခြုံသေချာနှင့်တုံ့ပြန်မှုစကားတွေ ) လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးရန်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတိုက်ရိုက် valenced လူမှုရေး-ဆက်စပ်ထိတွေ့မှု manipulate ဖို့အခွင့်အလမ်းများမှတဆင့်လူသားများတွင် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်ကြွယ်ဝစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မတူညီနှင့်မျိုးစုံကိုနှစ်ဦးစလုံးရမှတ်မှာတိုင်းတာ ယူ. , အလွန် mechanistic အဆင့်ဆင့်တိကျတဲ့ neurobiology လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အတော်ကြာမျဉ်းပြိုင် sensitivity ကိုများနှင့်စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေဆုချ, (ကဲ့သို့လူနဲ့ Non-လူ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားဥပမာရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူအတွက်တိုး, အကျိုးသက်ရောက်စေ reactivity ကို, လူမှုရေးကစားထူထောင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့၎င်း, Callaghan နှင့်စပါး, 2015, Doremus-Fitzwater et al ။ , 2009, Lee က et al ။ , 2015, Muñoz-Cuevas et al ။ , 2013, Schneider et al ။ , 2014, ရှိမုန်နှင့် Moghaddam, 2015, Siviy et al ။ , 2011, လှံ, 2011 နှင့် ယု et al ။ , 2014ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှပြောပြတယ်ကဲ့သို့), တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကာလလေ့လာနေ neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏စစ်ဆင်ရေးသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုငျသညျ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံများကိုဦးနှောက် circuitry ပေါ်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အခါဤအဆုံးတိုင်အောင်, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အလုပ် (နောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်တကွ, အထိခိုက်မခံကာလပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု charting များအတွက်အဖိုးတန်ခဲ့Hensch နှင့် Bilimoria, 2012).
ဒါကြောင့်ဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏မက်ထရစ်အဖြစ်သူတို့ကိုကုသမတိုင်မီဦးနှောက်ညွှန်းကိန်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရတည်ထောင်ရန်အရေးပါသောကွောငျ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ကယုံကြည်စိတ်ချရပိုမိုကောင်းမွန်စေဘယ်အရာကိုနားလည်ရန်, ရှိသမျှသုတေသန၌ရှိသကဲ့သို့, အရေးကြီးပါသည်ကြောင့်အယှက်ကြောင့်အမှား၏သတင်းရင်းမြစ် minimize လုပ်။ ဥပမာ, ဂျွန်စ et al ။ (2005) နှစ်လကျော်သုံးတိုင်းတာခြင်းအခါသမယဖြတ်ပြီး amygdala အဘို့အမြင့်မားသောစမ်းသပ်မှု-retest ယုံကြည်စိတ်ချရသေးသောယုံကြည်စိတ်ချရရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုပြောင်းလဲမှု vs. ၏အသုံးပြုမှုကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိအောင်မြင် z ရမှတ်များ, ROIs ဖွဲ့စည်းပုံ vs. မျက်မြင်လက်တွေ့သတ်မှတ်ကြသည်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီအသံကိုထူးခွားသညျ့ (ဥပမာ, ကြားနေမျက်နှာများ vs. ကြောက်မက်ဘွယ်သောကြည့်ရှု၏ထက်ပိုမိုမြင့်မား ICCs ထုတ်လုပ်တစ် fixation လက်ဝါးကပ်တိုင် vs. ကြောက်မျက်နှာများကြည့်ရှု၏ဆနျ့ကငျြဘ) ။ အမှန်စင်စစ်မြောက်မြားစွာခြေလှမ်းများထိုကဲ့သို့သော, ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ပြေး၏နံပါတ်တိုးပွားလာအပေါင်းတို့, သင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းတာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို အသုံးပြု. သကဲ့သို့, ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏လျက်, နောက်ဆုံးမှာ, ထိုရလဒ်များ၏, ထို signal ကို၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည် အဖြစ်အပျက်-related ဒီဇိုင်းများဆန့်ကျင်ခြင်း, ကြည့်ရှု (ထူးခွားသညျ့အသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောစိတ်တွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအဖြစ် Bennett ကနှင့် Miller က 2010,) အများအပြားအထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပြုချက်များသည်။ အဖြစ် Bennett ကနှင့် Miller က (2010) စောငျ့ရှောကျ, သူ့ဟာသူ neuroimaging "အသိပညာနှင့်နည်းလမ်းများကြီးမားတိုးတက်မှုကိုရာ၌ခန့်ထားပြီဘယ်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်အချက်, ရောက်ရှိခဲ့သည်ပေမယ့်အများကြီးဖှံ့ဖွိုးတိုးနေဆဲရှိသေး၏အမှုကိုပြုခံရဖို့ left" (စ။ 150) လျက်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ neuroimaging အစွမ်းထက်နည်းလမ်း, နှင့်၎င်း၏ application ကိုတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဦးတည်ချက်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်အရာကိုအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။
5.2 ။ နိဂုံး
ပေါင်းလဒ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုထားမူဘောင်အသစ်ကသီအိုရီနှင့် neurobiological လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ extant မော်ဒယ်များအပေါ်တည်ဆောက်ကြောင့်ပင်ကိုယ်မူလစမ်းသပ်မှုလောင်ကျွမ်းစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရှေ့ဆက်ဖို့အလုပ်ဒီလိုမျိုးအဘို့, သိမြင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအကြား interdisciplinary ပူးပေါင်းတိုးမြှင့်ရပေမည်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် '' extant အချက်အလက်စာရင်းများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များမှလက်လှမ်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်သော်လည်း longitudinal နမူနာတည်ဆဲကြသူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များ, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အဘို့စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီသုတေသနတစ်ဦးက distal နှင့်အသုံးချရည်မှန်းချက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး neurobiological မူဘောင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဒဏ်ခံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီခြွင်းချက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ပြုပြင်ကြားဝင်သို့အာရုံကြောထိခိုက်မခံတဲ့ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမျိုးစုံဇီဝဗေဒနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ကနေဖမျးအသိပညာအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းသီးခြားကြားဝင်ဒီဇိုင်းနိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ခံနိုင်ရည်ပေးရန်ဒီဇိုင်းကြားဝင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အကဲဖြတ်အတွက် neurobiological အကဲဖြတ်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်မျက်နှာစာကြားဝင်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောသီးခြားဦးနှောက်စနစ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်များအပေါ်တစ်ဦး differential ကိုသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုရှိမရှိရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သိပ္ပံပညာရှင်များနိုင်ပါတယ်။ အများစုကယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီချဉ်းကပ်နည်းပတ်ဝန်းကျင်၏တိကျသောရှုထောင့်နှင့်အတူကွားအဘို့နှင့်အရှိဆုံးသို့မဟုတ်သူကား, သပ္ပါယ်မြှင့်တင်ရန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလည်ပတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ၏အာရုံကြောမော်ဒအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု quantifying အားဖြင့်အကြီးမြတ်ဆုံးစွန့်စားမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရပေမည်အတှကျအကြိုးခွေငျးငှါအဘယ်သူသည်အလံတင်သည့်အဘို့ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်ဦးက William T. Grant ကဖောင်ဒေးရှင်းမှဆရာ Award ဆုကို (AEG; RAS) ကထောက်ခံခဲ့သည်, တစ်ဦးက William T. Grant ကဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာရှင်များ Award ဆုကို (AEG), နှင့် NIH R01MH098370 (AEG) ပေးသနားတော်မူ။
Amodio နှင့် Frith, 2006
DM Amodio, CD ကို Frith
စိတ်ထဲတွင်၏အစည်းအဝေး: အဆိုပါ medial တိုကျရိုကျ cortex နှင့်လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ ,7(2006), စစ။ 268-277
Andersen က, 2003
SL Andersen က
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လမ်းကြောင်း: အခွင့်အလမ်းအားနည်းချက်သို့မဟုတ် window ၏အချက်?
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 27 (1) (2003), စစ။ 3-18
Aron et al ။ , 2004
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ , 8 (2004), စစ။ 170-177
Aron နှင့် Aron, 1997
မာခ် Aron, အေ Aron
အာရုံခံ-အပြောင်းအလဲနဲ့ sensitivity ကိုနှင့် introversion နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှ၎င်း၏စပ်လျဉ်း
ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ , 73 (2) (1997), စစ။ 345-368
Aron et al ။ , 2012
မာခ် Aron, အေ Aron, ဂျေ Jagiellowicz
အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့ sensitivity ကို: ဇီဝတုန့်ပြန်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အလငျး၌ပြန်လည်သုံးသပ်
Pers ။ Soc ။ Psychol ။ ဗျာ, 16 (3) (2012), စစ။ 262-282 http://dx.doi.org/10.1177/1088868311434213
Bakermans-Kranenburg နှင့်ဗန် Ijzendoorn, 2011
MJ Bakermans-Kranenburg, MH ဗန် Ijzendoorn
dopamine-related မျိုးဗီဇအပေါ်မူတည်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ပွုစုပြိုးထောမှ differential လွယ်ကူစွာထိခိုက်: အသစ်ကသက်သေအထောက်အထားများနှင့်တစ်ဦး Meta-analysis သည်
dev ။ Psychopathol ။ , 23 (1) (2011), စစ။ 39-52 http://dx.doi.org/10.1017/S0954579410000635
Baxter နှင့် Murray, 2002
MG Baxter, EA ၏ Murray
အဆိုပါ amygdala နှင့်ဆုလာဘ်
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ ,3(2002), စစ။ 563-573
Beauchaine et al ။ , 2008
TP Beauchaine, အီး Neuhaus, SL Brenner, အယ်လ် Gatzke-Kopp
dev ။ Psychopathol ။ , 20 (3) (2008), စစ။ 745-774 http://dx.doi.org/10.1017/S0954579408000369
Bechara et al ။ , 1999
A. အ Bechara, အိပ်ချ် Damasio, AR Damasio, မိသားစုဆရာဝန် Lee က
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူ့ amygdala နှင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးမှုများကို
ဂျေ neuroscience ။ , 19 (13) (1999), စစ။ 5473-5481
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပွုစုပြိုးထောမှ differential လွယ်ကူစွာထိခိုက်: တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အယူအဆနှင့်အချို့သောသက်သေအထောက်အထား
ခအဲလစ်, ဃ Bjorklund (Eds ။ ), အလူမှုစိတျ Origins: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာနှင့်ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေး, Guilford, နယူးယောက် (2005), စစ 139-163 ။
Belsky et al ။ , 2007
ဂျေ Belsky, MJ Bakermans-Kranenburg, MH ဗန် IJzendoorn
ပိုကောင်းတဲ့အဘို့နှင့်ပိုဆိုးဘို့: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှလွယ်ကူစွာထိခိုက် Differential
Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 16 (6) (2007), စစ။ 300-304 http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00525.x
Belsky နှင့် Beaver အဘိဓါန်, 2011
ဂျေ Belsky, KM Beaver အဘိဓါန်
တိုးပွားလာသော-မျိုးရိုးဗီဇ plasticity, မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက် Self-စည်းမျဉ်း
ဂျေကလေး Psychol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 52 (5) (2011), စစ။ 619-626
Belsky နှင့် Pluess, 2009
ဂျေ Belsky, အမ် Pluess
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်: diathesis စိတ်ဖိစီးမှုကျော်လွန်
Psychol ။ နွားလား။ , 135 (6) (2009), စစ။ 885-908 http://dx.doi.org/10.1037/a0017376
Bennett ကနှင့် Miller က 2010
CM Bennett က, ကို MB Miller က
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1191 (1) (2010), စစ။ 133-155
Berkman နှင့် Falk, 2013
Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 22 (1) (2013), စစ။ 45-50
Bernier et al ။ , 2012
A. အ Bernier, SM Carlson, အမ်Deschênes, C. Matte-Gagné
dev ။ သိပ္ပံ။ , 15 (1) (2012), စစ။ 12-24
Bickart et al ။ , 2014
KC Bickart, ဘီစီ Dickerson, LF Barrett
Neuropsychologia, 63 (2014), စစ။ 235-248
Bickart et al ။ , 2011
KC Bickart, CI Wright, RJ Dautoff, ဘီစီ Dickerson, LF Barrett
လူသားတွေအတွက် Amygdala အသံအတိုးအကျယ်နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်ကိုအရွယ်အစား
နတ်။ neuroscience ။ , 14 (2) (2011), စစ။ 163-164
Blakemore နှင့် Mills က, 2014
SJ Blakemore, KL Mills က
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် sociocultural အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အထိခိုက်မခံကာလဖြစ်သနည်း
Annu ။ ဗျာ Psychol ။ , 65 (2014), စစ။ 187-207 http://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115202
Bogdan et al ။ , 2013
တစ်ဦးက neurogenetics ဦးနှောက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကိုနားလည်ရန်ချဉ်းကပ်မှု, အပြုအမူများနှင့် psychopathology များအတွက်အန္တရာယ်
Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 18 (3) (2013), စစ။ 288-299
Boyce နှင့်အဲလစ်, 2005
WT Boyce, BJ အဲလစ်
စကားစပ်မှဇီဝဗေဒ sensitivity ကို: ငါစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို၏ဇစ်မြစ်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်-ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသီအိုရီ
dev ။ Psychopathol ။ , 17 (2) (2005), စစ။ 271-301
Bredy et al ။ , 2004
TW Bredy, ty Zhang က RJ Grant က, ဂျေ Diorio, MJ Meaney
Peripubertal သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင် hippocampal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အချိုမှု receptor subunit စကားရပ်အပေါ်မိခင်စောင့်ရှောက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနောက်ကြောင်းပြန်
အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ , 20 (2004), စစ။ 1355-1362
Brett et al ။ , 2014
ZH Brett, အမ် Sheridan, K. Humphrey, အေ Smyke, MM Gleason, N. Fox က, အက်စ် Drury
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက် defining မှတစ်ဦးက neurogenetics ချဉ်းကပ်
int ။ ဂျေပြုမူနေ။ dev ။ , 31 (2014), စစ။ 2150-2160
အက်စ်အက်စ် Feldman, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း Elliot (Eds ။ ), ခုံ၌ဦး: အဆိုပါ Developing ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း, MA ကင်းဘရစ် (1990), စစ 171-196 ။
ဘရောင်းနှင့် Bakken, 2011
BB ဘရောင်း, JP Bakken
မိဘအုပ်ထိန်းမှုနှင့်သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေး: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မိသားစု-peer ချိတ်ဆက်မှုအပေါ်သုတေသနအတွက်အင်အားသစ်များပေးရန်
ဂျေ Res ။ မြီးကောင်ပေါက်။ , 21 (1) (2011), စစ။ 153-165 http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00720.x
ဘရောင်းနှင့် Larson, 2009
BB ဘရောင်း, ဂျေ Larson
RML Steinberg (Ed ။ ), မြီးကောင်ပေါက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်: ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်နောက်ခံသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (3rd ed ။ ), Vol ။ 2, ယောဟန် Wiley & ၏သား, Hoboken, NJ (2009), စစ။ 74-103
ဘားနက် et al ။ , 2011
အက်စ်ဘားနက်, C. Sebastian, K. Cohen ကို Kadosh, SJ Blakemore
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 35 (8) (2011), စစ။ 1654-1664 http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.10.011
JM Bjork, G. အချန်, AR Smith က DW Hommer
မက်လုံးပေး-ရူးနှမ်း mesolimbic activation နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် externalizing symptomatology
ဂျေကလေး Psychol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 51 (2010), စစ။ 827-837
Bjork နှင့် Pardini, 2015
သူတို့ "အန္တရာယ်-ယူပြီးမြီးကောင်ပေါက်" အဘယ်သူနည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neuroimaging သုတေသနအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 11 (2015), စစ။ 56-64
Caceres et al ။ , 2009
A. အ Caceres, DL ခန်းမ, fo Zelaya, SC Williams က, MA ထာ
အဆိုပါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လူတန်းစားဆက်စပ်ကိန်းနှင့်အတူ fMRI ယုံကြည်စိတ်ချရတိုင်း
Neuroimage, 45 (2009), စစ။ 758-768
Calder et al ။ , 2001
AJ Calder, အေဒီလောရင့်, AW Young က
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ ,2(5) (2001), စစ။ 352-363
Callaghan နှင့်စပါး, 2015
BL Callaghan, N. စပါး
plasticity ၏ neuro-သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကွင်းဆက်: ပုံမှန်နှင့်ဆိုးရွားသောစောင့်ရှောက်သူများကအောက်ပါစိတ်လှုပ်ရှားမှု circuitry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မိဘ၏သက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးက Cross-မျိုးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
extraversion နှင့် neuroticism ၏ functional ဦးနှောက်မြေပုံ: စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကနေသင်ယူခြင်း
ဂျေ Pers ။ , 72 (2004), စစ။ 1105-1132
Canli et al ။ , 2002
T. Canli, အိပ်ချ် Sivers, SL Whitfield, ih Gotlib, JD Gabrieli
extraversion တစ် function ကိုအဖြစ်ပျော်ရွှင်မျက်နှာများမှ Amygdala တုံ့ပြန်မှု
သိပ္ပံ, 296 (5576) (2002), p ။ 2191
Caouette နှင့် Guyer, 2014
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုမှ neuroscience ကနေလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အားနည်းချက်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်ရရှိမှု
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 8 (2014), စစ။ 65-76 http://dx.doi.org/10.1016/j.dcn.2013.10.003
Carter ကများနှင့်ဗန် Veen, 2007
CS Carter က, V. ဗန် Veen
anterior cingulate cortex နှင့်ပဋိပက္ခထောက်လှမ်း: သီအိုရီများနှင့်အချက်အလက်တစ်ခု update ကို
Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ ,7(4) (2007), စစ။ 367-379
Casement et al ။ , 2014
MD Casement, AE Guyer, AE Hipwell, RL McAloon, Am Hoffman ဟာ, Ke Keenan, EE Forbes မဂ္ဂဇင်း
အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Girls 'စိန်ခေါ်မှုလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 8 (2014), စစ။ 18-27 http://dx.doi.org/10.1016/j.dcn.2013.12.003
ကာဇီ et al ။ , 2000
BJ Casey, ဖြစ်မှု Geidd, KM သောမတ်စ်
Biol ။ Psychol ။ , 54 (2000), စစ။ 241-247
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1124 (2008), စစ။ 111-126 http://dx.doi.org/10.1196/annals.1440.010
Caspi et al ။ , 2002
A. အ Caspi, ဂျေ McClay, TE Moffitt, ဂျေစက်, ဂျေမာတင်, iw Craig, R. Poulton
မတရားသဖွငျ့ကလေးတွေအတွက်အကြမ်းဖက်မှုသံသရာအတွက် genotype ၏အခန်းက္ပ
သိပ္ပံ, 297 (5582) (2002), စစ။ 851-854 http://dx.doi.org/10.1126/science.1072290
dev ။ သိပ္ပံ။ , 14 (2) (2011), စစ။ F1-F10
Cicchetti နှင့် Rogosch, 2002
ဃ Cicchetti, အက်ဖ်အေ Rogosch
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အပေါ်တစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ psychopathology ရှုထောင့်
ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol ။ , 70 (1) (2002), စစ။ 6-20
Cohen ကို et al ။ , 2012
JR Cohen ကို, ET Berkman, MD Lieberman
တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး Functions များ၏ ventrolateral PFC အခြေခံမူများတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ဖွစျပှား Self-ထိန်းချုပ်မှု
(2nd ed ။ ) အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, အမေရိကန်နိုင်ငံ (2012)
Cohen ကိုနှင့် Hamrick, 2003
အက်စ် Cohen ကို, N. Hamrick
ဦးနှောက်ပြုမူနေ။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား။ , 17 (6) (2003), စစ။ 407-414
Cohen ကို et al ။ , 2000
အက်စ် Cohen ကို, မိုင် Hamrick, က MS Rodriguez, PJ Feldman, BS Rabin, SB Manuck
နှလုံးသွေးကြော, ကိုယ်ခံစွမ်းအား, endocrine နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ reactivity ကိုအကြားနဲ့ intercorrelations ၏တည်ငြိမ်မှုကို
အမ်း။ ပြုမူနေ။ Med ။ , 22 (3) (2000), စစ။ 171-179
Coie et al ။ , 1990
JD Coie, ka Dodge, JB- Kupersmidt
SR အာရှာခရိုင်, JD Coie (Eds ။ ), ရွယ်တူချင်းလူမှုအတွက်ကလေးဘဝကင်းဘရစ်လေ့လာရေးအတွက်ပယ်ချခြင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေး, ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, NY (1990), စစ။ 17-59
Collins et al ။ , 2000
WA Collins, EE Maccoby, အယ်လ် Steinberg, EM Hetherington, MH Bornstein
နံနက်။ Psychol ။ , 55 (2000), စစ။ 218-232
Coplan et al ။ , 1994
RJ Coplan, KH Rubin က, NA Fox က, SD က Calkins, SL Stewart က
တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းတစ်ဦးတည်းကစားများနှင့်တစ်ဦးတည်းသရုပ်ဆောင်: ကလေးငယ်များအတွက်နှုတ်ဆိတ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှင့် passive နှင့်တက်ကြွသောအထီးထီးနေခြင်းအကြားကွဲပြားခြားနားသွား
ကလေးသူငယ် Dev မှ။ , 65 (1) (1994), စစ။ 129-137
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ , 13 (9) (2012), စစ။ 636-650 http://dx.doi.org/10.1038/nrn3313
Csikszentmihalyi နှင့် Larson, 1984
အမ် Csikszentmihalyi, R. Larson
အခြေခံပညာစာအုပ်များ, နယူးယောက်, NY (1984)
စရိုက်များ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, တန်ဖိုးများနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကနေ tuning amygdala စိတ်ခွန်အားနိုး salience
Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 21 (1) (2012), စစ။ 54-59
Darling နှင့် Steinberg, 1993
N. Darling, အယ်လ် Steinberg
Psychol ။ နွားလား။ , 113 (3) (1993), စစ။ 487-496
Davey et al ။ , 2008
CG Davey, အမ် Yucel, NB Allen က
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စိတ်ကျရောဂါပေါ်ပေါက်ရေး: အ prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆုလာဘ်တွေရဲ့ကိုယ်စားပြုမှု
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 32 (1) (2008), စစ။ 1-19 http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2007.04.016
Davidson နှင့် Fox, 1989
RJ Davidson, NA Fox က
တိုကျရိုကျဦးနှောက် asymmetry မိခင်ခွဲခြာမှမွေးကင်းစ '' တုန့်ပြန်ခန့်မှန်း
ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ , 98 (2) (1989), စစ။ 127-131
မိသားစုအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်စေ့စေ့နားထောင်အပြုအမူ၏မျိုးဆက်နှင့်လူ့ဖြစ်စဉ်များအရေးပါ
Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 23 (3) (2014), စစ။ 230-236
Deater-Deckard နှင့်ဝမ်, 2012
K. Deater-Deckard, Z. ဝမ်
MI Posner (Ed က။ ), အာရုံစူးစိုက်မှု၏သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ (2nd Ed က။ ), Guilford, နယူးယောက် (2012), စစ။ 331-344
Delville et al ။ , 1998
Y. Delville, RH အ Melloni, CF ကူးတို့
ရွှေဟမ်းစတားအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းလူမှုရေးလက်အောက်ခံ၏အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological အကျိုးဆက်များ
ဂျေ neuroscience ။ , 18 (7) (1998), စစ။ 2667-2672
Doremus-Fitzwater et al ။ , 2009
Physiol ။ ပြုမူနေ။ , 97 (3) (2009), စစ။ 484-494
Dosenbach et al ။ , 2010
NU Dosenbach, ခ Nardos, AL Cohen ကို, DA တရားမျှတသော, JD Power ကဂျေအေဘုရားကျောင်း, BL Schlaggar
သိပ္ပံ, 329 (5997) (2010), စစ။ 1358-1361
Dunbar မှာ 2009
RI က Dunbar မှာ
အမ်း။ လူ့ Biol ။ , 36 (5) (2009), စစ။ 562-572
အဲလစ် et al ။ , 2011
BJ အဲလစ်, WT Boyce, ဂျေ Belsky, MJ Bakermans-Kranenburg, MH ဗန် Ijzendoorn
ပတ်ဝန်းကျင်မှ Differential လွယ်ကူစွာထိခိုက်: တစ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် - neurodevelopmental သီအိုရီ
dev ။ Psychopathol ။ , 23 (1) (2011), စစ။ 7-28 http://dx.doi.org/10.1017/S0954579410000611
Eisenberger နှင့် Lieberman, 2004
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ , 8 (7) (2004), စစ။ 294-300
Eisenberger et al ။ , 2007
Ni Eisenberger, BM Way ကို, အရှေ့တောင်တေလာ, WT Welch, MD Lieberman
ကျူးကျော်မှုအတွက်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း - လူမှုရေးဆိုင်ရာဖယ်ကျဉ်ခြင်းများကို ဦး နှောက်၏တုံ့ပြန်မှုမှအချက်အလက်များ
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 61 (9) (2007), စစ။ 1100-1108
Eisenberger et al ။ , 2003
Ni Eisenberger, MD Lieberman, KD Williams က
ငြင်းပယ်ခံရကိုထိခိုက်စေသလား လူမှုရေးဖယ်ထားတဲ့ fMRI လေ့လာမှု
သိပ္ပံ, 302 (5643) (2003), စစ။ 290-292
Ernst နှင့် Fudge, 2009
အမ် Ernst, JL Fudge
လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiological မော်ဒယ်: အ triadic node များ၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ontogeny
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 33 (3) (2009), စစ။ 367-382 http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.10.009
Psychol ။ Med ။ , 36 (3) (2006), စစ။ 299-312 http://dx.doi.org/10.1017/S0033291705005891
Falk et al ။ , 2014
EB Falk, CN Cascio, MB O'Donnell, ဂျေ။ ကာ၊ FJ Tinney, CR Bingham, et al ။
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 54 (5) (2014), စစ။ S22-S31
က MS Fanselow
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ , 14 (1) (2010), စစ။ 7-15
ဂျေ Pers ။ လူမှု Psychol ။ , 80 (6) (2001), စစ။ 1011-1027
Foley et al ။ , 2004
DL Foley, LJ Eaves, ခ Wormley, JL Silberg, နာရီ Maes, ဂျေ Kuhn, ခ Riley
ကလေးဘဝဒုက္ခတစ်ဦး genotype oxidase monoamine နှင့်အမူအကျင့်ရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 61 (7) (2004), စစ။ 738-744 http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.61.7.738
Forbes မဂ္ဂဇင်း et al ။ , 2009
EE Forbes မဂ္ဂဇင်း, AR Hariri, SL မာတင်, JS ပိုး, DL Moyles, ညနေ Fisher သည် SM ဘရောင်း, ND ရိုင်ယန်, ခ Birmaher, DA Axelson, RE Dahl
အမှန်တကယ်ကမ္ဘာအပြုသဘောခန့်မှန်းပြောင်းလဲ striatal activation ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 166 (2009), စစ။ 64-73
Fox က et al ။ , 2001
NA Fox က, HA Henderson, KH Rubin က, SD က Calkins, LA က Schmidt က
အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးလေးနှစ်ဖြတ်ပြီး psychophysiological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှု: အပြုအမူတားစီးနှင့် exuberant ၏ဆက်လက်ရပ်စဲ
ကလေးသူငယ် Dev မှ။ , 72 (2001), စစ။ 1-21
Gallagher နှင့် Frith, 2003
'' စိတ်သီအိုရီ '' ၏ functional ပုံရိပ်
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ ,7(2003), စစ။ 77-83
dev ။ သိပ္ပံ။ , 10 (2007), စစ။ F8-F14
Gatzke-Kopp et al ။ , 2009
LM Gatzke-Kopp, TP Beauchaine, Ke Shannon, ဂျေ Chipman, AP Fleming က, အရှေ့တောင် Crowell, O. Liang, LC ဂျွန်ဆင်, အီး Aylward
နှင့်အပြုအမူမမှန် externalizing မပါဘဲမြီးကောင်ပေါက်အတွက်တုံ့ပြန်ဆုလာဘ်၏အာရုံကြောဆက်စပ်
ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ , 118 (2009), စစ။ 203-213
Gee et al ။ , 2013a
DG Gee, LJ Gabard-Durnam, ဂျေ Flannery, ခ Goff, KL Humphrey, Eh Telzer, N. စပါး
မိခင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီးနောက်လူ့ amygdala-prefrontal ဆက်သွယ်မှု၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပေါ်ပေါက်ရေး
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 110 (39) (2013), စစ။ 15638-15643
Gee et al ။ , 2013b
DG Gee, KL Humphrey, ဂျေ Flannery, ခ Goff, Eh Telzer, အမ် Shapiro, N. စပါး
လူ့ amygdala-prefrontal circuitry အတွက်အနုတ်လက္ခဏာဆက်သွယ်မှုမှအပြုသဘောကနေတစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းကုန်ပြီ
ဂျေ neuroscience ။ , 33 (10) (2013), စစ။ 4584-4593
Gee et al ။ , 2014
DG Gee, အယ်လ် Gabard-Durnam, Eh Telzer, KL Humphrey, ခ Goff, အမ် Shapiro, et al ။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းသော်လည်းမမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူ့ amygdala-prefrontal circuitry ၏မိခင်ကြားခံ
Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 25 (2014), စစ။ 2067-2078
Gee et al ။ , 2015
DG Gee, SC McEwen, JK Forsyth, KM Haut, အီး Bearden, ဂျေ Addington, TD Cannon
တစ်ဦး multisite longitudinal လေ့လာမှုမှာစိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် fMRI ပါရာဒိုင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရ
လူ့ဦးနှောက် Mapp ။ (2015)
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: neuroimaging ကနေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 42 (4) (2008), စစ။ 335-343 http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.01.007
ဖြစ်မှု Giedd, LS Clasen, R. Lenroot, ဃ Greenstein, GL Wallace, အက်စ် Ordaz, မိသားစုဆရာဝန် Chrousos
Mol ။ cell ။ Endocrinol ။ , 254 (2006), စစ။ 154-162
Gogtay နှင့် Thompson က, 2010
N. Gogtay, ညနေ Thompson က
မီးခိုးရောင်ကိစ္စဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုံဖော်: psychopathology မှပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အားနည်းချက်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု
ဦးနှောက် Cogn ။ , 72 (1) (2010), စစ။ 6-15 http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2009.08.009
Gunther Moore et al ။ , 2010
ခ Gunther Moore, အယ်လ်ဗင် Leijenhorst, SA Rombouts, EA ၏ Crone, မီဂါဝပ်ဗန် der Molen
လူမှု neuroscience ။ ,5(5-6) (2010), စစ။ 461-482 http://dx.doi.org/10.1080/17470910903526155
Guyer et al ။ , 2014
AE Guyer, ခ Benson, VR Choate, Y. ဘား-Haim, K. ဖာရ-Edgar, JM Jarcho, EE နယ်လ်ဆင်
dev ။ Psychopathol ။ , 26 (1) (2014), စစ။ 229-243 http://dx.doi.org/10.1017/S0954579413000941
Guyer et al ။ , 2012a
AE Guyer, VR Choate, အေ Detloff, ခ Benson, EE နယ်လ်ဆင်, K. ဖာရ-Edgar, အမ် Ernst
ကလေးအထူးကုစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်အတွက်မက်လုံးပေးမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း Striatal အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတချို့
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 169 (2) (2012), စစ။ 205-212
Guyer et al ။ , 2012b
AE Guyer, VR Choate, DS ထင်းရူး, EE နယ်လ်ဆင်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တုံ့ပြန်ချက်စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်အာရုံကြော circuitry နောက်ခံကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ ,7(1) (2012), စစ။ 81-92 http://dx.doi.org/10.1093/scan/nsr043
Guyer et al ။ , 2015
AE Guyer, JM Jarcho, KP ဖာရ-Edgar, ka Degnan, DS ထင်းရူး, NA Fox က, et al ။
အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်စိတ်ထားနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်များ differential မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကဲဖြတ်စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး
ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ ကလေးသူငယ် psyche ။ , 43 (2015), စစ။ 863-874 http://dx.doi.org/10.1007/s10802-015-9973-2
Guyer et al ။ , 2006a
AE Guyer, ဂျေ Kaufman, HB Hodgdon, CL Masten, အက်စ် Jazbec, DS ထင်းရူး, အမ် Ernst
ဆုလာဘ်စနစ်က function ကိုအတွက်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲ: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့် psychopathology ၏အခန်းကဏ္ဍကို
ဂျေ Am ။ Acad ။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 45 (9) (2006), စစ။ 1059-1067 http://dx.doi.org/10.1097/01.chi.0000227882.50404.11
Guyer et al ။ , 2008
AE Guyer, JY Lau, eb လူယာ-Tone, ဂျေ Parrish, ND Shiffrin, RC Reynolds က, EE နယ်လ်ဆင်
ကလေးအထူးကုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်မျှော်လင့်ရွယ်တူအကဲဖြတ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex function ကို Amygdala နှင့် ventrolateral
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 65 (11) (2008), စစ။ 1303-1312 http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.65.11.1303
AE Guyer, eb လူယာ-Tone, ND Shiffrin, DS ထင်းရူး, EE နယ်လ်ဆင်
Guyer et al ။ , 2006b
AE Guyer, EE နယ်လ်ဆင်, K. ဖာရ-Edgar, MG Hardin, R. Roberson-နေအောင်, CS ရဟန်းတော်, အမ် Ernst
ဂျေ neuroscience ။ , 26 (24) (2006), စစ။ 6399-6405 http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0666-06.2006
Gweon et al ။ , 2012
အိပ်ချ် Gweon, ဃ Dodell-Federation, အမ် Bedny, R. Saxe
ကလေးသူငယ် Dev မှ။ , 83 (2012), စစ။ 1853-1868
Haas et al ။ , 2007
BW Haas, K. Omura, RT ကို Constable, T. Canli
စိတ်ခံစားမှုပဋိပက္ခနှင့် neuroticism: အ amygdala နှင့် subgenual anterior cingulate အတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး-မှီခို activation
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 121 (2) (2007), စစ။ 249-256
မှန် CT Halpern, JR Udry, C. Suchindran
testosterone ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးအတွက် coitus ၏စတင်ဟောကိန်းထုတ်
Psychosom ။ Med ။ , 59 (1997), စစ။ 161-171
တံထွေး testosterone ဟော်မုန်း၏လစဉ်အစီအမံ ado- lescent ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကြိုတင်ခန့်မှန်း
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 27 (1998), စစ။ 445-465
Hamann et al ။ , 2002
SB Hamann, TD Ely, JM ဟော့ဖ်မန်း, CD ကို Kilts
Ecstasy နှင့်ဝဒေနာ: အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုအတွက်လူ့ amygdala ၏ Activation
Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 13 (2) (2002), စစ။ 135-141
Hammond ဟာ et al ။ , 2012
SI Hammond ဟာ, U. Muller, ဂျေ Carpendale, ကို MB Bibok, DP Liebermann-Finestone
မူကြိုကျောင်းသားများ '' အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအပေါ်မိဘ၏ငြမ်း၏ဆိုးကျိုးများ
dev ။ Psychol ။ , 48 (2012), စစ။ 271-281
Hankin နှင့် Abela, 2005
BL Hankin, JRZ Abela (Eds ။ ), Psychopathology ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: တစ်ဦးကအားနည်း-စိတ်ဖိစီးမှုအမြင်, Sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, တစ်ထောင်သပိတ်, CA (2005), စစ 245-288 ။
Hao က et al ။ , 2013
X တို့မှာ Hao က, ဃ Xu, R. Bansal, Z. ဒေါင်, ဂျေလျူ, Z. ဝမ်, BS Peterson
multimode သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: ကဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုနားလည်ရန်မျိုးစုံ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှသိကောင်းစရာများစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ညှိနှိုင်းအသုံးပြုခြင်းကို
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ , 34 (2) (2013), စစ။ 253-271
အမ်း။ ဗျာ neuroscience ။ , 32 (2009), စစ။ 225-247
အလျင်အမြန် et al ။ , 2014
PD အလျင်အမြန်, ခ Klimes-Dougan, အေအမှတ်တံဆိပ်, KT Kendziora, C. Zahn-Waxler
မိခင်များ '' စိတ်လှုပ်ရှားမှုလူမှုရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' parasympathetic စည်းမျဉ်း internalizing အခက်အခဲများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: အပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းကနေဝမ်းနည်းမှုကြောက်ထိန်းညှိ
dev ။ Psychopathol ။ , 26 (2014), စစ။ 1369-1384
Hensch နှင့် Bilimoria, 2012
TK Hensch, ညနေ Bilimoria
Cerebrum ခုနှစ်တွင်: ဦးနှောက်သိပ္ပံဒါနဖောင်ဒေးရှင်း (2012 ဇူလိုင်လ) ပေါ်တွင်ဒါနဖိုရမ်
ပျားရည် et al ။ , 2010
CJ ပျားရည်, JP Thivierge, O. Sporns
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ function ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတညျဆောကျပုံနိုင်သလား?
NeuroImage, 52 (3) (2010), စစ။ 766-776
မှတ်ဉာဏ်ထံမှ hippocampus နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ဆက်စပ်ပြန်လည်ရယူခြင်း: တစ်ဦးကသီအိုရီ
ပြုမူနေ။ Biol ။ , 12 (4) (1974), စစ။ 421-444
Hughes က 2011
အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့သုတေသန 20 နှစ်များတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
မွေးကင်းစကလေး Dev မှ။ , 20 (2011), စစ။ 251-271
Hyde et al ။ , 2011
ပုံရိပ်ဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင် interaction ကမှတဆင့် psychopathology များအတွက်အန္တရာယ်နားလည်ခြင်း
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ , 15 (9) (2011), စစ။ 417-427
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ , 2003
DC က Jackson က, CJ Muller, ဗြဲ Dolski, KM Dalton, JB- Nitschke, HL Urry, et al ။
ယခုတွင်သင်သည်ယခုသင်မပြုလုပ်ခံစားရ: တိုကျရိုကျဦးနှောက်လျှပ်စစ် asymmetry နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 14 (2003), စစ။ 612-617
Jansen et al ။ , 2015
AG က Jansen, အရှေ့တောင် mouse, တီဖြူ, ဃ Posthuma, တီဂျေ Polderman
အမွှာအဘယ်အရာကိုလေ့လာမှုများဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏ heritability နှင့် function ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Neuropsychol ။ ဗျာ, 25 (1) (2015), စစ။ 27-46
ဂျွန်စ et al ။ , 2005
T. ဂျွန်စ LH Somerville, AL အလက်ဇန်းဒါး, TR Oakes, RJ Davidson, နယူးဟမ်းရှား Kalin, PJ Whalen
မျိုးစုံစကင်အစည်းအဝေးများကျော်၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာများမှ amygdala BOLD တုံ့ပြန်မှုတည်ငြိမ်ရေး
Neuroimage, 25 (4) (2005), စစ။ 1112-1123
Kanai et al ။ , 2012
R. Kanai, ခ Bahrami, R. Roylance, G. အ Rees
proc ။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ , 279, 1732 (2012), စစ။ 1327-1334
Knafo et al ။ , 2011
A. အ Knafo, အက်စ်အိုဣသရေလအမျိုး, RP Ebstein
dopamine receptor D4 ဗီဇပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကလေးများ၏ prosocial အပြုအမူနှင့်မိဘများ၏ကွဲပြားခြားနားလွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်မှုတို့ကိုအမွေခံနိုင်ခြင်း
dev ။ Psychopathol ။ , 23 (1) (2011), စစ။ 53-67 http://dx.doi.org/10.1017/S0954579410000647
Koolschijn et al ။ , 2011
PCM Koolschijn, MA Schel, အမ်က de Rooij, SA Rombouts, EA ၏ Crone
အစောပိုင်းလူကြီးဖို့ကလေးဘဝထဲကနေတစ်ဦးကစွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏သုံးနှစ် longitudinal အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုနှင့်စမ်းသပ်-retest ယုံကြည်စိတ်ချရ
ဂျေ neuroscience ။ , 31 (11) (2011), စစ။ 4204-4212
Ladouceur et al ။ , 2012
CD ကို Ladouceur, JS Peper, EA ၏ Crone, RE Dahl
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ ,2(1) (2012), စစ။ 36-54
Lau et al ။ , 2012
JYF Lau, AE Guyer, eb Tone, ဂျေ Jenness, JM Parrish, DS ထင်းရူး, EE နယ်လ်ဆင်
int ။ ဂျေပြုမူနေ။ dev ။ , 36 (2012), စစ။ 36-44
Laucht et al ။ , 2007
အမ် Laucht, MH Skowronek, K. Becker က, MH Schmidt က, G. အ Esser, TG Schulz, အမ် Rietschel
high-အန္တရာယ်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာကနေ 15 နှစ်အရွယ်အကြား toms symp- အာရုံကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအပေါ် dopamine Transporter ဗီဇနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 64 (2007), စစ။ 585-590
Laxton et al ။ , 2013
AW Laxton, JS Neimat, KD Davis က, T. Womelsdorf, WD ဟက်, Jo Dostrovsky, Am ဝီလိုဇာနို
စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် subcallosal cortex အတွက်သွယ်ဝိုက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားအာရုံခံနိုင်တဲ့ coding
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 74 (10) (2013), စစ။ 714-719
Lee က et al ။ , 2015
လေးလီ LH Tai, အေ Zador, အယ်လ် Wilbrecht
အဆိုပါမျောက်နဲ့ 'reptilian' 'ဦးနှောက်အကြား: ကြွက်မော်ဒယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက် corticostriatal ဆားကစ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုသရုပ်ပြ
neuroscience, 296 (2015), စစ။ 66-74
Lee က et al ။ , 2014
KH Lee က, GJ Siegle, RE Dahl, JM Hooley, JS ပိုး
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ (2014), p ။ nsu133
Lenroot နှင့် Giedd, 2010
RK Lenroot, ဖြစ်မှု Giedd
ဦးနှောက် Cogn ။ , 72 (1) (2010), စစ။ 46-55
Lenroot et al ။ , 2009
RK Lenroot, je Schmitt, SJ Ordaz, GL Wallace, MC Neal, JP Lerch, et al ။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့ဆက်စပ်လူ့ဦးနှောက် cortex အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုအတွက်ကွာခြားချက်များ
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ , 30 (2009), စစ။ 163-174
lu et al ။ , 2009
LH လူး, အမ် Dapretto, ED အိုဟဲ, အီးကံ, ST McCourt, ညနေ Thompson က ER Sowell
ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးငယ်များအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအကြားဆက်ဆံရေး
Cereb ။ cortex, 19 (11) (2009), စစ။ 2595-2604
Macdonald နှင့် Leary, 2005
G. အ Macdonald, MR Leary
Psychol ။ နွားလား။ , 131 (2) (2005), စစ။ 202-223
Maheu et al ။ , 2010
FS Maheu, အမ် Dozier, AE Guyer, ဃကထပ်လောင်း, အီး Peloso, K. Poeth, အမ် Ernst
စောင့်ရှောက်သူများဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျစ်လျူရှုတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူလူငယ်အချို့အတွက် medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး function ကိုတစ်ပဏာမလေ့လာမှု
Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 10 (1) (2010), စစ။ 34-49 http://dx.doi.org/10.3758/CABN.10.1.34
Manuck et al ။ , 2007
SB Manuck, SM ဘရောင်း, EE Forbes မဂ္ဂဇင်း, AR Hariri
amygdala reactivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏ယာယီတည်ငြိမ်ရေး
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 164 (2007), စစ။ 1613-1614
Masten et al ။ , 2011
CL Masten, ni Eisenberger, LA က Borofsky, K. McNealy, JH Pfeifer, အမ် Dapretto
သက်တူရွယ်တူငြင်းပယ်ခံရဖို့ Subgenual anterior cingulate တုံ့ပြန်မှု: စိတ်ကျရောဂါများအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' အန္တရာယ်တစ်ခုအမှတ်အသား
dev ။ Psychopathol ။ , 23 (1) (2011), စစ။ 283-292 http://dx.doi.org/10.1017/S0954579410000799
Masten et al ။ , 2012
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်သုံးစွဲအချိန်အကြာသက်တူရွယ်တူငြင်းပယ်ခံရဖို့လျော့နည်းအာရုံကြော sensitivity ကိုမှပြောပြတယ်
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ ,7(1) (2012), စစ။ 106-114
Masten နှင့် Obradovic, 2006
Masten, ဂျေ Obradovic AS
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1094 (2006), စစ။ 13-27 http://dx.doi.org/10.1196/annals.1376.003
မော်ဂန် et al ။ , 2014
JK မော်ဂန်, DS ကို Shaw, EE Forbes မဂ္ဂဇင်း
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းမိခင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်နွေးထွေးမှုဆုချမှအသက် 20 အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း
ဂျေ Am ။ Acad ။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ , 53 (1) (2014), စစ။ 108-117
Muñoz-Cuevas et al ။ , 2013
FJ Muñoz-Cuevas, ဂျေ Athilingam, ဃ Piscopo, အယ်လ် Wilbrecht
တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်
နတ်။ neuroscience ။ , 16 (10) (2013), စစ။ 1367-1369
ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: ဦးနှောက်အပေါ်အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှု: မျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ
ဂျေ Apple က။ Physiol ။ , 91 (2001), စစ။ 2785-2801
McLaughlin et al ။ , 2014
Ka McLaughlin, MA Sheridan, ဒဗလျူဆောင်းရာသီ, NA Fox က, CH Zeanah,, CA နယ်လ်ဆင်
ပြင်းထန်အစောပိုင်းဘဝဆင်းရဲချို့တဲ့အောက်ပါ cortical ထူများတွင်ကျယ်ပြန့်လျှော့ချ: အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါတစ်ခု neurodevelopmental လမ်းကြောင်း
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 76 (8) (2014), စစ။ 629-638 http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.08.016
မိခင်စောင့်ရှောက်မှု, မျိုးဗီဇစကားရပ်နှင့်အစဉ်အဆက်ကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏ဂီယာ
Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ , 24 (2001), စစ။ 1161-1192 http://dx.doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.116124/1/1161.[pii]
Meyer-Lindenberg နှင့် Weinberger, 2006
A. အ Meyer-Lindenberg, DR Weinberger
အလယ်အလတ် phenotypes နှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏မျိုးရိုးဗီဇယန္တရားများ
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ ,7(10) (2006), စစ။ 818-827
Miller က et al ။ , 2002
ကို MB Miller က JD ဗန်ချို, GL Wolford, TC နေရာလေးကို, အမ် Valsangkar-စမိုက်, အက်စ် Inati, အက်စ် Grafton, က MS Gazzaniga
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 14 (2002), စစ။ 1200-1214
Miller က et al ။ , 2009
ကို MB Miller က CL ဒိုနိုဗန်, JD ဗန်ချို, အီးဂျာမန်, P. Sokol-Hessner, GL Wolford
NeuroImage, 48 (2009), စစ။ 625-635
Monahan et al ။ , 2015
K. Monahan, AE Guyer, ဂျေပိုး, T. Fitzwater, ld Steinberg
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience နှင့်ဆက်စပ်၏ပေါင်းစည်းမှုဆယ်ကျော်သက် psychopathology ၏လေ့လာမှုမှချဉ်းကပ်
ဃ Cicchetti (Ed က။ ), Developmental Psychopathology (3rd Ed က။ ), Wiley (2015)
ဘုန်းတော်ကြီး et al ။ , 2006
CS ရဟန်းတော်, EE နယ်လ်ဆင်, eb လူယာ, K. Mogg, ကို BP Bradley, အီး Leibenluft, DS ထင်းရူး
generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်နှာများတုံ့ပြန် Ventrolateral prefrontal cortex activation နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 163 (6) (2006), စစ။ 1091-1097 http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.163.6.1091
ဘုန်းတော်ကြီး et al ။ , 2008
CS ရဟန်းတော်, Eh Telzer, K. Mogg, ကို BP Bradley, X တို့မှာမိုင်, HM Louro, DS ထင်းရူး
generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အမျက်ထွက်မျက်နှာများရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ဖို့ prefrontal cortex activation Amygdala နှင့် ventrolateral
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 65 (5) (2008), စစ။ 568-576 http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.65.5.568
စာနယ်ဇင်းများတွင် Moore နဲ့ Depue,
Moore, SR, & Depue, RA Neurobehavioral ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ
နာဂအိ et al ။ , 2010
အမ်နာဂအိ, အက်စ် Hoshide, K. Kario
အဆိုပါနောက်ကျနေခဲ့သည် cortex နဲ့နှလုံးသွေးကြောစနစ်က: ဦးနှောက်ကို-နှလုံးဝင်ရိုးသို့သစ်တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဂျေ Am ။ Soc ။ Hypertens ။ ,4(4) (2010), စစ။ 174-182
Nelson နှင့် Guyer, 2011
EE နယ်လ်ဆင်, AE Guyer
အဆိုပါ ventral prefrontal cortex နှင့်လူမှုရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 1 (3) (2011), စစ။ 233-245 http://dx.doi.org/10.1016/j.dcn.2011.01.002
EE နယ်လ်ဆင်, အီး Leibenluft, eb လူယာ, DS ထင်းရူး
Psychol ။ Med ။ , 35 (2) (2005), စစ။ 163-174 http://dx.doi.org/10.1017/S0033291704003915
Orrù et al ။ , 2012
G. အOrrù, ဒဗလျူကို Pettersson-Yeo, AF Marquand, G. အ Sartori, အေ Mechelli
အာရုံကြောနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါပုံရိပ် biomarkers သိရှိနိုင်ဖို့ထောက်ခံမှုအားနည်းချက်ကိုစက်အသုံးပြုခြင်း: တစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 36 (4) (2012), စစ။ 1140-1152
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇ: ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူမှ dopamine function ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
Parkhurst နှင့် Hopmeyer, 1998
JT Parkhurst, အေ Hopmeyer
Sociometric လူကြိုက်များနှင့်သက်တူရွယ်တူ-ရိပ်မိလူကြိုက်များ: သက်တူရွယ်တူအနေအထားကိုနှစ်ဦးကွဲပြားရှုထောင်
ဂျေအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်။ , 18 (2) (1998), စစ။ 125-144
Horm ။ ပြုမူနေ။ , 64 (2) (2013), စစ။ 195-202
Neuroimage, 82 (2013), စစ။ 23-34 http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.05.061
Pecina et al ။ , 2013
အမ် Pecina, BJ ကို Mickey, တီမတ်ေတာ, အိပ်ချ်ဝမ်, SA Langenecker, C. Hodgkinson, JK Zubieta
DRD2 polymorphic အတွေ့အကြုံဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့, dopamine neurotransmission နှင့်ပွင့်လင်း modulate
cortex, 49 (3) (2013), စစ။ 877-890 http://dx.doi.org/10.1016/j.cortex.2012.01.010
Perez-Edgar et al ။ , 2007
K. Perez-Edgar, R. Roberson-နေအောင်, MG Hardin, K. Poeth, AE Guyer, EE နယ်လ်ဆင်, et al ။
အာရုံစူးစိုက်မှုအပြုအမူဘယျလိုမှမြီးကောင်ပေါက်အတွက် evocative မျက်နှာများမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ
Neuroimage, 35 (2007), စစ။ 1538-1546
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ , 16 (6) (2012), စစ။ 322-329 http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2012.04.011
EA ၏ Phelps
လူ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်: အ amygdala ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့် hippocampal ရှုပ်ထွေးသော
Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ , 14 (2) (2004), စစ။ 198-202
Phelps နှင့် LeDoux, 2005
EA ၏ Phelps, je LeDoux
စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖို့ amygdala ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်လူ့အပြုအမူမှ
အာရုံခံဆဲလျ, 48 (2) (2005), စစ။ 175-187
(စာနယ်ဇင်းအတွက်) Pluess, အမ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် sensitivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ ကလေးသူငယ် Dev မှ။ ရှုထောင့်.
Pluess နှင့် Belsky, 2013
အမ် Pluess, ဂျေ Belsky
Vantage sensitivity ကို: အပြုသဘောအတွေ့အကြုံများမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
Psychol ။ နွားလား။ , 139 (4) (2013), စစ။ 901-916
ပါဝါစ et al ။ , 2010
JD Power က, DA တရားမျှတသော, BL Schlaggar, အရှေ့တောင် Petersen
အာရုံခံဆဲလျ, 67 (2010), စစ။ 735-748
အင်အားကြီး et al ။ , 2013
Ke အင်အားကြီးနိုင်ငံများ, LH Somerville, WM ကယ်လီ, TF Heatherton
လူမှုရေးတုံ့ပြန်ချက်ထားချက်အရသည့်အခါငြင်းပယ်ခံရ sensitivity ကို striatal-medial prefrontal လှုပ်ရှားမှု polarizes
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 25 (11) (2013), စစ။ 1887-1895
Redlich et al ။ , 2015
R. Redlich, ဃ Grotegerd, N. Opel, C. Kaufmann, P. Zwitserlood, အိပ်ချ် Kugel, U. Dannlowski
သငျသညျဂုဏ်နငါ့ကိုထားခဲ့ပါဖြစ်ပါသလား ခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်တိုးချဲ့ amygdala တုန့်ပြန်နဲ့ volume နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ , 10 (2015), စစ။ 278-284
ဆန် et al ။ , 2014
K. ဆန်, ခ Viscomi, T. Riggins, အီး Redcay
အစောပိုင်းကလေးဘဝနှင့်လူကြီးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အခြအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဆက်စပ် Amygdala အသံအတိုးအကျယ်
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 8 (2014), စစ။ 153-163
Roisman et al ။ , 2012
GI Roisman, DA Newman က, RC Fraley, JD Haltigan, Am Groh, KC Haydon
diathesis-စိတ်ဖိစီးမှုကနေ differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်ကွဲပြားခြားနားသွား: အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်များအတွက်အကြံပြုချက်များ
dev ။ Psychopathol ။ , 24 (02) (2012), စစ။ 389-409
RD Romeo, HN Richardson က CL Sisk
အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အထီးဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရငျ့: တစ်အပြုအမူအလားအလာ Recasting
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 26 (2002), စစ။ 381-391
Rubin က et al ။ , 1998
KH Rubin က, ဒဗလျူ Bukowski, JG က Parker
interaction ကဆက်ဆံရေးနှင့်အုပ်စုများ Peer
ဒဗလျူ Damon (Ed က။ ), ကလေးစိတ်ပညာ (ပဉ္စမ ed ။ ) ၏လက်စွဲစာအုပ်, Wiley, နယူးယောက် (1998), စစ။ 619-700
Rubin က et al ။ , 2009
KH Rubin က, RJ Coplan, JC Bowker
အမ်း။ ဗျာ Psychol ။ , 60 (2009), စစ။ 141-171
context ကိုယ်စားပြု, အခြေအနေတွင် functions များ, နှင့် parahippocampal-hippocampal စနစ်က
လေ့လာပါ။ Mem ကို။ , 16 (10) (2009), စစ။ 573-585
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 109 (ပျော့ပျောင်း 2) (2012), စစ။ 17149-17153
Rutter et al ။ , 2006
အမ် Rutter, TE Moffitt, အေ Caspi
မျိုးဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှုတွေနှင့် psychopathology: မျိုးစုံမျိုးပေါင်းပေမယ့်အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ဂျေကလေး Psychol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 47 (3-4) (2006), စစ။ 226-261 http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01557.x
Sauder et al ။ , 2013
CL Sauder, G. အ Hajcak, အမ် Angstadt, KL ဖန်
စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာများမှ amygdala တုံ့ပြန်မှု test-retest ယုံကြည်စိတ်ချရ
Psychophysiology, 50 (11) (2013), စစ။ 1147-1156
Schacter နှင့် Addis, 2007
အပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ဉာဏ်၏သိမြင်မှုမှ neuroscience: အတိတ် Remembering နှင့်အနာဂတ်စိတ်ကူးယဉ်
ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ , 362 (1481) (2007), စစ။ 773-786
Scharinger et al ။ , 2010
C. Scharinger, U. Rabl, နာရီစစ်, အယ်လ် Pezawas
ခံစားချက်မမှန်၏ imaging မျိုးရိုးဗီဇ
Neuroimage, 53 (3) (2010), စစ။ 810-821
Schneider et al ။ , 2014
P. Schneider, C. Hannusch, C. Schmahl, အမ် Bohus, R. Spanagel, အမ် Schneider
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တူ-ငြင်းပယ်ခံရဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်နာကျင်မှုအမြင်နှင့် CB1 အဲဒီ receptor စကားရပ်ပွောငျးလဲ
အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ , 24 (2) (2014), စစ။ 290-301
အက်စ် Schneider, အက်စ် Brassen, U. Bromberg, T. Banaschewski, P. Conrod, အိပ်ချ် Flor, C. Buchel
Maternal လူ့ဆက်နွယ်မှုမြီးကောင်ပေါက် '' ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
ဘာသာပြန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု,2(2012), p ။ e182 http://dx.doi.org/10.1038/tp.2012.113
Segalowitz et al ။ , 2012
SJ Segalowitz, DL Santesso, T. Willoughby, DL Reker, K. ကမ့်ဘဲလ်, အိပ်ချ် Chalmers, အယ်လ်နှင်းဆီ-Krasnor
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တူအပြန်အလှန်နှင့်ရို surgency ပျက်ကွက်ဖို့ medial prefrontal cortex တုံ့ပြန်မှုအားနည်းစေ
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ ,7(1) (2012), စစ။ 115-124 http://dx.doi.org/10.1093/scan/nsq090
ရှိမုန်နှင့် Moghaddam, 2015
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 11 (2015), စစ။ 145-154
Siviy et al ။ , 2011
serotonin, လှုံ့ဆျောမှု, နှင့်လူငယ်ကြွက်ကစား
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 1 (4) (2011), စစ။ 606-616
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 23 (2011), စစ။ 2123-2134
လူမှုရေးအကဲဖြတ်ဖို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် sensitivity ကို
Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 22 (2) (2013), စစ။ 121-127
Somerville et al ။ , 2006
LH Somerville, TF Heatherton, WM ကယ်လီ
anterior cingulate cortex မျှော်မှန်းချိုးဖောက်မှုနှင့်လူမှုရေးငြင်းပယ်ခံရဖို့ differential တုံ့ပြန်
နတ်။ neuroscience ။ ,9(2006), စစ။ 1007-1008
ဆုလာဘ်များ, ဆန္ဒရှိနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ: ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်အအနှံ့လွန်မြောက် convergence နှင့်လူ့ဒေတာ
ပီးလ်ဘာ့ဂ် et al ။ , 2015
JM ပီးလ်ဘာ့ဂ်, JM Jarcho, RE Dahl, DS ထင်းရူး, အမ် Ernst, EE နယ်လ်ဆင်
စိုးရိမျမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ရွယ်တူအကဲဖြတ်၏မျှော်လင့်: အာရုံကြော activation အတွက်မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ရငျ့
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ , 10 (8) (2015), စစ။ 1084-1091
Biol ။ ဗျာ (2015) http://dx.doi.org/10.1111/brv.12186
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်
dev ။ ဗျာ, 28 (1) (2008), စစ။ 78-106 http://dx.doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002
Steinberg နဲ့မောရစ်, 2001
မောရစ် AS အယ်လ် Steinberg,
Annu ။ ဗျာ Psychol ။ , 52 (2001), စစ။ 83-110 http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.83
Stevens နှင့် Vaccarino, 2015
သူ Stevens, FM ရေ Vaccarino
ဘယ်လိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက် Psychiatry အကြောင်းကြား
ဂျေ Am ။ Acad ။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 54 (5) (2015), စစ။ 352-359
br ။ Med ။ နွားလား။ , 53 (1997), စစ။ 170-184
Tan က et al ။ , 2007
hy Tan ကမည်သို့ Chen ကအက်စ် Sust, JW Buckholtz, JD Meyer, MF Egan, et al ။
အလုပ်လုပ်မှတ်ဥာဏ်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ် catechol-O-methyltransferase နှင့်အမျိုးအစား II ကို metabotropic အချိုမှု receptor3ဗီဇအကြား Epistasis
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 104 (2007), စစ။ 12536-12541
Tan က et al ။ , 2014
PZ Tan က KH Lee က RE Dahl, EE နယ်လ်ဆင်, LJ Stroud, GJ Siegle, JS ပိုး
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 8 (2014), စစ။ 28-39 http://dx.doi.org/10.1016/j.dcn.2014.01.006
တေလာ et al ။ , 2006
အရှေ့တောင်တေလာ, ni Eisenberger, ဃ Saxbe, BJ Lehman, MD Lieberman
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 60 (3) (2006), စစ။ 296-301 http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.09.027
Telzer et al ။ , 2013a
အဓိပ္ပါယ်ရှိသောမိသားစုဆက်ဆံရေး: ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏ Neurocognitive ကြားခံ
ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ , 25 (3) (2013), စစ။ 374-387
Telzer et al ။ , 2013b
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ ,3(2013), စစ။ 45-52 http://dx.doi.org/10.1016/j.dcn.2012.08.004
Telzer et al ။ , 2014a
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 111 (18) (2014), စစ။ 6600-6605
Telzer et al ။ , 2014b
Eh Telzer, AJ Fuligni, MD Lieberman, ME Miernicki, အေသွပ်ရည်စိမ်
မြီးကောင်ပေါက် '' သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေမှအာရုံကြော sensitivity ကို modulates
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ (2014), p ။ nsu064
အဖြူနှင့်လက်တင်လူငယ်များအကြားမိသားစုအကူအညီများ၏ဆုလာဘ်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု: ပေးခြင်းစဉ်ရရှိမှု
Soc ။ neuroscience ။ ,5(5-6) (2010), စစ။ 508-518 http://dx.doi.org/10.1080/17470911003687913
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောဒေသများမိသားစုဆီသို့ဦးတည် prosocial အပြုအမူတွေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းနေကြသည်
Neuroimage, 58 (1) (2011), စစ။ 242-249
Todd et al ။ , 2012
RM Todd, WA Cunningham, AK Anderson တို့, အီး Thompson က
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ , 16 (7) (2012), စစ။ 365-372
စပါး et al ။ , 2010
N. စပါး, T. Hare, ခ Quinn, T. McCarry, အမ်သူနာပြု, T. Gilhooly, et al ။
အချိန်ကြာမြင့်စွာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမွေးမြူစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းထဲမှာ atypically ပိုကြီး amygdala အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
dev ။ သိပ္ပံ။ , 13 (2010), စစ။ 46-61
ဗန်တွင်း Bos et al ။ , 2011
ဒဗလျူဗန်တွင်း Bos, အီးဗင် Dijk, အမ် Westenberg, SARB Rombouts, EA ၏ Crone
အမြင်များကိုပြောင်းလဲ, ဦးနှောက်ပြောင်းခြင်း: အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု၏ neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 22 (2011), စစ။ 60-70
အယ်လ် et အစုလိုက်ဗန်တွင်း။ , 2013
BG ဗန်တွင်းအစုလိုက်, PCMP Koolschijn, PH ကို Meens, အဲန်ဒီဗန် Lang, NJ ဗန် der Wee, SA Rombouts, EA ၏ Crone
activation မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် amygdala နှင့် prefrontal cortex ဘယ်လောက်တည်ငြိမ် ?. သုံးတိုင်းတာတလွှားစိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအပြောင်းအလဲနဲ့၏လေ့လာမှုတစ်ခု
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ ,4(2013), စစ။ 65-76
ဝါတော် et al ။ , 2011
RA ဝါတော်, DS ထင်းရူး, JM စူးသောဆူး, TE နယ်လ်ဆင်, အက်စ် Spinelli, အီးနယ်လ်ဆင်, SH Mostofsky
အပြုသဘော valenced ပုံ encoding ကနေစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက် Enhanced ညာဘက် amygdala လှုပ်ရှားမှု
dev ။ Cogn ။ neuroscience ။ , 1 (1) (2011), စစ။ 88-99
ver Hoeve et al ။ , 2013
Hoeve, G. အကယ်လီ, အက်စ်လုဇမြို့တည်းဟူသော, အက်စ် Ghanshani, အက်စ် Bhatnagar ver ES
အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်လူကြီးကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်၏က Short-term များနှင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
neuroscience, 249 (2013), စစ။ 63-73
ဗွန် der စစျ et al ။ , 2014
R. von der စစျ, G. အ Vyas, IR Olson
အဆိုပါလူမှုကွန်ယက်-ကွန်ယက်ကို: အရွယ်အစားဟာ amygdala နှင့် paralimbic ဒေသများတွင်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုတို့ကခန့်မှန်းနေသည်
Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ ,9(12) (2014), စစ။ 1962-1972
Weintraub et al ။ , 2010
A. အ Weintraub, ဂျေ Singaravelu, အက်စ် Bhatnagar
အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုပေါ်ကြွက်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်လူမှုရေးအထီးကျန်ခံနိုင်ရည်နဲ့လိင်-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ
ဦးနှောက် Res ။ , 1343 (2010), စစ။ 83-92
Whittle et al ။ , 2011
အက်စ် Whittle, ကို MB Yap, အယ်လ် Sheeber, P. Dudgeon, အမ် Yucel, C တို့ဘောင်းဘီ, NB Allen က
မိခင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူမှ Hippocampal အသံအတိုးအကျယ်နှင့် sensitivity ကို: ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်အလားအလာလေ့လာမှု
dev ။ Psychopathol ။ , 23 (1) (2011), စစ။ 115-129 http://dx.doi.org/10.1017/S0954579410000684
Whittle et al ။ , 2008
အက်စ် Whittle, ကို MB Yap, အမ် Yucel, အေ Fornito, JG Simmons, အေ Barrett, NB Allen က
Prefrontal နှင့် amygdala volumes ကိုမိဘ-ဆယ်ကျော်သက် interaction ကနေစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက် '' ကိုထိခိုက်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတာ
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ အမေရိကန်, 105 (9) (2008), စစ။ 3652-3657 http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0709815105
ဝီလျံနှင့် Jarvis, 2006
KD Williams က, ခ Jarvis
ပြုမူနေ။ res ။ နည်းလမ်းများ, 38 (1) (2006), စစ။ 174-180
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ ,5(6) (2004), စစ။ 483-494
Wöhr et al ။ , 2009
အမ်Wöhr, အမ် Kehl, အေ Borta, အေSchänzer, RKW Schwarting, Gu Höglinger
နယူး neurogenesis ၏ဆက်ဆံရေးသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ: ကလိခြင်းအစာစားချင်စိတ် 50-kHz ultrasonic အသံ emitting ကြွက်များတွင် hippocampal ဆဲလ်ပြန့်ပွား induces
neuroscience, 163 (4) (2009), စစ။ 1024-1030
ဝံပုလွေ et al ။ , 2008
အမ် Wolf က, GS ဗန်ဒေါန်, FJ Weiss
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 105 (2008), စစ။ 15825-15830
ဝူ et al ။ , 2014
CC ကိုဝူ, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း Samanez-လာကင်, K. Katovich, ခ Knutson
NeuroImage, 84 (2014), စစ။ 279-289
Yamamuro et al ။ , 2010
T. Yamamuro, K. Senzaki, အက်စ် Iwamoto, Y. Nakagawa, T. Hayashi, အမ်ဟောရိ, O. Urayama
အပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆွ tickling နေဖြင့်တိုးမြှင့်ကြွက် hippocampus ၏ dentate gyrus အတွက် Neurogenesis
neuroscience ။ res ။ , 68 (4) (2010), စစ။ 285-289
Yap et al ။ , 2008
ကို MB Yap, အက်စ် Whittle, အမ် Yucel, အယ်လ် Sheeber, C တို့ဘောင်းဘီ, JG Simmons, NB Allen က
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 65 (12) (2008), စစ။ 1377-1385 http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.65.12.1377
ယု et al ။ , 2014
မည်သို့ယု, CM Teixeira, ဃ Mahadevia, Y. Huang က, ဃဗာလစံ, JJ မန်းက MS Ansorge
နှစ်ခုအထိခိုက်မခံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းမှာ Dopamine နှင့် serotonin အချက်ပြ differential ကြွက်တွေမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူရန်လိုခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုအမူတွေကို impact
Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 19 (6) (2014), စစ။ 688-698
Zielinski et al ။ , 2010
BA ဘွဲ့ Zielinski, ED Gennatas, ဂျေ Zhou, WW Seeley
ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ထဲမှာ network-level ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ covariance
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 107 (42) (2010), စစ။ 18191-18196
Zubin et al ။ , 1991
ဂျေ Zubin, RS Feldman, အက်စ် Salzinger
schizophrenia များ၏ etiology များအတွက်တစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်
WM Grove, ဃ Cicchetti (Eds ။ ), စိတ်ပညာအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစား: Vol ။2ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် psychopathology: ရှင်ပေါလုအီး Meehl, Univ ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အက်ဆေး။ မင်နီဆိုတာစာနယ်ဇင်း, Minneapolis, MN (1991), စစ။ 410-429 ၏
Zuo et al ။ , 2010
XN Zuo, C. ကယ်လီ, JS Adelstein, DF Klein, FX Castellanos, အမတ် Milham
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခ်ါဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များ: နှင့် ICA ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်-retest အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် dual-ဆုတ်ယုတ်ချဉ်းကပ်
NeuroImage, 49 (2010), စစ။ 2163-2177
သက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာများ။ စိတ်နှင့်ဦးနှောက်, ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Davis က, 267 Cousteau ရာဌာန, Davis ကကယ်လီဖိုးနီးယား, 95618, ယူနိုက်တက်စတိတ်လျ .: + 1 530 297 4445 စင်တာ။
Elsevier, Ltd. ထုတ်ဝေသည်မူပိုင်ခွင့်© 2016